RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) တွစ်တာ၊ စာမျက်နှာ ၂ - ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်လိုလားသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောမည်သူမဆိုကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ တွစ်တာအကောင့်တွင်ပူးပေါင်းကြသည် - သင်၏ Brain On Porn
RealYBOP twitter (@BrainOnPorn) နှင့် www.realyourbrainonporn.com (ကမှတ်ပုံတင် ဒံယလေသ Burgess) က tools များအဖြစ်တီထွင်ခဲ့ကြသည် နီကိုးလ် Prause သင်၏ ဦး နှောက်ကို Porn၊ Gary Wilson နှင့်တိုက်ခိုက်ရန် အခြားမည်သူမဆို အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဝေဖန်သို့မဟုတ်ထောက်ပြသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ဆိုးကျိုးများ.
ဤသည်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာ ၂ ဖြစ်သည် ဒုတိယ RealYBOP tweets ၏နှစ်။ ဤစာမျက်နှာသည် RealYBOP ၏ပထမနှစ်ဖြစ်သည် နှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်များ (ဥပမာတရား ၀ င်အရေးယူမှုများ၊ RealYBOP Twitter ကဲ့သို့သောအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်) အခြေအနေများနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ကျယ်ပြန့်သောနိဒါန်းပါ ၀ င်သည်။ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကပေးဆောင်ခံရ) ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတရား ၀ င်အရေးယူမှုများကြောင့် YBOP သည်မည်သည့်အရာကိုကောက်ယူရမည် @BrainOnPorn tweets ။
စဉ် ဒံယလေသ Burgess အမှန်တကယ်ယုံကြည်ရသောအထောက်အထားအချက်အလက်များဖြစ်သော RealYBOP URL (www.RealYourBrainOnPorn.com) ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် Nicole Prause သည် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တွစ်တာအကောင့်ကို ဖန်တီး၍ လည်ပတ်သည်.
RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောသူတို့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုအမြဲတစေပြုလုပ်သည် (ပထမနှစ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ ၈၀၀ ကျော်) ။ ဘယ်သူ့အတွက်တရားဝင်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်တယ် @BrainOnPorn's ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်? အဲဒါပဲ နီကိုးလ် Prauseသို့မဟုတ်နောက်ကွယ်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်၏ယခင်ပိုင်ရှင် (များ) သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အားလုံးနိုင်ဘူး RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" တရားဝင်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်ရှိပါသလား
ဤမေးခွန်းသည်အသေးအဖွဲမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ Prause နှင့် RealYBOP တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုနှစ်ခုအတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်။ စင်စစ်အားဖြင့် RealYBOP တွစ်တာအတော်များများသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်အခြား Prause နှင့် RealYBOP တွစ်တာ၏သားကောင်များမှတင်ပြသောကျမ်းကျိန်လွှာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ကျမ်းကျိန်လွှာ # 1, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 2, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 3, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 4, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 5, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 6, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 7, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 8, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 9, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 10, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 11, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 12, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 13, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 14, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 15, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 16).
နောက်ဆုံးသတင်းများ (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည် Prause အားကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်သည်. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ဖြင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အဂတိလိုက်စားမှုအရတရားရုံးက Prause ကကျွန်ုပ်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်မိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည် (သို့သော်သူမကြိုးစားနေသည်) ငါ့ကိုပေးဆပ်ကြပါ).
ရီးရဲလ်သင့်ရဲ့ BrainOnPorn (@BrainOnPorn) tweets, ဒုတိယနှစ် (2ပြီ 17, 2020, အစ)
မှတ်စု: စက်တင်ဘာလ, 2020 ခုနှစ်တွင် @BrainOnPorn YBOP ၏ထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်ချက်မပေးပဲမှတ်ချက်ပေးရန် -YBOP အကောင့်တစ်ခုအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအမှတ်အသားပြုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ Prause သည် Anti-Your Brain On Porn ကိုသုံးခဲ့သည်။@BrainOnPornတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် tweets ၁၀၀၀ ခန့်) သည်အမျိုးမျိုးသောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသရေဖျက်ရန်နှင့်လိမ်ရန်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည် ၎င်း၏တည်ရှိမှု၏ပထမ ဦး ဆုံး 16 လ) ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သားနှင့်သူ့အမေကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာစေပြီးသူတို့နှစ် ဦး စလုံးအားအယုံအကြည်ကင်းမဲ့စွာအလုပ်လုပ်စဉ်၊ သူတို့နေထိုင်ခဲ့ရာနေရာကိုတွစ်တာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ @BrainOnPorn အဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထောက်ပံ့။ RealYBOP တွစ်တာအများစုသည်အလွန်ညစ်ညမ်းသော၊ အသရေပျက်စေသောကြောင့်ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 20, 2020ဖြေ - လူသိများတဲ့ tweets နှစ်ခု ဇစ်မြစ် ၂၀၁၁ မှာ reddit / nofap of reddit / nofap ပါ။ သေချာတာပေါ့၊ အမျိုးသားတွေဟာ ၇ ရက်ကြာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ် တရုတ်လေ့လာမှု, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာသော 16 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့တိုင်း, နှင့်ဆူးဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည့်အခါ7ပတ်ပတ်လည်သည်အထိအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေကမကြာခင်မှာပဲ porn ဟာသူတို့ရဲ့ပြissueနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ The နှစ်ခု Nofap က်ဘ်ဆိုက်များ porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်၏သုတေသနသည်အချိန်ကုန်လာသည်နှင့်အမျှဆုံးရှုံးသွားသည်။
RealYBOP သည် Nofap ကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားနေဆဲဖြစ်သည် @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်!
အောက်တွင် RealYBOP သည် PornHub ပိုင်ရှင် Mindgeek ကို Laila Mickelwait မှအောက်ပါ tweet များကိုတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားသည်။ (Mickelwait ရဲ့ တရားမ ၀ င်သောတရားမဝင်သောအကြောင်းအရာများအတွက် PornHub အားတာ ၀ န်ယူရန်အသနားခံစာ ၎င်း၏ site ကိုမှတင်ခဲ့သည်လက်မှတ်ပေါင်းတစ်သန်းကျော်စပါးကိုရိတ်လိုက်ပြီ။ )
Pornhub ကိုပိုင်တဲ့ Mindgeek ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကျွန်တော့်ကိုစလိုက်ပါတယ်။ ငါအကြောင်း Tweet လုပ်ပြီးနောက်သူသည်သူ၏အမည်နှင့်တည်နေရာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ #Traffickinghub pic.twitter.com/9NhOMMMFxZ
Mindgeek ၏စီအီးအိုကိုခုခံကာကွယ်နေစဉ် RealYBOP သည် Laila ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ မှတ်ချက် - ဒီအကောင့်ကို Mindgeek ရဲ့စီအီးအိုနဲ့မတူတဲ့အခါ RealYBOP ကလိမ်ပါတယ်။ (၎င်းသည်တည်ရှိကြောင်းထပ်ဆင့်အထောက်အထား။ )
ဤတွင် RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီးလေ့လာမှုများကိုလိမ်ပြီးစိန်ခေါ်သည့်အခါသူ့ကိုပိတ်ဆို့စေသည်။
RealYBOP အပိုင်းသည်ဤနေရာတွင်ယိုယွင်းခဲ့သည် Erectile ပြီးတော့အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ပုဒ်မ။
နောက်ဆုံးရလဒ်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ RealYBOP ကကြောက်နေတယ်။
ထိုနေ့တွင် ၄ ကြိမ်မြောက်အချိန်တွင် RealYBOP သည် YBOP အကြောင်းဖော်ပြသောချည်နှောင်ထားသောမှတ်ချက်များကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။
RealYBOP သည် YBOP တွင်တည်ရှိပြီး၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တရားစွဲဆိုသည့်လိမ်လည်မှု (သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲပုံရသည်) RealYBOP အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Prause / RealYBOP သည် YBOP ရှိစာမျက်နှာနှင့်တစ်ခါမျှ“ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်” ဥပမာတစ်ခုကိုတစ်ခါမျှမဖော်ပြဖူးပါ။ အဖြစ်မှန်:
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏မှားယွင်းစွာတင်ပြမှု။ RealYBOP ၏တွစ်တာတွင်ရွေးချယ်ထားသည့်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းအပေါ်မှားယွင်းစွာထင်မြင်စေသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့ဘူး.
ဧပြီလ 21, 2020: ချီးမွမ်း Alex Rhodes မှအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရ။ ဤတွင် Prause သည် Alex Rhodes နှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ (NoFap) ကိုတိုက်ခိုက်ရန် / ရှုတ်ချရန် RealYBOP အကောင့်ကိုအသုံးပြုသည်။
RealYBOP မှကျွန်ုပ်အကြောင်းတစ်နေ့တာ၏ ၅ ကြိမ်မြောက်တွစ်တာ။ ငါလေ့လာမှုတစ်ခုတွစ်တာလုပ်တဲ့အခါဒါကရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါဘယ်လိုတိကျစွာကျူးလွန်ခဲ့တာလဲ လိမ်ညာမှုတဖန်တုံ၊
လေ့လာမှုကိုကျွန်ုပ်၏ link ။ RealYBOP သည်အင်္ဂလိပ်စာကဲ့သို့ပင်တည်ရှိသည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိသောဖြစ်ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအကြားအသုံးအများဆုံးရောဂါရှာဖွေဖတ်စာအုပ်များတွင်ရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းမပြုသော်လည်းနည်းပညာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်လူ ဦး ရေတွင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ပို၍ သိသာထင်ရှားပြီးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုကျင့်သုံးသည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ကွဲပြားသောနည်းများဖြင့်အထီးကျန်လူ ဦး ရေတွင်အထင်အရှားတွေ့နိုင်သည်။ ဤစာတမ်းသည်ကောလိပ်စိတ်ပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးပြုခြင်း၊ တစ် ဦး သိမြင်မှုအမူအကျင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အသုံးပြုမဟာဗျူဟာများနှင့်အမှု၌သူတို့ထိရောက်မှုကိုဖော်ပြထား, တက္ကသိုလ်လူ ဦး ရေအတွက်အမူအကျင့်စွဲ၏ဖြစ်နိုင်သောသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။
ဘာ cyberstalker လဲ
RealYBOP သည် NCOSE ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်လိမ်လည်မှုများနှင့်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများနှင့်သူမနောက်ထပ်အကြိမ် ၁၀၀ တင်ဆက်မည့်မိုက်မဲသော“ အချက်အလက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ” ကိုပစ်မှတ်ထားထားသည်။ RealYBOP သည်အမြဲတမ်းအဖြစ်မှန်အမှန်တကယ်“ လိမ်လည်မှု” ကိုလုံးဝဥပမာပေးသည်။
RealYBOP သည် NCOSE မှအမှားအယွင်းများကိုလုပ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတွစ်တာမှတွစ်တာက“ tသူကတစ်ခုလုံးကိုသိပ္ပံပညာခေါင်းစဉ်အပေါ်သဘောတူညီခဲ့သိရသည်“ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို NCOSE စာမျက်နှာ: https://endsexualexploitation.org/publichealth/
ဧပြီလ 23, 2020: ဝိုး။ Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု၊ (အသရေဖျက်မှုအတွက် RealYBOP ကိုစီမံခန့်ခွဲသူ Prause ကိုတရားစွဲသူ) NoFap ကိုရှုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာ -
Hmmm … .RealYBOP သည် PornHub ကိုသူမလိုက်ဖက်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့ရိုက်သည်။
Gabe Deem နှင့်လိမ်ပြောခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်နံနက်ခင်းသစ်တောများနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းခံရသောလူငယ်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ RealYBOP ၏ဝေဖန်မှုများသည် Gabe ၏ပြောဆိုချက်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။
ပိုမိုအသရေဖျက်မှု။ In သူမ၏ချည် Pornhub ထောက်ပံ့ NoFap ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့် RealYBOP သည် Julie Bindel ကိုပစ်မှတ်ထားသော XBIZ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရေးခဲ့သည်။ RealYBOP က Julie Bindel သည် XRCO သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ Bindel သည်အများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသော XBIZ ဆုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရဲရင့်စွာရင်ဆိုင်ရသောလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ RealYBOP ၏တွစ်တာတွင် Bindel သည် XBIZ ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်မုသားကိုဖော်ထုတ်ပြသသည်မှာရယ်စရာပင်။
context: ဂျူလီဘင်ဒဲလ်သည်ထင်ရှားသောညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး၊ Prause ရဲ့ဖိုင်ထဲမှာ အဆိုပါ Don Hilton အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကို၌တည်၏, Prause သည်သူမသည် porn ဆုများပြသခြင်းကိုတစ်ခါမျှမတက်ရောက်ခဲ့ဖူးဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအရာကိုကြည့်ပါ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး) (ဇွန်လ 22, 2016) ။
အဓိက - ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ"အဆိုပါ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေလူတွေကိုရန်နှင့် ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့်သီးသန့်သိုလှောင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုပြပွဲဖြစ်သည်။"
အရေးကြီးသည်မှာ Prause ၏ Don Hilton ကိုအပြစ်တင်ရန်“ တရားမျှတမှု” သည် Hilton မှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆု (Prause မှငြင်းဆိုသည့်) တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Prause နှင့် Ley သည်ဟီလ်တန်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အားသူ့ကိုသိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်အရည်အချင်းမပြည့်မီဟုတာ ၀ န်ယူထားသည့်အတွက်ကြောင့် Hilton (သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများကိုရေးသားသူ) ကသူတို့၏ဘက်လိုက်မှုကိုထောက်ပြရန်လိုအပ်သည် (သုတေသနသက်သေအထောက်အထားအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်) ။ ထောင်နှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာများက Prause ၏ညစ်ညမ်းသောဘက်လိုက်မှုများကိုသက်သေပြနေစဉ် Hilton သည်သူ၏တင်ဆက်မှုများ၌အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နီကိုးလ် Prause porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတက်ရောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (XRCO, AVN)).
RealYBOP ၏တွစ်တာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ XRCO ဆုများကိုမည်သူမဆို (လိင်တူချစ်သူဆန့်ကျင်ရေးသမားများအားသွေးဆောင်ခြင်း) ကိုတက်ရောက်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ RealYBOP သည် Bindel ကဲ့သို့လိမ်နေသည် မဟုတ် XRCO သို့တက်ရောက်ပါ။ Prause သည်စက်မှုလုပ်ငန်း ၀ င်များအတွက်သီးသန့်သီးသန့်သီးသန့်ထားရှိသော XRCO အရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုဆုကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။
RealYBOP၊ Ley နှင့် JamesF တို့သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိပြုပါ အသရေဖျက်မှုအသင်း:
uhh, nope, ယခု ~ ရှိပါတယ်50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့အာရုံကြောတွေ့ရှိချက်များကိုထင်အဖြစ်စွဲမော်ဒယ်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုပေး။
Pornhub ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသည် ကလေးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများစွာကိုလက်ခံရရှိသည်):
neuro-gibberish နှင့်အတူ, တဖန် Gabe Deem Cyberstalking ။ သူမလည်း denigrates MD ဗီဒီယိုထဲမှာ (သူ၏ပြောဆိုချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည့် Gabe ၏တွစ်တာ).
RealYBOP ဟာဘယ်တော့မှပစ္စည်းကိုယူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤနေရာတွင် dopamine သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ၎င်း၏မန်နေဂျာ Prause သည်သူမအားသိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်သောမောင်းနှင်အားကိုဤမျှကြာအောင်တွန်းပို့ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Prause & Ley အား neuroscience non-expert အဖြစ်ဖော်ထုတ်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း (2017) ဒွန် Hilton က MD.
လေ့လာမှုမှကောက်နှုတ်ချက်များအရအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုဖော်ပြသည် အနိမ့် porn အသုံးပြုသူများ -
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသောနှင့်အကြမ်းဖက်မှုပုံရိပ်များကြောင့် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုတိုးများလာပြီးနောက်ပိုမိုဆင်တူလာသည်။ (2017) လေ့လာမှုကဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထိန်းချုပ်ထားထိတွေ့မှုအစားအစီရင်ခံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်။ ဤကိစ္စတွင်, တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာမိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသူများကိုအနိမ့်အပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုဖော်ထုတ်ရုံမျှဖြင့်စုစုပေါင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ ၅၀ နှင့်အကြမ်းဖက်ပုံ ၅၀ ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Self-အစီရင်ခံထားသည့်မြင့်မားသော porn အသုံးပြုသူများနှင့်ကိုက်ညီသော ERP curves များကို“ အတုယူ” နိုင်ခဲ့သည်။
ယခင်တွစ်တာများကဲ့သို့ RealYBOP သည် Cry Cry အကြောင်းကိုလိမ်။ Pornhub ကိုကာကွယ်သည် (Laila Mickelwait သည် Exodus Cry အရာရှိဖြစ်သည် အဘယ်သူသည် '' ၏ဖော်ထုတ် ဦး ဆောငျရနျဖြစ်ပါတယ် Pornhub ၏မဆင်မခြင်နှင့်တရားမဝင်အကြောင်းအရာ):
RealYBOP သည် Laila နှင့် Exodus Cry ကိုအချိန်အတန်ကြာကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုက RealYBOP သည် Pornhub ကိုဝါဒဖြန့်သည်ဟုဆိုသည်။ အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံ ၂ ခုတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်နောက်ကွယ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြသည်ဟုမျှော်လင့်ကြပါစို့။ ပိုမိုသိရှိရန် -
(ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လိုင်လာဟတ်ဒတ်ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Rhodes v Prause အတွက် Laila Mickelwait / Exodus Cry ကျမ်းကျိန်လွှာ
RealYBOP false - လူမှုရေးပညာရှင်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းသည်စာပေများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားစာတမ်းသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသည့်ကျပန်းလင့်ခ်နှင့်ဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ စိတ္တဇမှ
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ၊ သတင်းစာဆောင်းပါးများနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပါအ ၀ င်စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းချက်များသည် ၂၁ ရာစုတွင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်ကိုပြသသည်။
ဤအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ RealYBOP ၏ tweets အနည်းငယ်ကိုသာထောက်ခံသည်။ စာရေးသူများသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသူတို့၏စာသားကို“ ထောက်ခံ” ရန်ချယ်ရီကောက်ယူသည့်ဆောင်းပါးများ (လေ့လာမှုများမဟုတ်) ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာရွက်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုပါ။ ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ။ ဒီစာရင်းပါပါတယ် 25 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါစိတ္တဇအစီအစဉ်ဖျောထုတျ။ Gee ငါဘာကြောင့်လဲအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောအရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်"ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာကြီးထွားလာပြီလော ငါ့ကိုစဉ်းစားပါရစေ .... လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းအဘယ်အရာပြောင်းလဲသွားပြီနည်း။ ဒီမှာငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးနိုင်မလား? ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသွားပြီးအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်၎င်းအသုံးပြုမှုသည်ကျယ်ပြန့်လာသလား။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအပါအ ၀ င်အချို့သောထောက်ခံသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဇီဝဗေဒစွဲလမ်းသည်ဟုဆိုရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ / သိပ္ပံနည်းကျမူဘောင်ကို အသုံးပြု၍ ၂၁ ရာစုအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြရန်။ ဤဆောင်းပါးသည်သိပ္ပံပညာနှင့်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာနှင့်လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာဇီ ၀ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာသီအိုရီများကိုတိုးချဲ့ရန်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” နှင့် ပတ်သက်၍ လူထုဟောပြောချက်ကိုဆန်းစစ်ထားသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ၊ သတင်းစာဆောင်းပါးများနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပါအ ၀ င်စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းချက်များသည် ၂၁ ရာစုတွင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်ကိုပြသသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများသည်အများအားဖြင့်အပြီးသတ်ရလဒ်များကိုပေးသည်ကိုတွေ့ရှိရသော်လည်းမီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်စားသုံးသူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမည်သို့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေကြောင်း၊ အမျိုးသားဟုယူဆရပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဖော်ပြရန်မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်များသည်ဇီဝဆေးပညာသိပ္ပံနည်းကျကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်လိင်ကွဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ တရား ၀ င်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုံမှန်လိင်ဆန္ဒများကိုပါထိခိုက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုသည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်အများပြည်သူနယ်ပယ်အတွင်းရှိလိင်နှင့်ပတ်သက်သောသိပ္ပံနည်းကျအသိပညာကိုဘာသာပြန်သူများနှင့်ပြောဆိုသူများကိုမည်သို့ပုံဖော်သည်ကိုပြသသည်။ neurobiology တွင်အမြစ်တွယ်နေသောသိပ္ပံနည်းကျဘာသာစကားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစေသည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် binary gender နှင့်စံ (hetero) လိင်မှုဆိုင်ရာပုံစံများကိုတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။
ထို့အပြင်စာရေးသူများသည်လေ့လာမှုများသည်အပြီးသတ်မရှိဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ထုတ်ဝေသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုတိုင်းကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ အားလုံး 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ သူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကဆေးစွဲ - လေ့လာမှုများတွင်တွေ့ရှိရသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့်ပြtheနာကို“ စွဲလမ်းမှု” ဟုမဟုတ်ဘဲပါးနပ်စွာပုံဖော်ခဲ့သည် porn အသုံးပြုမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ IMO ဟာသူတို့အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကြီးမားတဲ့လေ့လာမှုတွေကိုချန်လှပ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယောက်ျားများနှင့်ပတ်သက်သောအရေအတွက်တိုင်းတာသည့်လေ့လာမှုတိုင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုသာအသုံးပြုခြင်း) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ 75 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ဘာ့ခ်သည်သူမအပေါ်၌“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုသာအဓိကထားသောကြောင့်၊
Burke ကလည်းချန်လှပ်နိုင်ပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်များပြားလှသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းလေ့လာမှု ၃၀၀ နီးပါးရှိသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က 'စွဲလမ်းမှု' အကြောင်းမဟုတ်လို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစွဲလမ်းမှုသာလျှင်ဘာ့ခ်ကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ် ကျော်လွန် ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊
Burke ကလည်းလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ် လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဥပမာများကိုထပ်မံပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်စာရေးသူ၏နည်းဗျူဟာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရှင်းပါသည်။ ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးများကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောသုတေသနပြုခြင်း၏ကြီးကျယ်မှုကိုရှောင်ရှားပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်တွင် "မဟာဗျူဟာ" ။ ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားလုံးသည် 'CSBD' သို့မဟုတ် 'hyper-sexity' သို့မဟုတ် 'ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း' စသည်တို့ကိုအသုံးပြုသော်လည်း 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်း' ဖြင့်ရှာဖွေခြင်းကိုကန့်သတ်ပါ။ "စွဲ" ။ ) ။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေး -related နယ်ပယ်ကနေသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများရှာဖွေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေးသားထားသောသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါး ၁၂၇ ခုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုရည်ညွှန်းချက်ပါရှိသည်။ အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးစာရင်းဇယားတွင် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်ဝေခဲ့သောသိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါး ၁၀၃ ခုပါဝင်သည်
စာရေးသူများတွေ့ရှိခဲ့သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုမည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပါ (၁၁) ကြိမ်မြောက် (ယခုအချိန်ထိ ၅၀ ရှိသေးသည်)
သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးအများစု (n = ၇၀၊ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများ (အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်း)၊ အင်တာဗျူးများနှင့် / သို့မဟုတ် ဦး တည်အုပ်စုများမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံရန်နည်းလမ်းများကိုအားကိုးသောစိတ်ပညာသို့မဟုတ်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာမှဖြစ်သည်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်အချို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုသည့်အာရုံကြော - ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ (၁၁ ရာခိုင်နှုန်း)၊ တစ်ခါတစ်ရံအင်တာဗျူးများသို့မဟုတ်စစ်တမ်းများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI သို့မဟုတ် MRI)၊ မျက်စိစစ်ဆေးခြင်း၊ PPG) ။
ယခုပြ.နာရှိနေသည် ~ 50 အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူတို့ ၅၀ လုံးဟာစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ဆေးဝါးစွဲလေ့လာမှုများမှတင်ပြသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အဆိုပါစာရေးသူ 50 neuro လေ့လာမှုများချန်လှပ်! အကယ်၍ သင်သည် 'ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု' နှင့်ပတ်သက်သည့်စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်ဟုဆိုပါက၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာကြီးဖြစ်သည်။
စာရေးသူလည်းချန်လှပ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 50 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
RealYBOP မှနောက်ထပ်မှားယွင်းမှုများ - စာရေးသူ၏ထင်မြင်ချက်သည်ထိုကဲ့သို့သောအရာမျိုးကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ Burke သည် (အခြားရာပေါင်းများစွာကိုလျစ်လျူရှုထားစဉ်) အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောရေးသားသူအများစုသည်ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည်။ တည်ထောင်သူများသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများဖြစ်သောကြောင့် YBOP နှင့် Nofap ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုချန်လှပ်ခဲ့သည်။
RealYBOP ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဟုပြောဆိုရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကူကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမဟုတ်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစာတမ်း ၁၁ ခုသာရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာဆိုသောကြောင့်၊ 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ။ အိုး
အထက်ပါတွစ်တာတွင် RealYBOP သည်စာတမ်း၏ဝါဒဖြန့်မှုကိုမှားယွင်းစေသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုတောင်းဆိုသည်။ သင်သွား - ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်သည် 25 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
မိုက်မဲသော 'info-graphics'၊ သို့သော် RealYBOP သည်ဤထိပ်တန်းဆယ်ခုစာရင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဥပမာတစ်ခုမျှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ Shill ။
မိုက်မဲ infographic ။ Ley နှင့် Prause တို့သည်အငြင်းအခုန်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာမှထွက်ပေါ်လာသည်
သော်လည်း အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်အားအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်, RealYBOP သည် David Ley ၏လှည့်စားမှုကို retofeets of the Nofap အဖွဲ့ဝင်များနှင့်စာဖတ်သည့်စာတမ်းရေးသားသူများ၏တောင်းပန်စာကိုပြန်လည်ရေးသားသည်။ မဟုတ်ခဲ့ - ဘာသာရပ်များအားလုံး NoFap မှလာသည်! ထို့အပြင်၎င်းစာတမ်းသည် Gabe Deem ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြပြီး“ reboot” ၏ဆိုလိုရင်းကိုတလွဲဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤတွင်ရေးသားသူ၏တောင်းပန်စာကို Ley ကပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ reboot ၏ယုံကြည်ချက်ကိုမထင်ဟပ်နိုင်ပါ
Gabe Deem သည်လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးသူနှင့်အတူနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သည်။
ဟေ့ဒေါက်တာ Imhoff, ငါမတိကျကိုးကားတာကြောင့်သင်၏လေ့လာမှုကိုအမှားပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
၁) ကျွန်ုပ်သည် NoFap နှင့်မပတ်သက်ပါ။
၂။ reboot တစ်ခုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲအတုဆွခြင်း (porn) မပါဘဲအချိန်ကာလဖြစ်သည်။
၃။ ကိုးကားချက်သည် porn-induced ED ရှိသောယောက်ျားများအတွက်သာဖြစ်သည်။ 3/1 pic.twitter.com/B172JzMPdv
- Gabe Deem (@gabedeem) ဧပြီလ 29, 2020
၁ / အုပ်စုတူအဆင့်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်ဝါဒဖြန့်ခြင်းကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်သည်။ လေ့လာမှုအသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါး https://t.co/ZfQk4OQfjj
လေ့လာမှုကဖော်ပြသည် @NoFap ၁၇ ကြိမ်အကြိမ်က reddit / Nofap အသုံးပြုသူများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုစာဖတ်သူမှလက်ခံစေသည်။
သို့သျောလညျးဘာသာရပ်များအဘယ်သူအားမျှ Nofap / reddit မှခဲ့ကြသည်။ သုည။ 😏
- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် (@YourBrainOnPorn) ဧပြီလ 27, 2020
RealYBOP & Ley သည် Imhoff ၏စာနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောကြသည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှခြိမ်းခြောက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
မှတ်ချက် - RealYBOP ကဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၅ ကြိမ်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ “ တစ်စုံတစ်ယောက်” သည် Imhoff စာကို NoFap Wikipedia စာမျက်နှာသို့တည်းဖြတ်ခဲ့သည်RealYBOP ပြောတာအတိအကျပြောတာ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်။ သူသည် Wikipedia Wikipedia နာမည် ၃၅ ခုအနက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Anemicdonalda။ ကြည့်ရှုပါ:
အထက်ပါပုံတွင်ပြသထားသောအချက်မှာ - Gary Wilson ၏ UK ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် Wilson ၏ငွေကိုအသုံးပြုခြင်း The Reward Foundation (UK ပရဟိတလုပ်ငန်း) သည် UK ရှိ YourBrainOnPorn ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားယူကေအစိုးရအားပေးခဲ့သည်။ ယူကေကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် YBOP အားပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပုံစံတင်ပို့ရန်တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ 2019 ၏ဇန်နဝါရီလ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန် (ပိုပြီးအဘို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ), နှင့်
တစ်ဦးထုတ်ပြန်ခြင်း site အသစ် အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်-ချိုးဖောက် URL ကိုနှင့်အတူ realyourbrainonporn.com 2019 ၏ဧပြီလ၌တည်၏။
အဖြစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တခြားနေရာ Wilson ကရှင်းပြခဲ့ သူ့စာအုပ်များ၏ရရှိသောလှူဒါန်း မှတ်ပုံတင်ထားသောပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Reward Foundation သို့တင်ပြသည်။ Wilson ကပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ သူ့အားထုတ်မှုအတွက်ပိုက်ဆံမရဘူး။ YBOP သည်ကြော်ငြာများကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ၊ Wilson ကစကားပြောရန်အခကြေးငွေမယူပါ။ ဤအပိုင်းများ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း၊ Prause သည် Wilson အားမိမိ၏စာအုပ်အားဆက်လက်လှူဒါန်းခဲ့သည့်တူညီသောအလှူငွေဖြင့်ပေးဆောင်နေသည့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာနတ်သမီးပုံပြင်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ & ၂၀၁၆ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည် COPE ၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ကာဂယ်ရီ Wilson ကိုထုတ်ဝေသူနှင့်စကော့တလန်မှလှူဒါန်းခြင်း (The Reward Foundation) ကိုချိုးဖောက်သည်။
May - ဇူလိုင်လ, 2018: အီးမေးလ်များခုနှစ်, ICD-11 မှတ်ချက်အပိုင်း၌၎င်း, ဝီကီပီးဒီးယား, Prause နှင့်သူမ၏ sockpuppets အပေါ်မဟုတ်မမှန် Wilson ကအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 9,000 ပေါင်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဆိုကြသည်
တကယ်တော့ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်။ အထက်ပါနှစ်ခုကဏ္ဍများဒေါက်တာ Prause ဆန့်ကျင်တင်သွင်းသည့်ဒေါက်တာဟီလ်တန်ရဲ့အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာအတွက်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ ဤတွင်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးအတွက်တင်သွင်း Wilson ကရဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာ၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများများမှာ: YBOP ၏ဂယ်ရီ Wilson က (ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကျမ်းကျိန်လွှာ #2):
RealYBOP သည် Prause ၏ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုများကိုသူမညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောလိမ်လည်ခြင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုလိမ်ခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဟားဟား။ ရာနှင့်ချီသောဥပမာများ -
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် Prause လေ့လာမှုအတွက်သူမသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်
porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Prause ရဲ့တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု (FSC, AVN, XBIZ, xHamster, PornHub)
Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်
ရယ်စရာကောင်းသည်မှာ RealYBOP သည်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိစ္စ၌ပါ ၀ င်သည် (ကျွန်ုပ်သည်မိဘများကဲ့သို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ် ဦး ဖြစ်သည်) ဟုသူမကတိုက်ရိုက်ပေးချေမှုခံရသည့်အခါ လိင်ကစားစရာများကိုမြှင့်တင်ပါ နှင့်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်လိင်အစွန်းရောက် "orgasm တှေးတောဆငျခွအောက်မှာသော " FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး။ (ကြည့်ရှု Bloomberg.com ထုတ်ဖော်ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Prause ၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုမြှင့်တင်ရန်ငှားရမ်းခဲ့သည် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်အငြင်းပွားဖွယ် ကုမ္ပဏီ။ သူမ၏လိင်အစွန်းရောက်အတွက်Orgasmic ဘာဝနာ စွပ်စွဲ Prause လေ့လာမှု ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း.
obsessive cyberstalker - ကျွန်ုပ်အကြောင်းအတန်းသုံးတွမှာ -
ACLU စာသည် RealYBOP ၏တောင်းဆိုချက်မဟုတ်ပါ။ ကြည့်ပါ အဆိုပါ ACLU အပိုင်း ဤစာမျက်နှာတွင် RealYBOP သည်မိမိကိုယ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်မှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်နေသည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့သည် - နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉)
porn နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတဲ့ tweet retweets:
လက်တွေ့တွင်၊ တွစ်တာသည် Orben & Przybylski ၏ဝါဒဖြန့်မှုကိုဖြိုခွဲနေသည့်သုတေသီ Jean Twenge ၏မကြာသေးမီကဝေဖန်တင်ပြချက်ဖြစ်သည်။
"ဖန်သားပြင်အချိန်" သည်အာလူးကဲ့သို့သာယာဝပြောမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်စာတမ်းကိုမှတ်မိပါသလား။ ထုတ်ကုန်များနှင့်လူမှုမီဒီယာများတွင်သုည ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းတို့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ပြင်သစ်ကြော်ကြော်ထားပါ။ https://t.co/DkV12lkmIc pic.twitter.com/TrHlv80fMw
- ဂျင်းတွင်ဂျင် (@jean_twenge) မေလ 5, 2020
လိင်ရောင်းဝယ်မှု Backpage.com (တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော) ကိုထောက်ပံ့နေစဉ် NCOSE ကိုလိမ်လည်လှည့်စားမှုများဖြင့်မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်း
ပျော်စရာအချက်အလက်များ: RealYBOP ကို ​​Nicole Prause ကစီမံသည်။ RealYBOP ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်းသည် Backpage ကိစ္စဖြစ်သည်။ Prause ရဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံပေး ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် Backpage.com။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, Backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
RealYBOP ၏ဝါဒဖြန့်ချိရေးပုံ ၂ ပုံ။ RealYBOP သည်လိမ်လည်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ RealYBOP ကတော့တော်တော်လေးလှည့်စားတတ်တယ်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com").
RealYBOP သည်အဓိကတွေ့ရှိချက်ကိုချန်လှပ်ထားသည် - ပိုမိုများပြားသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း (နှင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း) သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု / ကတိကဝတ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၏အခန်းကဏ္forကိုထိန်းချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်များနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ H1 နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကြိမ်နှုန်းသည်စံပြပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ကစားခြင်းစံနှုန်းများကိုမထည့်သွင်းသောအခါယောက်ျား (နှင့်အမျိုးသမီးများ) ၏ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ကျိုးနွံစွာအပျက်သဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။။ ဆက်စပ်မှု၏အရွယ်အစားလည်း Wright နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ '(2017) မှ metanalytic တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူအကြမ်းဖျင်းကိုက်ညီခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြaticနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်အမျိုးသားများ (နှင့်အမျိုးသမီးများ) တွင်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ကျိုးနွံစွာပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။။ အလားတူပင် H2 နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတသမတ်တည်း, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုသည့်အကြိမ်ရေသည်ယောက်ျားလေး (နှင့်အမျိုးသမီးများ) တွင်အပြုသဘောဆောင်သောအဆိုးမြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကစားသမားစံနှုန်းများကိုစံပြတွင်မထည့်သောအခါ.
ငါဒီစိတ်ပျက်စရာနဲ့တူလေ့လာမှုများကိုရှာပါ။ သူတို့ကအခြေခံအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချဖို့ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (“ Playboy Norms”) မှလွဲ၍ မရနိုင်တဲ့ variable တစ်ခုကိုထိုးထည့်ပုံရသည်။ ငါအကြောင်း Tweet လုပ်ခဲ့ ဒီကဒီမှာ။ H ကိုporn အသုံးပြုမှုသည်“ Playboy Norms” အပါအ ၀ င်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုပုံသွင်းသည့်အခါအပြုအမူများ၊ အရေးကြီးသောဆက်နွယ်မှုများလျှော့ချရန်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော variable များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် rest ၀ ရတ်တောင်တန်းများဖြစ်သည်။ လူနှစ် ဦး ကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်variableဝရက်တောင်တန်းသည်အခြေခံကျသောကိန်းတစ်ခုအတွက်သင်“ ထိန်းချုပ်” သောအခါ (ဥပမာအမြင့်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည် controll ၀ ရက်တောင်သည်အခန်းအပူချိန်) ဖြစ်ပျက်သည်။ ညစ်ညမ်းသောပညာရှင်များ၏လေ့လာမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးထိုတွေ့ရှိချက်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
Covid ကိုထပ်မံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအထီးကျန်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအားတွစ်တာတွင်။ ဒီမှာအမှတ်ကဘာလဲ
ဒီနေရာတွင်ရွေးချယ်မှု: Porn Science ငြင်းပယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA -“ RealYourBrainOnPorn.com” နှင့်“ PornographyResearch.com”။ ၎င်းသည် RealYBOP ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ချယ်ရီရွေးချယ်ကောက်ယူထားသည့်အဝေးရောက်လေ့လာမှုများ၊ ဘက်လိုက်မှု၊ မပြည့်စုံသောပျက်ကွက်မှုများ၊ စာရင်းပြုစုထားသည့်လေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်လုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
RealYBOP မှလိမ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် YBOP ပိုင်ဆိုင်သည်။ screenshot သည်ကျွန်ုပ်၏ယူကေကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏ငွေဖြင့် သုံး၍ Reward Foundation သည်ငါ့နာမ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တခြားနေရာငါရှင်းပြသည် ငါ့စာအုပ်၏ရရှိသောလှူဒါန်းပါ The Reward Foundation သို့ပြောကြားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ငွေမရှိကြောင်းလက်ခံပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ YBOP ကြိုးပမ်းမှုအတွက်မည်သည့်အရာမှမရရှိခဲ့ပါ။ YBOP သည်ကြော်ငြာများကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောရန်အခကြေးငွေမယူပါ။ ဤအပိုင်းများမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း၊ Prause သည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောကျွန်ုပ်၏စာအုပ်အားလှူဒါန်းခဲ့သည့်တူညီသောအလှူငွေများဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပေးဆပ်နေသည့်ဆိုးဝါးသောနတ်သမီးပုံပြင်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒါမမှန်ပါဘူး အထက်ပါပုဒ်မနှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ၌ဖော်ပြထားပြီး၎င်းသည် Dr. Hilton ၏ Prause အားတရားစွဲဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတင်သွင်းတဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ sections တွေကဒီမှာပါ: YBOP ၏ဂယ်ရီ Wilson က (ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကျမ်းကျိန်လွှာ #2):
ငါ Prause ရဲ့အသရေဖျက်မှုကိုတိုးချဲ့ပြီး Alex Rhodes ရဲ့ဝတ်စုံမှာကျွန်ုပ်၏ကျမ်းကျိန်လွှာ၌တည်ရှိသည်။ ပြကွက် (၁၁) - ဂယ်ရီ Wilson ၏ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၁၂၃) ။
RealYBOP သည် @rolandimhoff မှအယ်ဒီတာထံပေးပို့သောစာသည်သူ၏လေ့လာမှုအမှားများကိုတည့်မတ်ပေးသည်။ ဒေါက်တာ Roland Imhoff က Gabe Dem နှင့် Alex Rhodes တို့၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ RealYBOP မှမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြခဲ့သည်
တောင်းပန်စာက RealYBOP မှပြောဆိုသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ reboot ၏ယုံကြည်ချက်ကိုမထင်ဟပ်နိုင်ပါ
Gabe Deem က RealYBOP ၏မုသားများကိုခေါ်ဆိုသည်။
RealYBOP ဟာဘယ်တော့မှပစ္စည်းကိုယူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤနေရာတွင် dopamine သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုသည်သူမ၏သိပ္ပံမဟုတ်သောမောင်းနှင်မှုကိုကြာမြင့်စွာတွန်းအားပေးနေသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဤဆောင်းပါးသည်သူမနှင့် Ley အား neuroscience non-expert ဟုဖော်ပြသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း (2017) ဒွန် Hilton က MD.
RealYBOP ဆိုက်ဘာရိုးတံများaစပိန်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် (PhD) အဘယ်သူသည် porn ၏ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်။ tweets ။ အားလုံးရက်အတွင်းအလုပ်
wow - ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုကာကွယ်ခြင်း၊
Gail Dines နှင့်အခြားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း
RealYBOP သည်ထင်ရှားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Valerie Voon ကို Cambridge တက္ကသိုလ်မှတိုက်ခိုက်သည်။ သူမမှာပညာရေးရာထူးမရှိတော့သောကြောင့် RealYBOP သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး Voon သည်သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ RealYBOP ၏လိမ်ညာမှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သံမဏိ et al ။, 2013. Voon et al ရဲ့ သံမဏိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု" (2014)
Valerie Voon အပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု
RealYBOP သည် Voon နောက်သို့လိုက်သွားသည် သူတို့စစ်တမ်းတင်မလား NoFap မေးမြန်းသည်။ RealYBOP ဖြစ်နေပေမဲ့လည်း Nofap မှ Alex Rhodes အားတရားစွဲ, သူမ၏အသရေဖျက်မှုမှထပ်ပြောသည် (ဂျူရီကဒီကိုချစ်လိမ့်မည်):
RealYBOP ရေးသားချက်များ 10 မုသာနှင့်ပြည့်ဝ၏ NCOSE မှ Haley Halverson ပြီးနောက်တွစ်တာများ။
နောက်ထပ်။ ထို့အပြင်ပညာသင်နှစ် (shill RealYBOP နှင့်မတူဘဲ) Mary Ann Layden ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သည်။
ထပ်တူပင်လိမ်လည်မှုများ - YBOP သည်ကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ မည်သူမျှမပိုင်ပါ။ ငါဘယ်သူ့ထံမှရန်ပုံငွေမရ။ ကျွန်တော်ဟာဘယ်ဘာသာရေးမှူးရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူး။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုခံရသည့်မုသာကောင်ကိုမှအရူးကောင်ဖြစ်သည်။
ဒီစာမျက်နှာကသူမရဲ့လိမ်ညာမှုကိုဖော်ပြသည်။ နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉)
သူမမကြိုက်သည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စက္ကူကိုရှက်ရွံခြင်းဖြင့် RealYBOP သည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအားလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀)။ ထိုအခါ RealYBOP သည်ငါ့ကိုရှုတ်ချသည်။ ရောဂါဗေဒမုသာကောင်၏စမ်းသပ်မှုမှာသက်သေခံရန်မျှော်လင့်,
DARVO နည်းဗျူဟာများ -
Stalker? စွပ်စွဲချီးမွမ်း me ပြီးတော့သူမကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။ တရားရုံးကတဆင့် Prause ဟာကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တယ်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်လက်ရှိတွင်အားဖြင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရပါတယ် Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes။ နောက်လိုက်ဖို့နောက်ထပ်တရားစွဲမှု?
စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းသောတွစ်တာတွင်၊ Gabe ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်ကြောင့်လူများစွာသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသတ်သေသည်ဟု RealYBOP မှအကြံပြုသည်။ နောက်ထပ်မုသားတစ်ခုမှာ RealYBOP က Gabe ဟာနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဆိုခဲ့သည်။ သူသည်အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းအတွက်ဘယ်တော့မှအခကြေးငွေပေးစရာမလိုတော့ပါ - လိုအပ်နေသူများကိုနာရီပေါင်းများစွာပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ Prause ၏လိမ်လည်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ လူငယ်များစွာက Gabe သည်သူတို့၏အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။
ပိုမိုဆိုက်ဘာပြောဆိုခြင်း။ RealYBOP ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်လူငယ်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုသည်။
RealYBOP သည်ဆိုက်ဘာ ဆက်၍ လိမ်ညာမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
RealYBOP သည်မည်မျှစွပ်စွဲသည်ကိုသတိပြုပါ၊ သို့သော်ဘယ်သောအခါမှဥပမာ (ဥပမာ -“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ”) ကိုဘယ်တော့မှမပြပါ။
ဘယ်သူမှကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိဘူး။ RealYBOP သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲဖြစ်သော WHO ၏လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာသည် ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သောကြောင့် သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
RealYBOP သည်ကွင်းဆက်များ၌“ reboot programs” မည်သို့ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့် Kelsy Burke ကလူ ၃၅ ယောက်ကိုသာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဘာသာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောလူများစုသောအွန်လိုင်းဖိုရမ်များအကြောင်းဤစာတမ်းကကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှမပြောနိုင်ပါ။
RealYBOP မှပြောသောအရာမဟုတ်သည့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား Kris တေလာ၏စာတမ်းသည်
Prause (RealYBOP) က Kris တေလာ၏စာတမ်းသည် nofap မှတ်ချက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်တွင်တေလာ၏စာတမ်းသည် reddit / nofap မှမှတ်ချက် ၁၅ ခုသာအကဲဖြတ်သည်။ ချယ်ရီရွေးမှတ်ချက် ၁၅ ခုအတွက်“ Masculinity” ရှာဖွေရေးစံနှုန်း။ တေလာ၏မှတ်ချက် ၁၅ ချက်သည် Nofap ကိုကိုယ်စားမပြုကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
မြင် စိတ်ပညာယနေ့မှယူ Prause နှင့် Bart အကြားဒီနှင့်နောက်ကျော စက္ကူ၏တေလာဟာသကိုရည်မှတ်။ Bart သည်တေလာ၏စက္ကူနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ညာနေသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောအခါ ad hominem ကိုအသုံးပြုသည့် Prause ကိုအရူးလုပ်သည်။
ထို့အပြင် Prause ကတေလာ၏စက္ကူသည် NoFap တွင်ပျံ့နှံ့နေသည့် misogyny အကြောင်းဖော်ပြနေစဉ် misogyny ကိုတစ်ကြိမ်သာဖော်ပြခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယောက်ျားများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးပါး) အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရနိုင်သည်ဟုပညာရှင်အချို့ကအကြံပြု
ဒါပဲ။ သငျသညျကနေပိုပြီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသူကိုငါသိ၏။ မှတ်ချက် - Prause Ley၊ Prause နှင့် RealYBOP တို့သည် NZ grad ကျောင်းသား Kris Taylor ၏ထင်မြင်ချက်စာတမ်းများကိုစွဲလမ်းကြသည်။ ဘက်လိုက်မှုထက်ကျော်လွန်သောတေလာသည် - အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိပါ။ သူကလူမှုဗေဒပညာရှင်ပါ။ YBOP မှသူရေးသားသော ၂၀၁၇ ဆောင်းပါးကိုသူဝေဖန်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်သူသည်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သည် (တေလာသည်သူ၏ဆောင်းပါးတွင်လိမ်လည်ပြောဆိုလေ့ရှိသည်) "Porn အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခက်အမှန်တရားနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်" Kris တေလာရဲ့ Debunking (2017) ။ မှတ်စု: Prause ၏ဝီကီပီးဒီးယားအမည်ဝှက်များသည်တေလာစာတမ်းများကို Wikipedia သို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
အကယ်၍ အောက်ပါအချက်များမှန်ကန်ပါက RealYBOP သည်ဖန်သားပြင်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
ပိုများသောသားကောင် - ပါးပျဉ်း။ ကြည့်ပါ - နီကိုးလ်ပရူးဇ်နှင့်ဒေးဗစ်လီတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း (စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၉၉) တွင်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
ထူးဆန်းတဲ့ pro-porn tweet အတွက်ကျပန်း tweets တွေကိုစုဆောင်းဖို့အကောင့်များစွာကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း -
နောက်တဖန် NCOSE ပြီးနောက် Going ။ RealYBOP သည်အမြဲတမ်းသတင်းအမှားများ၊
အဖြစ်မှန်၌လုံးဝအခြေခံမရှိသောမိုက်မဲသော“ info-graphics” ။ တကယ်တော့၊ RealYBOP၊ မင်းရဲ့ပစ်မှတ်များစွာထဲကတစ်ခုခုက“ လိမ်လည်မှု” ကိုဘယ်တော့မှမဖော်ပြဘူး။
ဘာ? ၁၂ နှစ်အရွယ်ထင်မြင်ချက်စာတမ်း“Healthy Sex and Pop Porn: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲနှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံတို့၏နောက်ခံအခြေအနေ”? ညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်မှုသည်အမေရိကန်တွင်သာဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းသည်လုံးဝစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
RealYBOP ရဲ့စွဲလမ်းမှုတစ်ခုကတော့ Gabe Deem ။ Gabe သည် Kelsy Burke ၏ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်တိကျမှန်ကန်မှုမရှိသည့် hit-piece ကိုဝေဖန်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူသည် NoFap အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Burke ၏ဘာသာရပ်သည် Nofap မှမဟုတ်ပါ။ ဤသည်ဝါဒဖြန့်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရှားပါးအကြောင်းအရာ? ဟားဟား။ Gail Dines များကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုကာကွယ်ခြင်း။
နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးပစ်မှတ် - စတန်းဖို့ဒ်ပါမောက္ခနှင့် AMA ဥက္ကpresident္ဌဟောင်း။ နောက်တစ်ခါ RealYBOP သည်“ လိမ်လည်မှုသိပ္ပံပညာ” ၏ဥပမာတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမပေးကြောင်းသတိပြုပါ။
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် Ley, Prause နှင့် RealYBOP တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့် Zimbardo ကိုမကြာခဏအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းများကြောင့်လူငယ်များအပေါ်အောက်ပါတင်ပြချက်များ၊ စာအုပ်များနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယောက်ျားများ ?: ဖိလိပ္ပု Zimbardo ၏နိဂုံးကို: (ခေါင်းစဉ်ကပြောပါတယ်ကဲ့သို့) Excellent က TED ကိုလူပျိုတို့၏ "နိဂုံးကို" ပေါ်တွင်စကားပြောရန်။ Zimbardo အဖြစ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် (porn နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း) ၏ပြောသော "arousal စွဲ။ "
ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo ရဲ့ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် "ငါတို့အဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုများအတွက်ကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်မကောင်းပါ Porn လား?" (2016).
သူ့စာအုပ် - Man, Interrupted: လူငယ်တွေဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေကြရသလဲ၊ ဘာကြောင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တာလဲ.
နှစ်ဦးကဆောင်းပါးများဖီးလ် Zimbardo နှင့်ဂယ်ရီ Wilson ကကပူးတွဲရေးသား: ဘယ်လို porn သင့်ရဲ့ယောကျ်ားဘဝနှင့်အတူ messing ဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ဇင်ဘာဒို၊ ဂယ်ရီ Wilson နှင့် Nikita Coulombe (မတ်လ၊ ၂၀၁၆)၊; porn နောက်ထပ်: သင်၏ယောကျ်ားဘဝတစ်မာတီ Klein တုံ့ပြန်စောင့်ရှောက်Philip Zimbardo & Gary Wilson (၂၀၁၆ Aprilပြီလ) မှ
ပညာရှင်မဟုတ်သူ Ley & Prause သည် Zimbardo ၏ကျော်ကြားမှု၊ အောင်မြင်မှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုမနာလိုဖြစ်နေသည်။
Gail Dines နှင့် feminists များကိုယေဘုယျအားဖြင့်မထီမဲ့မြင်ပြုရန်အတွက်ပညာရေးမဟုတ်သော paperback မှကျပန်း bits ပါသည့် tweets သုံးခု (လူကြိုက်များ Visual ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ):
ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ၏ဆောင်းပါးကို“ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးကိုထိုးဖောက်ခြင်း” သေချာတာပေါ့။
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Prause နှင့် Daniel Burgess ၏တရားဝင်အကြံပေးချက် ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်).
WHO ကဘယ်တော့မှလိင်အကြောင်းမပြောခဲ့ပါ မဟုတ် စွဲလမ်းစေ။ သူတို့သာရှိခဲ့ရင် RealYBOP ကချိတ်ဆက်လိမ့်မယ်၊
ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် အများအား '' porn စွဲ 'သို့မဟုတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းဘာဖော်ထုတ်မှုအတွက်သင့်လျော်သော' 'လိင်စွဲလမ်း။ ' ' ဒါဟာကိုခေါ်မယ့် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder"(CSBD) ။
RealYBOP သည် RealYBOP အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သော Emily Rothman ၏ထင်မြင်ချက်အတို၊ ကိုးကားချက်အတိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံသည်။ အဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။
အယ်ဒီတာထံအမ်မလီ Rothman ၏စာတိုမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ် meta-analysis မဟုတ်ပါ။ အဖြစ်မှန် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် meta-analysis သည် Rothman ၏အမြင်နှင့်ကွဲလွဲသည် ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15.
ငါ့ကိုရယ်ပါစေ ပထမအနေဖြင့် YBOP သည် RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာဟုခေါ်သောစာရွက်ဖြင့်စာရွက်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းအားဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ ကွာဟမှုများ၊ စာရင်းပြုစုထားသည့်လေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်လုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးသည်။
ပုံမှန်အတိုင်းလိမ်လည်မှုကို Nikky & David မှပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည့် (El Paso & Dayton)၊ နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၊ @BrainOnPorn နှင့်ဒေးဗစ်လေနယ်တို့အပြီးတွင်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုအဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်နာဇီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။
RealYBOP သည်လူကုန်ကူးမှုနှင့်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသူများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေသူအားအချိန်ဖြုန်းနေသောလူသိများသောအနှောင့်အယှက်ပေးသူအား PornHub တွင်တင်ခဲ့သည်။
Retweet ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ဖို့အနည်းဆုံးကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်4အသုံးပြုသောသူမဟာမိတ်။ RealYBOP ၏ tweet သည်“ nerdy's” တွစ်တာနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
“ nerdy” နှင့် RealYBOP ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်း - Prause သည် troll NerdyKinkyCommie အား YBOP ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုစာရွက်စာတမ်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ NerdyKinkyCommie သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ RealYBOP မှကျွမ်းကျင်သူများသည်သူ၏မသမာမှုများကိုဖြည့်စွက်။ သူ၏မသမာမှုများကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်.
RealYBOP သည် FTND ကိုပစ်မှတ်ထားရန်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်များကိုလျစ်လျူရှုပြီး၎င်း၏ဘုတ်သည်အဖြူဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူမကငါတို့ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်၊
RealYBOP သည်ကျောက်တုံးများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ သူမအိမ်မှာဖန်ခွက်ဖြစ်သည် Liberos LLC ဘုတ်အဖွဲ့၊ ပူးပေါင်းသူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်အဖြူရောင်များဖြစ်သည်.
RealYBOP သည် Exodus Cry နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Laila Mickelwait။ (လိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားရန် pornhub ကိုအတင်းအကျပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ဦး ဆောင်သူ):
Exodus Cry၊ သူတို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Benjamin Nolot နှင့် Laila Mickelwait တို့ကို Prause ကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းသည်မတိုက်ဆိုင်ပါ။ အသေးစိတ်အတွက် Prause စာမျက်နှာ # ၂ ၏ဤအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် twitter နောက်လိုက်ကမေးတယ်။
နောက်၊ RealYBOP က NCOSE ကိုလိုက်လုပ်ပြီးသူတို့က“ ဆိုးတယ်” လို့ပြောတယ်
ပြီးတော့ဒီ drivel ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြasနာအဖြစ်
Gabe Deem နှင့် Alex Rhodes တို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်များကြားခဲ့ရသောဤအရာကိုထည့်သွင်းထားသည် -“ မင်းငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်”
နောက်တဖန်အဘယ်သူသည် porn ကိုစောင့်ကြည့် "အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး" သို့မဟုတ်မည်သည့်အမျိုးအစားဆေးဝါးဖြစ်လာသည်မဟုတ်လော
ငါသူမကိုပိတ်ဆို့ရန်တရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်းနေပါတယ်ကြောင့်စိတ်ဆိုး နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အတုအယောင်တားမြစ်မိန့်, RealYBOP သည်နှင့်အတူပြင်းထန်စွာထိုး အတု Mormon Porn URL ၏နေရာကို wayback စက်ထဲသို့ထည့်သည်။ ငါ Lindsey Graham နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါတယ် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Prause နှင့် Burgess တို့သည် Wayback Machine (internet archive) တွင် URL အတု ၃၀၀ ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤ URL များသည်ဘယ်သောအခါမျှမတည်ရှိပါ၊ မည်သူမဆိုမည်သည့် site အတွက်မဆို Wayback Machine ၏ URL စာရင်းထဲသို့မည်သူမဆိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီမှာ သြဂုတ်လ 24, 2019 တွစ်တာချည် ငါ RealYBOP ၏ပစ်မှတ်ထားသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း / အသရေဖျက်မှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးမည်သူမဆို URL ထဲသို့အတုထည့်သွင်းပုံကိုရှင်းပြသည် အင်တာနက်ကို Wayback စက်။
ညစ်ညမ်းသောအုပ်စုများသည်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည် စင်ကြယ်သော BS ။ အထောက်အထားမရှိပါ။
သူမနှင့် Ley ဒီမုသားလုပ်ကြံခြင်းနှင့်ပြန့်နှံ့ (ဒါဟာအဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ RealYBOP သည်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသည်).
Ley သူမကြိုက်ဘူးစက္ကူရှုတ်ချ; RealYBOP သည် Gabe Deem ကိုမုသာစကားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသည်။
RealYBOP သည် Pornhub နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်၏ tweet များကိုပြန်လည်ရေးသားခြင်းအတွက် Liz Walker ကိုလိုက်နာသည်။
RealYBOP သည် Pornhub အတွက်ရပ်တည်သည်။
FYI - မည်သည့်စွဲလမ်းမှုအတွက် DSM နှင့် ICD-11 သည်စွဲလမ်းမှုကိုအသုံးမပြုပါ။ နှစ် ဦး စလုံး "ရောဂါ" ကိုအသုံးပြုပါ။ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
Liz က RealYBOP ကို ​​blog post တစ်ခုနဲ့တုန့်ပြန်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်နည်းဗျူဟာများ.
RealYBOP သည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။
၁) တရားစွဲဆိုမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည် WIPO ၏ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည် ဒံယလေသ Burgess ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကျော်။ FYI - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြissueနာကမပြီးသေးပါဘူး။ RealYBOP ၏ site သည်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်မဝေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏သုတေသနစာမျက်နှာကိုဤကျယ်ပြန့်သောမျဉ်းကြောင်းနှင့်ဝေဖန်မှုတွင်လုံးဝဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကိုဆန်းစစ်ထားပြီးယင်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ မရေရာသည့်ပျက်ကွက်မှုများ၊
၂။ RealYBOP သည် CBC နှင့်ပတ်သက်သည်။ CBC အပါအဝင်ဘယ်သူ့ကိုမှတရားစွဲဆိုဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းဗျူဟာမှတ်တမ်းတင် CBC မှအီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်။ CBC အက္ခရာနှင့်ပတ်သက်သောမုသာစကားများရေးသားရန် aliases များကို သုံး၍ Prause ၏ link များမြောက်များစွာနှင့် screenshots များပါရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃– Prause ၏ပထမဆုံးတွစ်တာမှာ Wilson & CBC အကြောင်းဖြစ်သည်။ Prause sockpuppet“ RealScience” သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်တူညီသောမှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကိုတင်ထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ CBC စာနှင့် CBC ၏တုန့်ပြန်မှုသည် Prause ၏မူလတွစ်တာအကောင့်မှ Prause ၏ပထမဆုံးတင်ပို့ချက်များဖြစ်သည် အမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်မှုအတွက်ဆိုင်းငံ့) ။ သူမသည် CBC နှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဤအပိုင်းများ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃– Prause ၏ပထမဆုံးတွစ်တာမှာ Wilson & CBC အကြောင်းဖြစ်သည်။ Prause sockpuppet“ RealScience” သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်တူညီသောမှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကိုတင်ထားသည်
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃– သင်၏BrainRebalancedတွင်တင်ထားသောရေးသားချက်များသည်ဂယ်ရီ Wilson အားသူ၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ (Prause ၏ Wilson အားခေါ်ဆိုခြင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားသူများ၊ misogynists) ကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားသူများက - အောက်တိုဘာလ 2015: Prause ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ထား
၃) နောက်ထပ်မုသားတစ်ခု။ သူတို့ကမှားယွင်းစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်တိုင် Daily Beast ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ဘယ်တော့မှခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။
RealYBOP သည်ဤစိတ်ကူးယဉ်ဆန့်ကျင်သော [ညစ်ညမ်းလှုပ်ရှားသူ] ၏ဥပမာကိုကုသမှုပေးသည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲအဖြစ်ဘယ်သောအခါမျှမဖော်ပြပါ။ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
၁၄ လနှင့် tweets ၂၀၀၀ တွင် RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မရှိသေးပါ။သူလေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်အစွမ်းထက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များသတင်းပို့ပါ).
XBIZ (Pornhub ကိုခုခံကာကွယ်နေသော) မှဝါဒဖြန့်ခြင်းသည် pornhub နှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်စစ်ဆေးခြင်း -
ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲသူ ၆ ဦး ကိုအင်တာဗျူးလုပ်သောစက္ကူတွင်ဆေးစွဲသူများသည်သူတို့၏သုံးစွဲမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခါအပျက်သဘောခံစားချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ စာရေးသူများက“ မကောင်းသောခံစားချက်များ” ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုလက်ခံသင့်သည်။ “ reboot” လှုပ်ရှားမှုကိုတိုက်ခိုက်ရန် RealYBOP သည်ဤအရိပ်မဲ့အကြံပေးချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ FYI - reboot လှုပ်ရှားမှုဆိုတာမရှိပါဘူး။
အနီရောင် herring နှင့်မုသား။ အနီရောင်သမင်နီ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်လူငယ်များအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ညီလာခံသို့အဘယ်ကြောင့်ဖိတ်ကြားမည်နည်း။ ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ရောဂါများကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာညီလာခံသို့ဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်တူသည်။ မုသာ - ညစ်ညမ်းအနုပညာရှင်တွေကိုတားမြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာဘယ်တုန်းကမှမဖော်ပြထားဘူး။
Trolling သုတေသီ Michael Flood ကဗြောင်လိမ်ညာ။ ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပြtheနာဖြစ်သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
RealYBOP သည်မုသားဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောပွားရှိခဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၁၃၅ ခု၏ဤ ၂၀၁၆ meta-analysis ၏အကျဉ်းချုပ် - မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
ဝိုး။ RealYBOP သည်သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိတော့ပါ။ သူမသည်တိုက်ခိုက်သည် Pornhub ကိုကလေးညစ်ညမ်းလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတင်ရန်အတွက်တာဝန်ခံရန်အသနားခံစာ
RealYBOP သည်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အားထပ်မံတွေ့ဆုံ သူမ၏မုသားကိုတွစ်တာ:
ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာတကယ့်ပြproblemနာဖြစ်တယ်လို့ RealYBOP ကဆိုပါတယ် ဆမ်ပယ်ရီ) ။ သူမလည်းလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်။ တည်ရှိသည် မဟုတ် ပုံတူကူးယူ။
RE:“ Replication” - ကြည့်ပါ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတိုးများလာခြင်းကြောင့်မုဒိမ်းကျင့်မှုနှုန်းကျဆင်းသွားသည်ဟုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုများဖြစ်သည်
Re: ပယ်ရီရဲ့စက္ကူ - ရှမွေလသည် Perry ရဲ့များ၏ဝေဖန်မှု "babyish အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းတကယ်ပဲပိုကြား Link ကိုလား? နှစ်ဦးအမျိုးသားစစ်တမ်းများ "(2019) မှစ. ရလဒ်များ။
ခေတ်မီစာရင်းအင်း "မော်ဒယ်" ပြီးနောက်ပယ်ရီ (Prause ထံမှဖိအားအောက်မှာ?) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, porn မဟုတ်အသုံးပြုမှုကြောင့်အဆိုပြုထား, ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုလျော့နည်းစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။
Perry ရဲ့သစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် gaping ပေါက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းအပေါ်တိကျသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်းခြင်းမရှိဘဲ, သူ့ပြောဆိုချက်ကိုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။
RealYBOP သည်ရေလွှမ်းမိုးမှုနောက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည်သူမသည်သုတေသနအားမှားယွင်းစွာတင်ပြနေသည်ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှု ၈၀ အရညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် - longitudinal လေ့လာမှုများ 8 အပါအဝင်):
RealYBOP သည်ပယ်ရီ၏အလွန်သံသယဖြစ်ဖွယ်အထီးကျန်လေ့လာမှုကိုထပ်မံကိုးကားခဲ့သည်။ အရာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်မရှိခဲ့ပါ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှန်အားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေသည်. Michael ရေကြီးမှု YBOP's expose's နှင့်အတူ - RealYBOP သည်ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ရှုံးသည်။ Nikky မလုပ်နိုင်တာကကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်မှုကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ သူမလုပ်နိုင်ဘူး
သူမငါ့ကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်, ထိုအချက်ကိုဖြေရှင်းရန်သူမနိုင်ခြင်း ပယ်ရီသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်မရှိပါသူမကရေလွှမ်းမိုးသောလေ့လာမှုတစ်ခုသာရှိခဲ့သည်ရှိသော်၎င်းသည် tweets ဖြစ်သည် မိမိအပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပံ့ 80 လေ့လာမှုများ.
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှထုတ်ဝေသော“ အရွယ်ရောက်စတိုးဆိုင်” ကိုမလိုချင်သူများအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်ပြောပြခြင်း။
အကြောင်းကို crowing RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် Prause featuring ဆောင်းပါး! ဆောင်းပါးက RealYBOP သည်မည်သည့်တရားဝင်အရင်းအမြစ်နှင့်မှချိတ်ဆက်မှုမရှိကြောင်းပြောဆိုသည်ဟုမဆိုပါ။
NCOSE ပြီးနောက်သွားသည်၊ အကြောင်းကြောင့် NCOSE သည် Pornhub ကိုလိုက်သည်။ RealYBOP သည် RealYBOP နှင့်စာတမ်းပါ NCOSE ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းကဲ့သို့လိမ်ခဲ့သည်။
အဲဒီအစားကောက်နုတ်ချက်များ BackPage ၏ကာကွယ်ရေးခဲ့ကြသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? Prause နှင့် Daniel Burgess ၏တရားဝင်အကြံပေးချက် ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် backpage.com။ ။ ထိုစွဲချက်တင်မှုကဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် backpage ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသူများအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
မဟုတ်ပါ PCES မဟုတ်ပါ။ “ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းလေ့လာခြင်း” (အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု) ကြောင့်ကွာရှင်းခြင်းကိုသင်္ချာနည်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းသည့်ညစ်ညမ်းမေးခွန်းလွှာဖြစ်သည်။ ငါနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး
တွေ့ရှိချက်သည်, ယခုလေ့လာမှုအဖြစ်မျှော်လင့်ထားခံရရန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES) အဖြစ်လူသိများသည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်၌ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း YBOP အားဖြင့်ဝေဖန်မှုနှင့်စိတ်ပညာပါမောက္ခ အ အဆိုပါ PCES ကိုလေ့လာမှု အစဉ်အဆက်ထုတ်ဝေသောညစ်ညမ်းဆုံး porn လေ့လာမှုဖြစ်နိုင်သည် (Hald & Malamuth, 2008) ။
အဆိုပါ PCES ပိုမိုညစ်ညမ်းတဦးတည်းအကျိုးကျေးဇူးများ သာ. အသုံးပြုနိုင်အောင်မေးခွန်းများကိုဒီဇိုင်းနှင့်သွင်းယူနေကြသည်။ သငျသညျ porn ကိုမသုံးကြပါလျှင်အမှန်စင်စစ်, porn အသုံးပြုမှုမရှိခြင်းသည်ဤတူရိယာနှင့်အညီသင့်ဘဝကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အများအပြား PCES-based လေ့လာမှုများအဖြစ်အဘယ်သူမျှမချဲ့ကား ပဲကောက်ချက်ချ! ဤ အဆိုပါ PCES ၏7မိနစ်ဗီဒီယိုအားဝေဖန်မှု စိတ်ပျက်အားလျော့စေသောစိတ်ပညာပါမောက္ခမှ Hald & Malamuth ၏အဓိကရလဒ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။psychometric အိပ်မက်ဆိုး"။
နောက်တဖန်အဘယ်ကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် / တွစ်တာသည်ပြည့်တန်ဆာနှင့် ပတ်သက်၍ တွစ်တာ တင်၍ အသုံးပြုသူအပေါ် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သာသက်ဆိုင်သနည်း။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ RealYBOP ၏တရားဝင်အကြံပေးချက် ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ စွဲချက်တင်မှုကဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် backpage ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသူများအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
ဒphilosophနိကဗေဒတစ်ခုမှရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစာစီစာကုံးတစ်ခုလား။ Buzzfeed နောက်ဘာလဲ။
ဇြန္လ 16, 2020ဖြေ - Cyberstalker RealYBOP ရဲ့လိမ်လည်မှုနှစ်ခု။ tweets ၂ ခုတွင် NCOSE ကွန်ဖရင့် (Alex Rhodes, Gary Wilson, Gabe Deem, Gail Dines) တွင်တင်ပြချက်များစွာ၏မျက်နှာပြင်များပါရှိသည်။ သူတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုအတွက်ဘယ်သူမှမပေးရ၊ မဟုတ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှငွေများလက်ခံရရှိသည် (၄ ခုအနက် ၃ ခုသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများဖြစ်သည်)
သငျသညျ "သိပ္ပံ" ချင်လျှင်ကြည့်ပါ ဒီမှာ 1000 လေ့လာမှုများ။
တစ် ဦး က 16 နှစ်အရွယ်, အစီအစဉ် - မောင်းနှင်, အမြင်အပိုင်းအစ?
RealYBOP ကလိမ်တယ်။ ပုံတင်ထားတဲ့ Twitter အကောင့်ကိုဘယ်တော့မှမဖယ်ရဘူး၊
twitter အကောင့်ဟာသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်။ https://twitter.com/UDepravity။ အဲဒီလိုပဲ RealYBOP ရဲ့တွစ်တာကသူမကိုအစီရင်ခံခဲ့တယ်:
တကယ်တော့ဒါဟာ Prause ဖြစ်ခဲ့သည် အဘယ်သူသည်သူမ၏ tweets ကိုဖျက်ပစ် ပစ်မှတ်ထား @UDepravity ဖြစ်သည်:
အဆိုပါ retweet ညစ်ညမ်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ RealYBOP သည် porn ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မထောက်ခံသည့်အခြားပြောဆိုချက်ကိုပြုလုပ်သည် -
ရုံ faux သားကောင်ပါးပျဉ်းတက်အောင်။ သူမကအမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားများဘယ်တော့မှမပေးနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ်လစ် Diana Davison RealYBOP သည်သူမ၏အနှောင့်အယှက်ပေးသူများအားသက်သေအထောက်အထားများကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်t ။ အဖြစ်မှန်:
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ သူမ၏အစီအစဉ်ကိုတွန်းအားပေးရန်ကပ်ရောဂါကို အသုံးပြု၍ သူ၏လိမ်လည်မှု -
Staley ၏ ၀ ါဒဖြန့်ချိမှုကတစ်ဖန်
RE: Cameron Staley ရဲ့ TEDx ဆွေးနွေးချက်။ သူသည်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည့်အခါသူသည် Prause ၏အတန်းကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည် သံမဏိ et al ။ 2013။ သူ၏ TEDx ဟောပြောချက်၌သူ၏မှားယွင်းမှုအနည်းငယ်ကိုသာသူကသူ၏ဝါဒဖြန့်မှုကိုထောက်ခံရန်သင်ကြားမှုသုညကိုကိုးကားခဲ့သည်:
Staley ကသူ၏ဆရာသည်ကျော်ကြားသောလိင်သုတေသီတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမရှေ့မှာ Prause ၏ကြားဖူးတယ် သံမဏိ et al ။ 2013 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ (Prause) တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်).
Staley ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုတည်ရှိသည် သံမဏိ et al, 2013။ သူက“ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ ဦး နှောက်ဟာစွဲလမ်းသူရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့မတူဘူး” ဟုဆိုသည်။ သို့သော်သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းသူများနှင့်မတူကြောင်းကိုသူဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါ။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၈ ခုသည် Staley နှင့်သဘောမတူညီပါ၊ ဘာသာရပ်များ ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းသူနှင့်တူသည်ဟုထောက်ပြသည် - ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013 (သာလွန်သောတုံ့ပြန်မှုသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်နည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်) မှတ်စု: သံမဏိ et al ။, ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ!
Staley သည် Grubbs ၏“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သည်။ Grubbs သည်စွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်ကြောင်းအကဲဖြတ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများသည်ကပ်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်သာပြisနာဖြစ်သည်ဟုစတာလီကပြောကြားခဲ့သည်။
သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံက PIED ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ် သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၇ ခုသည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာမှုအကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှု ၃၀ သည်လိင်နှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများ၊ - Steele et al ။ , 2013 (လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒမရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တုံ့ပြန်မှုများ) ။
သူက porn သည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြrelationshipsနာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် လေ့လာမှု ၇၅ ခုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုဆင်းရဲသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Staley အဆိုအရအော့ဖ်လိုင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ကောင်းပြီးသင် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဆင်ပြေမည်ဟုယုံကြည်သည်။ မထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့်ခြင်း လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်ချေပ.
ရေရှည်သက်ရောက်မှုများကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ RealYBOP သည်မည်သည့်အရာကိုမှတွစ်တာဘယ်တော့မှမပေးပါဘူး ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများ.
သတိပေးချက် - RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းရေးသားထားသောစာရွက်နှင့်ဆောင်းပါးများကိုဘယ်တော့မျှတွစ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ပါ လေ့လာမှုများ၏အများစုသည်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်ကိုသတင်းပို့ပါ.
မျှမျှတတ "ကျွမ်းကျင်သူများ" ။ ဟာသပဲ။ သုံး "ကျွမ်းကျင်သူများ" ဖြစ်ကြသည် xHamster နှင့်ပူးပေါင်း။ တစ်ခုက AVN ထဲမ ၀ င်ဘူး။ နောက်တစ်ခုရှိနိုင်သည် အခမဲ့မိန့်ခွန်းညွန့်ပေါင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်.
ဤနေရာတွင် RealYBOP ဆိုက်ကိုဖျက်သိမ်းသည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ Page သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကိုစစ်ဆေးပြီးယင်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ ကွာဟချက်များ၊
ဤတွင်တစ်ဖန် RealYBOP သည်သူချင်းများကိုရည်ညွှန်းသည် RealYBOP အသင်းဝင် ၎င်း၏သံသယဖြစ်ဖွယ်တောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံရန်အနည်းငယ်သာကိုးကားခဲ့သောအမ်မလီ Rothman ၏ထင်မြင်ချက်အတို (အကိုးအကား ၇ ခုသာဖြစ်သည်။ Rothman ၏ထင်မြင်ချက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ် meta-analysis မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis သည် Rothman ၏ထင်မြင်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15.
မည်သူမျှကြောင်းပြောကြားဖူးဘူး ညစ်ညမ်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအရည်ပျော်စေသည်။ RealYBOP အားဖြင့်မှားယွင်းသော
ဟားဟား။ ညစ်ညမ်းသောစက်ရုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အားအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်မဖြစ်စေပါ။ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျသည် Realybop ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်, နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်။ ဘာမျှမသိ)
ညစ်ညမ်းဆုများမရရန် Ron Jeremy အားတားမြစ်ထားကြောင်း RealYBOP မည်သို့သိသနည်း။ ဖြစ်နိုင်စရာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှာများစွာသောသူတို့နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်.
retweet တွင်ကုမ္ပဏီကြီးများကိုတရားမဝင်တရားစွဲဆိုမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည့် nutcase အကြောင်းပါရှိသည်။ ကြည့်ပါ သူ့အကြောင်းဆောင်းပါး။ RealYBOP သည်လိမ်နေသည် - nutcase ၌“ သုတေသန” ကိုမကိုးကားခဲ့သည့်အတွက်ဒေးဗစ်လိုင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလိုသုတေသနကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းဟုဆိုခြင်းမှာထောက်ခံမှုမရှိပဲ (RealYBOP သည်ဘယ်သောအခါမှဥပမာပေးသည်မဟုတ်) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ RealYBOP သည်သူမ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုကိုလက်မခံသောလက်ဟန်အမူအရာဖြင့်ဖမ်းမိခြင်းခံရသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013.
ရွံရှာဖွယ်ဝါဒဖြန့်ဖို့ပျံ့နှံ့ကူးစက်ရောဂါပူးတွဲရွေးချယ်။ RealYBOP သည်ဤတိုတောင်းသောထင်မြင်ချက်စာတမ်းကို RealYBOP ၏အဖွဲ့ဝင် Emily Rothman မှတာ ၀ န်ယူထားသည်။
၎င်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်တောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံရန်အနည်းငယ်သာကိုးကားခဲ့သည် (ကိုးကားချက် ၇ ခုသာ - ၂ ခုမှာ Rothman စာတမ်းများဖြစ်ပြီး ၂ ခုမှာမူသူမကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ) Rothman ၏ထင်မြင်ချက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ် meta-analysis မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis သည် Rothman ၏ထင်မြင်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15.
RealYBOP သည်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုမုန်းသည် (MindGeek အတွက်သုံးစွဲသူများနည်းသည်) ။ “ ဦး နှောက်အရည်ပျော်မှု” သို့မဟုတ်“ ကလေးများကိုအရူးများကဲ့သို့ပြုမူဆက်ဆံခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုချက်များသည်ဝါဒဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လ 29, 2020: Tweet ဟာလိမ်ညာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ TED အောက်မှာဝေဖန်ချက်ပေးတာပါ ငါ့ဟောပြောချက် (၅ နှစ်အနှောင့်အယှက်ပေးခံရပြီးနောက် TED သည်နောက်ဆုံးတွင် Prause ၏ပြင်းထန်သောဖိအားကိုမလွန်ဆန်နိုင်) ။ misogyny သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကိုဘာမျှမ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤစာတမ်းသည်အစီအစဉ်ဖြင့် ဦး ဆောင်သည့်လူမှုဗေဒပညာရှင်ထံမှ“ NoFap” (အလေးအနက်ထား) ဖော်ပြသော YouTube ဗီဒီယိုအနည်းငယ်ကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူမအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ရန်ယောက်ျားများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်သူမရွေးချယ်ရန်ရှင်းလင်းစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်။
တူညီသောချည်အတွက်ပိုသူမဟာ“ ဇာတ်လမ်းတွေကြားဖူးတယ်” လို့မှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှဥပမာမပြခဲ့ဘူး။
RealYBOP ကကျွန်တော့်အကြောင်းအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာ ၆ ခုတင်ပြီး၊ Prause ၏မုသားနှင့်အတုအယောင် screenshots များအားလုံးကိုဤစာမျက်နှာ၏ကဏ္ sections အတော်များများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉)
အဖြစ်မှန် - ငါတကယ်တော့ဝေးလံခေါင်သီတဲ့လစ်ဘရယ်တစ် ဦး ပါ။ အမှန်တရားအတွက်၊ ဒီအင်တာဗျူးကိုနားထောင်ပါ။ porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers (Wilson ကအတူအင်တာဗျူး)။ ကလူအမည်များကိုခေါ်ဆိုခြင်း (နှင့်ထို့နောက် "အသင်းအဖွဲ့များကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့" တည်ထောင်ရန်ကြိုးစားနေ) ကိုညစ်ညမ်းဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် ယူ. မသွားနိုင်သောသူတို့၏အမျိုးအအကြိုက်ဆုံးနည်းဗျူဟာကြောင်းသတိပြုပါ။ ငါနှင့်အခြားသူများအားအကြောင်းမဲ့ပြီများစွာတိုက်ခိုက်မှုအချို့မှတ်တမ်းတင်မယ့်စာမျက်နှာကိုဤကဏ္ဍများမှာကြည့်ရှိသည်:
၂၀၁၀ သြဂုတ် ၂၀၁၀ - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခု (El Paso & Dayton) အပြီးတွင်နီကိုးလ်ပရပ်နှင့်ဒေးဗစ်လိုင်တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုအဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်နာဇီတို့၏ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည့် (El Paso & Dayton)၊ နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၊ @BrainOnPorn နှင့်ဒေးဗစ်လိုင်တို့အပြီးတွင်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုအဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်နာဇီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။
Alos အနေဖြင့်ဤအဖြေရှာခြင်းကို 'serial false စွပ်စွဲသူ၊ - Porn စွဲလမ်းမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဖြစ်သော 'No Fap' မှအဲလက်စ်ရိုဒ်စ်သည်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံထားရသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုခဲ့သည် (PJ Media မှ Megan Fox)။ ငါ၊ အဲလက်စ်နှင့် porn ကိုအကြံပြုသူမည်သူမဆိုပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု Prause ၏အယူအဆများနှင့်ဆက်စပ်သောကောက်နုတ်ချက်သည်ဖြူသော supremacist ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီ Saga အတွက် Prause ရဲ့ဇာတ်ကောင်အများစုသရုပ်ဖော်ဖြစ်ကောင်းတရားစွဲဆိုမှုထဲမှာအသေးစိတ်အဖြစ် Rhodes တစ် ဦး နာဇီနှင့်အဖြူ - supremacist ကြောင်းသူမ၏စွဲချက်သည် ဤအရာသည် 2016 နောက်ပိုင်းမှအာရုံပြုနေသူမည်သူမဆိုကိုမအံ့သြသင့်ပါ။ SJW သည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သဘောမတူသည့်အချိန်တွင်ထိုသူသည်နာဇီဖြစ်လာသည်။ Rhodes ရဲ့ရာဇဝတ်မှုလား သူသည်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ Gavin McInnes အားသူအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းသူ့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့သည် ဒု။ Prause သည် Rhodes သည် McInnes နှင့်တစ်ကြိမ်စကားပြောခဲ့ပြီးသူ၏မျက်နှာ၌အရက်မသောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရာသူသည်သူ့ကို Proud Boys (အန်တာဖာနှင့်လမ်းပြိုင်ရန်လမ်းပြရန်အခက်အခဲများစွာကြုံခဲ့ရသူ) ကိုထောက်ပံ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကျနော့်အမြင်တွင် Proud Boys သည်ယောက်ျားသောက်သုံးကလပ်အသင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမခေါ်နိုင်သေးသော်လည်း၊ Rhodes သည် Proud Boys ကို“ အစွန်းရောက်အုပ်စု” အဖြစ်အကြိမ်များစွာငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူဟာဘယ်တော့မှအသင်း ၀ င်မဟုတ်၊ မည်သည့် Fap သည်မျှနိုင်ငံရေးအရမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းကိုလိုအပ်သူမည်သူမဆိုအားစွဲလမ်းမှုအကူအညီပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြူစူပါပါဝါသမားမဟုတ်သူမက်အင်နက်နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခု၏အားနည်းသောအသင်းအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် Prause အားသူအား“ အဖြူ supremacists” နှင့်အဆက်အသွယ်ဆက်လုပ်ခြင်းမှမတားဆီးနိုင်ပါ
တွစ်တာတွင်တရား ၀ င်စစ်ဆေးမှုကိုဖွင့်လိုက်သောကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကိုထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက် Prause အားတာဝန်ခံမှုရှိပါသလား။
ထို့အပြင် Prause နှင့်သူမ၏ alias ကိုသိထားပါ @BrainOnPorn twitter အားအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင်အမည်ရှိသည်။ အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်သည်အဂတိလိုက်စားမှုအတွက် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းသည်အဖြူအာဏာနှင့်ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
RealYBOP ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောတွစ်တာများသို့။ ပထမ ဦး စွာ ချီးမွမ်းကြလော့ - ကျွန်ုပ်သည် Molyneux မှတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါဒီမှာ Prause တည်ရှိသည်ဖုံးအုပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိသည်: Stefan Molyneux အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က
Prause နှင့် Ley မကြာခဏအသုံးပြုနိုင်သည် အထက်ပါစခရင်ပုံ ကျွန်တော့်ရဲ့ Stefan Molyneux နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တာကငါဟာအဖြူ supremacist တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တာပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က နီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် RealYBOP twitter လူမှုမီဒီယာမှတဆင့် Molyneux Podcast တခုကိုဖြန့်နှင့်ပုဂ္ဂလိကအီးမေးလ်များကို (ခါးပန်းနှင့် IITAP အဖွဲ့ဝင်များ) အတွက် Molyneux တစ်ဦး "အဖြူ supremacist" ကြောင်းဟုဆိုကာနှင့်သူ၏ပြပွဲနည်းလမ်းအပေါ်မှာငါ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ပြုလုပ်ထားသည် ငါရယ်a"အဖြူ supremacist ။ " ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုသည် podcast ၏ဖန်သားပြင်များကိုပင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများထဲသို့ထည့်ခဲ့သည် YBOP သည်သူမနှင့် Daniel Burgess တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အငြင်းပွားမှု။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Molyneux ရဲ့ အမြင်များ, ကအကြံပြုဖို့, သင်တန်း, စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် သူ၏ အမြင်များသတ္တုတွင်းဖြစ်ကြသည်။
Molyneux ရဲ့နိုင်ငံရေးကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူနဲ့အင်တာဗျူးဖို့ပြောတဲ့အခါငါလည်းမသိခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလူမျိုးရေးအပေါ်သူ၏အမြင်များကိုညွှန်ပြဘာမှမတှေ့နိုငျတယျ။ အဖြစ် ငါတို့အင်တာဗျူးမှာမင်းကြားနိုင်တယ်၊ ငါတို့နိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ဘဲ porn ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါအင်တာဗျူးများနှင့် podcasts တွေကိုအပေါ်ရာပေါင်းများစွာပြုမိပါပြီ။ အလားအလာရှိသောအင်တာဗျူးသူပြောသောစကားလုံးတိုင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
ငါသည်ငါ့ 12,000 စာမျက်နှာက်ဘ်ဆိုက်၏ဓားမနောက်ကနေဒီအင်တာဗျူးကိုဖယ်ရှားကြပြီမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားထောက်ခံသူများတွေးမိ။ အဖြေ: ငါ့ stalkers ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နီကိုးလ် Prause နှင့် Twitter ပေါ်တွင် RealYBOP မဟုတ်မမှန် "ဂယ်ရီ Wilson ကအဆိုပါ Molyneux Podcast တခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ " အဲဒီတကယ်တော့ကျွန်မပုန်းခိုမမြှင့်တင်မဖြစ်ကြောင်းကိုမြောက်မြားစွာကြိမ်အခိုင်အမာပါပြီ။ ဒါဟာအခြား Podcast တခုကိုခဲ့ - ငါပြုထားသောရာပေါင်းများစွာထဲက။
စိတ်ရှုပ်ထွေးသော Stalker RealYBOP သည်နောက်ထပ်လိမ်လည်မှုများနှင့်လှည့်စားမှုများဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
Prause ၏နောက်ထပ်လိမ်လည်မှုများ - ကျွန်ုပ်သည်“ နေ့စဉ်ခေါ်ဆိုသူ”၊ “ David Duke” (သို့) The Daily Stormer” တွင်မည်သည့်အခါမှကျွန်ုပ်မပါခဲ့ပါ။
1) “ နေ့စဉ်ခေါ်ဆိုသူ”ဖြေ - အဲဒီမှာစခရင်ရိုက်ကူးမှုမရှိဘူး၊ ဒါကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။
2) ဒေးဗစ်မြို့စား ကျွန်တော့်ကို Smear လုပ်ဖို့အင်တာနက်ကိုသူတို့ရှာဖွေနေတာ Ley / Prause သည်ကျွန်ုပ်၏ TEDx ဟောပြောချက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ထင်ရှားသော (စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်) သော David Duke ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ TEDx ဟောပြောချက်တွင်ကြည့်ရှုသူ ၁၂ သန်းခန့်ရှိသဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များသည် Wilson ၏ဟောပြောချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ " ၎င်းသည်ဂယ်ရီ Wilson အား“ အဖြူ supremacist” အဖြစ်မည်သို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဟစ်တလာသည်သူ၏ခွေးများကိုချစ်သောကြောင့်ဤရယ်စရာကောင်းသောပြောဆိုချက်သည်ခွေးချစ်သူများအားလုံးနာဇီများဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခြင်းနှင့်တူ၏။ ဒါဟာ Matrix ထုတ်လုပ်သူတွေဟာနာဇီတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတယ် ဒါဝိဒ်သည် Duke သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်.
3) “ နေ့စဉ်မုန်တိုင်း”: ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီ Irnn (Gnostic Media) အင်တာဗျူးကိုယခုအသုံးမ ၀ င်သော newsfeed တွင်တင်ခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်။ နေ့စဉ် Stormer ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသော်လည်းလူမျိုး၊ ဘာသာရေးနှင့်အဖြူရောင်အခွင့်အာဏာနှင့်ဘာမှမပတ်သက်သည့်အခြားဆောင်းပါးများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အသံလွှင့်ဌာနများလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ မည်သူမဆို (smear မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုလောင်ကျွမ်းရန်ကြိုးပမ်းသူများအပါအ ၀ င်) Irvin ၏ Podcast ကိုတင်ခဲ့သည် The Daily Stormerမည်သူမဆို Reddit (သို့) Quora တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုတင်ထားသကဲ့သို့၊
Gnostic Mediais သည်အဖြူရောင် supremacist သို့မဟုတ် antisemitic podcast မဟုတ်ပါ၊ ၎င်း၏ host Jan Jan Irvin သည်အဖြူ supremacist သို့မဟုတ် antisemitic မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ရန်, ဇန်နဝါရီ Irvin တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ဂျိုး Rogan အတွေ့အကြုံအပေါ်ပုံမှန် guest ည့်သည်နှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မကြာသေးမီကတိုက်ခိုက်ခဲ့သည် “ ဂျူးတို့အတွက်ငွေရလိမ့်မည်။ " ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီအိုင်ဗင်၏ယုံကြည်မှုများမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သူ၏လက်ရှိယုံကြည်မှုများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအိုင်ဗင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆွေးနွေးခဲ့သည် သာ အင်တာနက်အပြာစာပေ၏ဆိုးကျိုးများ။ 2014 ခုနှစ် Podcast တခုကိုမှ link တစ်ခု: https://logosmedia.com/2014/01/.
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ Jan Irvin ဖြစ်သည် မဟုတ် အဖြူ supremacist သို့မဟုတ် antisemitic သည်သူ၏သည်အခြား podcasts တွေကိုအစဉ်အဆက်ကမှအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ နေ့စဉ် Stormer website က။ ငါတို့ကိုယ်တိုင် Prause ကကျွန်ုပ်၏ podcasts များကိုအဖြူ supremacist ဖိုရမ်များတွင်တင်ခဲ့သည် (ငါတို့ podcasts များသည်လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ host များကအဖြူ supremacists မဟုတ်သော်လည်း).
The RealYBOP သည် Gabe Deem ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားသူဟုခေါ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူသည်မေးခွန်းထုတ်စရာအမြင်များရှိသောအချို့၏ tweet များကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Gabe သည်အဖြူရောင်စွမ်းအားကို“ ခုခံကာကွယ်ခြင်း” မပြုခဲ့ပါ။ YBOP ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအား RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာဟုရေးထားသည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ ကွာဟမှုများ၊ စာရင်းပြုစုထားသည့်လေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်လုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးသည်။
RealYBOP သည် nuttier ကိုရရှိသည်။ သူမ၏နောက်လိုက်တ ဦး နှင့်အတူငြင်းခုံသူမကသူမအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဝေးနေသည်ဟုထင်နေသောသူ (သူမပြောသမျှအားလုံးသည်မုသာဖြစ်သည်ဟုသူထင်သည်)
RealYBOP သည်ရောဂါဗေဒမုသာကောင်ဖြစ်ပြီးသက်သေအထောက်အထားလုံးဝမရှိပါ ငါသုံးခဲ့သည် podcast တစ်ခုလုံး porn နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆွေးနွေးခြင်း။
အဆိုပါ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသည်, Nikky အားဖြင့်ပိုပြီးအသရေဖျက်မှုနှင့်အတူ။ Molyneux သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောအခြားသူတစ် ဦး အကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သည့်အခါကမျှမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါ။ ပြည့်စုံသောသင်္ခါရ။
အဘယျသို့သောလိမ်လည်မှု: ငါလက်ဝဲလစ်ဘရယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆွေမျိုးသားချင်းများ (သူမငါပြောခဲ့သို့မဟုတ်ရေးသားခဲ့သည်တစုံတခုကိုဥပမာတစ်ခုပေးဘယ်လောက်သတိပြုပါ) ။
ပိုများသောမုသာစကားနှင့် David Ley ၏ hit-piece အဖြစ်တွစ်တာကိုကြေငြာခဲ့သည် အသက်ပင် ပစ်စ်ဘာ့ဂ် (Alex Rhodes ဇာတိမြို့) တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု ဤမျှလောက်များစွာသောမုသာစကားနှင့် sordid အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (အများအပြား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ Rhodes အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်): ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - Ley & Prause သည် Gary Wilson၊ Alexander Rhodes နှင့် Gabe Deem တို့အားအဖြူ supremacists / ဖက်ဆစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် (Prause သည်မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင် Rhodes & Nofap ကိုတိုက်ခိုက်သည်)).
အမြဲတမ်းလိုပဲ၊ RealYBOP သည်“ ရာထူးတိုး” သောမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမျှမရှိပါ။ သူမမှာသက်သေသာဓကရှိရင်သူတို့ကို Tweet လုပ်ခဲ့မှာပါ။
Rhodes နှင့်အခြားသူများအားရှုတ်ချရန် Prause / RealYBOP ၏သစ်ပင်အဖြစ်ဆိုးကိုတမင်ရှောင်တိမ်း။ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတရားရုံး၏စာရွက်စာတမ်း ၂ မှကောက်နုတ်ချက်အချို့ -
ပထမပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် - ၁-၂၄-၂၀ - အဲလက်စ်ရော့ဒ်စနှင့်နီကိုးလ်ပရာ့စ် (စာမျက်နှာ ၂၀)
တရားသူကြီးများထုတ်ပယ်ရန်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်အဲလက်စ်ရိုဒက်စ်၏အကျဉ်းချုပ် (မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၀) - စာမျက်နှာ ၂၆ မျက်နှာ။
စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော - ချီးမွမ်းခြင်း၌ပါ ၀ င်သည် se နှုန်းအသရေဖျက်မှုငါသေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှုများစေလွှတ်ပြီဟုဆိုကာ။ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အရသူမလိမ်နေသောကြောင့်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ စွပ်စွဲချီးမွမ်း me ပြီးတော့သူမကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။ တရားရုံးကတဆင့် Prause ဟာကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တယ်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်လက်ရှိတွင်အားဖြင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရပါတယ် Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes။ နောက်လိုက်ဖို့နောက်ထပ်တရားစွဲမှု?
ကျွန်ုပ်သည် RealYBOP ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု၏သားကောင်များစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ.
ဇူလိုင်လ 1, 2020: ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ဟောင်း Jenna Jameson က Jameson ကို NoFap ကိုဝေဖန်နေသည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ညွှန်းထားသောစခရင်ရိုက်ကူးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် RealYBOP ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည် (Jameson က RealYBOP ကို“ Shady asf** k” ဟုခေါ်သည်) ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် RealYBOP ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး Jamseon သည် @NoFap (ဂျိမ်းဆန်သည် NoFap ၏ပရိတ်သတ်နှင့်နောက်လိုက်) ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့ပုံပေါ်စေသည်။
ဤတွင်ရဲ့ အစစ်အမှန် tweet:
ငါ RealYBOP ကိုလိမ်သည်ဟုဖော်ထုတ်သည်။ Jenna Jameson က RealYBOP ကို“ shady af” ဟုခေါ်။ ငါ့ကိုပြန်ဖြေသည်။
ရိပ်ရတဲ့ "AF" မှန်သည်။
အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်အားအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသော်လည်း RealYBOP သည် Rhodes ကိုတွစ်တာတွစ်တာတစ်ခုဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူသည်“ ကျရှုံးသည့်သရုပ်ဆောင်” ဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ တကယ်တော့အဲလက်စ်ဟာ Tom Cruise ရုပ်ရှင်မှာတစ်ချိန်ကအပိုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲလက်စ်သည်လက်တွေ့ဟာသတစ်ခုကြောင့်မတော်တဆ“ ကျော်ကြား” ခဲ့သည်။ အဲလက်စ်ဟာသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ RealYBOP ဟာလိမ်ညာသူပဲ။
သူမဟာလိမ်ညာသူအဖြစ် outed ဖြစ်ခဲ့ပြီး Jenna Jameson, RealYBOP ရဲ့ fuck ဆိုတဲ့အရိပ်အရိပ်ကိုခံစားခဲ့ရတယ် သူမ၏သိသာမုသာအပေါ်ဆင်းနှစ်ဆအသရေဖျက်မှုများစွာထပ်မံထည့်သွင်းနေစဉ် (သူမရှေ့နေများကိုမီးမောင်းထိုးပြနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူမ၏ ၄ ယောက်မြောက် Hilton ဝတ်စုံနှင့် Rhodes ဝတ်စုံတွင် ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ) RealYBOP သည်အခြား RealYBOP အသင်းဝင်များကိုလျော်ကြေးပေးသည့်မဟာမိတ် xHamster ၏“ ဆလိုက်” တွစ်တာကိုသတိပြုပါ ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်!) RealYBOP ပြောသမျှအားလုံးသည်မမှန်ပါ၊
xHamster မှဝါဒဖြန့်ချိခြင်းများအပြင် “ ဆလိုက်” သည် Nofap ကိုမဖော်ပြထားပါ။ သူတို၏ tweets များတွင်သူမပြောသောအရာများကိုမပံ့ပိုးသော tweeting ပစ္စည်းများပုံမှန်အားဖြင့် RealYBOP နည်းဗျူဟာ။
ထို့အပြင် RealYBOP ၏သေဆုံးမှုခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြောဆိုမှုများလည်းရှိသည်။ RealYBOP သည်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုဥပမာတစ်ခုကိုတစ်ခါမျှမထုတ်လုပ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသူများအနက်မှမည်သူမျှသူမကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိပါ။
RealYBOP သည် NCOSE၊ ဂျာနယ်ဂုဏ်သိက္ခာကိုရှုတ်ချသည်။ အရာအားလုံးသည်အတုအယောင်ဖြစ်သော်လည်း၊ သူမသည်“ အတုသိပ္ပံ” ၏အမှန်တကယ်ဥပမာများကိုဘယ်တော့မှမဖော်နိုင်ပါ။
“ အတု” အကြောင်းပြောခြင်း - RealYBOP သည်သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုကိုလက်မခံသောလက်ဟန်အမူအရာဖြင့်ဖမ်းမိခြင်းခံရသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ သူမသည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုသည်အခြားစွဲသူများနှင့်ကွဲပြားကြောင်း (ကိုကင်းသည်သာဓကဖြစ်သည်) မှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ကြပါ၊ အမှန်တကယ်စက္ကူကသူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အရိပ်အမြွက်ကိုပင်တစ်ခါမျှမရခဲ့ပါ။ အောက်မှာမှတ်ချက်ပေး စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause ၏, အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် သူမရဲ့အမျှင်များဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်
သူမကသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မားစွာဖော်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမသည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်မှုကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိဟုပြောကြားခဲ့သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။ အမှန်တကယ်ရလဒ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကောက်ချက်ကိုသူမည်သို့ကောက်ယူနိုင်မည်နည်း။ သူမသည်သူမတွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်သည်။
သို့သော်ဤလေ့လာမှုကအွန်လိုင်း Erotica အားကြည့်ရှုခြင်းအားပြproblemsနာရှိသူများမှ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့မှ ဦး နှောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုပါ။ အုပ်စုသည်စွဲသူများ (သို့) မစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်။ အများကြီးပို
အားလုံးသက်သေခံရန်ဖမ်းယူထားသည်: ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့အပေါ် သံမဏိ et al။ , 2013 (မှတ်ချက်များအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause SOCKS ရုပ်သေးဆွေးနွေး)
RealYBOP သေးဖီးလ် Zimbardo, disparages။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် Ley ကိုစျေးဝယ်သည်နှင့်အမျှ Zimbardo သည်လူငယ်များ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအောက်ပါတင်ပြချက်များ၊ စာအုပ်များနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့် Prause & RealYBOP သည် Zimbardo ကိုအထင်သေးသည်။
၎င်းသည်သတိပေးချက်မဟုတ်ပါ Prause သည်ဤကြေညာချက်၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုလူအများကယုံကြည်ကြသည်။
၏ထုတ်ဝေသူ သံသယ မဂ္ဂဇင်း, မိုက်ကယ် ShermerZimbardo ၏ကျော်ကြားသော“ စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်စမ်းသပ်မှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလိမ်လည်မှုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ Shermer သည်စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်စမ်းသပ်မှု၏ကာကွယ်မှုများစွာကိုတင်ခဲ့သည်။
Phil Zimbardo ၏ဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်ပုံ အဆိုပါစတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်စမ်းသပ်မှု၏သိပ္ပံနည်းကျတန်ဖိုးကိုကဘာလဲ? Zimbardo သူ့အလုပ်ဆန့်ကျင်သစ်ကိုစွပ်စွဲချက်တုံ့ပြန်မှု.
ဘာ? လေ့လာမှုသည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုခြင်းသို့မဟုတ် ED (ယောက်ျားများတွင်၎င်းတို့တွင် ED ရှိမရှိသိလား) သို့မဟုတ်သုက်ပိုးနှိမ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆီလျှော်မှုဝါဒဖြန့်ခြင်း။
Cyberstalker RealYBOP သည်သူမအားပုံမှန်သားကောင်များကိုအမှတ်တံဆိပ်ပြုသူတိုင်းအတွက် twitter ကိုရိုက်သည်။ ထို့နောက်သူမသည်သူတို့၏ချည်များထဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်လာသည်။ ဤတွင် RealYBOP သည် Liz Walker၊ Gary Wilson၊ Gabe Deem နှင့် Laila Mickelwait တို့အားအကြမ်းဖက်မှုများတွင်ပါဝင်သည်ဟုစွပ်စွဲသည်။ RealYBOP သည်အသရေဖျက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည် se နှုန်း.
ဇူလိုင်လ 3, 2020: RealYBOP သည်အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ် (Nofap ချည်နှောင်ခြင်းကို ၀ င်ရောက်သည်။ သူမရှေ့နေများမှတစ်ဆင့်မီးလောင်နေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်)
ဇူလိုင်လ 3, 2020 နှင့် ဇူလိုင်လ 7, 2020NoFap နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး YouTube ရှိ“ nofap” ဗီဒီယိုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်“ Follin” အကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ Nofap မှာတရားဝင်ဗီဒီယိုမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ကျပန်း youtubers ပဲ။ အနတ္တ။ ဘာ cyberstalker လဲ
ဇူလိုင်လ 3, 2020ဂျာမန်ဘွဲ့ဒီဂရီမှကျပန်းဝါကျကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ ကောက်နှုတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ခြင်းကိုဆက်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် Nofap ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမဟုတ်ပါ - ထိုကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုးမရှိနိုင်ပါ။ 20 နှစ်အရွယ်ကနေကိုယ့်အမြင်စက္ကူ။
ဘာဟာသတုန်း။ RealYBOP သည်ပြproblemsနာများ ဖန်တီး၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသီအချို့၏စက္ကူ။ ငါ EEG အခါ, ဒီဖျော်ဖြေမှုရှာပါ သူမ၏လူသိများသောလေ့လာမှုသည်အတိုင်းအတာများရှိသောတွင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ 1) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး.
RealYBOP သည်ပညာသင်ကြားသူမဟုတ်ပါ (သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ငွေတောင်းခံခြင်း) ဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်ပေးချေခြင်းခံရသည် လိင်ကစားစရာများကိုမြှင့်တင်ပါ နှင့်အလွန်အမင်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာ "orgasm တှေးတောဆငျခွအောက်မှာသော " FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး။ (ကြည့်ရှု Bloomberg.com ထုတ်ဖော်ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Prause ၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုမြှင့်တင်ရန်ငှားရမ်းခဲ့သည် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်အငြင်းပွားဖွယ် ကုမ္ပဏီ။ သူမအတွက် orgasm တှေးတောဆငျခွ စွပ်စွဲ Prause လေ့လာမှု ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ အများကြီးပို - အခမဲ့မိန့်ခွန်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြယ်ပွင့်များအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲကာနီကိုးလပ် Prause လေ့လာမှုတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်.
RealYBOP မှလေ့လာမှုကိုတွစ်တာ realYBOP "ကျွမ်းကျင်သူ", Joshua Grubbs Grubbs ရေးထားတာနှင့်ဆန့်ကျင်။ porn စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံး နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသည်ပိုမိုဆင်းရဲသော Erectile လည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အမှန်တကယ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ED အကြားပြင်းထန်သောဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Grubbs မှကစားသောဂိမ်းကိုကြည့်ပါ။ "Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား၏ဝေဖန်မှု Cross-Section နှင့် Josh Grubbs အားဖြင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019), မှစ. ရလဒ်များ။ အဖြစ်မှန်: ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ 40 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများနှင့်အောက်ပိုင်း arousal ကျော်ပါဝင်သည် (Grubbs လေ့လာမှုအပါအဝင်) ။ The အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
Grubbs သည်သူ၏အမှားကင်းပြီးဘက်လိုက်သောရေးသားချက်ဖြင့်ကစားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအုပ်စု ၃ စုသည်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသည့်မိနစ်နှင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Erectile လုပ်ဆောင်မှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
နမူနာ3သည်နမူနာအများဆုံးဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီအသက်အပိုင်းအခြားသည် PIED ကိုအစီရင်ခံရန်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ နမူနာ (၃) သည်အဆင့်မြင့်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူနိုင်မှုတို့အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည် (-0.37).
Grubbs ကျော်ကြားမှုဟုဆိုခြင်းမှာဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုမထောက်ခံသောပြောဆိုချက်ဖြစ်သည်. ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသောဘာသာရေးဖြစ်ပါက Josh Grubbs အတွက် ၀.၃၀ သည်“ အားကောင်း” သည်။ Grubbs ရေးထားတာအရ ၀ တ်ရည်သည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေလျှင် ၀.၃၇ သည်“ သက်သေအထောက်အထားအကန့်အသတ်ရှိ” သည်။ “ ရိပ်မိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” နှင့်ဘာသာတရားများအကြား ၀.၃၀ ဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာဂရော့ဘ်ကဘာပြောခဲ့သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူက“ အားကောင်းတယ်” ဟုဆိုသည်။
ဘွဲ့ကြိုနမူနာများမှလေ့လာမှုနှစ်ခုမှရလဒ်များ (လေ့လာမှု ၁၊ N = 1; လေ့လာမှု ၂၊ N = 331) မှဘာသာတရားနှင့်အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုအပေါ်စွဲလမ်းမှုအကြားခိုင်မာသည့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Grubbs သည် ၀.၃၀ ကို“ ကြံ့ခိုင်မှု” ဟုသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏အနုပညာဖြင့်ဖန်တီးထားသောမှတ်စုကိုထောက်ခံသည့်အခါဘာသာရေးရှေးရှေးများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းသာ“ ရိပ်မိ” သည်၊ မည်သူမျှ၎င်းနှင့်ပြreallyနာမရှိပါ။
လက်ရှိ ED လေ့လာမှုတွင် Grubbs သည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်စပ်မှု (၀.၃၇) ရှိခဲ့သည့်သူ၏“ ဘာသာရေး - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုထက်ပိုမိုသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စိုက်ထူခြင်းဥပမာ ၃ အပါအ ၀ င်ပိုမိုစိုက်ထူခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သနည်း။
နမူနာသုံးခုကိုကြည့်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် erectile လည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံမှုအနည်းငယ်သာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအခြားလူသိများသည့်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်မကိုက်ညီသည်။ (အလေးပေးဖော်ပြထားသည်)
2019 ခုနှစ်တွင် Grubbs သည် ၀.၃၇ ကိုညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်“ အလွန်ကန့်သတ်သောအထောက်အပံ့” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ စာရင်းအင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Grubbs ၏အမြင်များသည် ၄ ​​နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါကအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ၊ ဂျိုဗ့်ဂရော့စ်ကသူ၏အစီအစဉ်ကိုဘက်လိုက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Grubbs နှင့်အခြား pro-porn "ကျွမ်းကျင်သူများ" www.realyourbrainonporn.com တွင်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်.
၁) စာမျက်နှာကသိပ္ပံပညာအကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး - RealYBOP နောက်တစ်ခါလဲလျောင်းနေတယ်။ (၂) စွဲစွဲလမ်းမှုအားမည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမဆိုလက်စွဲတွင်မသုံးပါ။ အားလုံးသည်“ ရောဂါ” ကိုအသုံးပြုသည်။
porn စွဲ၏ deniers ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေ manual ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်ပူပနျခွငျးနေကြတယ်, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲနှင့်လိင်စွဲနှစ် ဦး စလုံးဖော်ထုတ်ရန်သင့်လျော်သည်။ ခေါ်တယ် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ " မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဝါဒဖြန့်ချီရေး "ကျနော်တို့ရှုံးနိမ့်ပေမယ့်ငါတို့အနိုင်ရ" ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွက် deniers တစ် ဦး အဖြစ်ဤရောဂါသစ်ကိုလှည့်ရန်အားလုံးရပ်တန့်ဆွဲထုတ်နေကြသည် ြငင်းပယ်ခြင်း "စွဲလမ်းမှု" နှင့် "စွဲလမ်းမှု" နှစ်ခုစလုံး သူတို့၏အခိုင်အမာသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်
အချိန်အယ်ဒီတာ Belinda Luscombe မုသားများအတွက် RealYBOP ထွက်ခေါ်ဆို:
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုကုထုံးဆိုင်ရာကောလိပ်မှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မရှိခဲ့ပါ။ RealYBOP လိမ်တယ် Belinda ကိုပိတ်ဆို့ထားသည့် RealYBOP သည်ဗြိတိန်ရှိလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုကုထုံး၏ဖော်ပြချက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဒီမှာ RealYBOP Belinda ကိုပြန်ကြားချက် (အံ့အားသင့်စရာ၊ link မရှိ):
WHO ၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ၂ နှစ်အရွယ်သာမန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။ (နောက်တဖန် ICD-2 နှင့် DSM11 သည်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြရန်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးမပြု - ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲနှစ်ခုစလုံးသည်“ ရောဂါ” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ စွဲ ") ။
Retweets“ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုကွန်ယက်” -
နောက်တဖန်အဘယ်ကြောင့် site ကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အဆိုတော်များနှင့်ပတ်သက်။ တွစ်တာအသုံးပြုသူများအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဟုဆိုကာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း
ဇူလိုင်လ 3, 2020 နှင့် ဇူလိုင်လ 7, 2020NoFap နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး YouTube ရှိ“ nofap” ဗီဒီယိုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်“ Follin” အကြောင်းပြောရုံသာဖြစ်သည်။ Nofap မှာတရားဝင်ဗီဒီယိုမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ကျပန်း youtubers ပဲ။ အနတ္တ။ သူမသည်ထိုကဲ့သို့သောဆိုက်ဘာသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။
7-7-20: Nofap ပြီးနောက်တွစ်တာသုံးခု (tweet1, tweet2, tweet3) obsessive cyberstalking အကြောင်းပြောဆိုပါ။ သူမသည်ဤဆီလျှော်သောဒေတာနှင့်အတူတက်လာမယ့်တစ်နေ့လုံးကုန်ရပြီ။ သူမကအဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်မှန်းသူမပြောပေမယ့်သူမအကြောင်းဘယ်တော့မှမရေးခဲ့ဘူးပါဘူး။
Ley သည်သူ၏“ ကိရိယာအသစ်” ကို အသုံးပြု၍ ခဏတာဖြည့်စွက်သူများအားဖျက်ပစ်လိုက်သော nofap ထင်မြင်ချက်များကိုဖယ်ရှားရန်ရက်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည် RealYBOP သည်ထို tool ကိုတွေ့ရှိပြီး Ley ကို screenshots များထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဟေ့ RealYBOP ငါတို့မှားကြောင်းသက်သေပြရန်သင်၏အီးမေးလ်များအားလုံးကိုပေးပါ
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု - မည်သူမဆို reddit / nofap တွင်တင်နိုင်သည်။ ဖျက်လိုက်သောမှတ်ချက်များသည် nofap အဖွဲ့ဝင်များမှမဟုတ်ကြောင်းကောင်းသောရင်းမြစ်များမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ အဲဒီအစား, မှတ်ချက်များကို trolls အားဖြင့်ခဲ့ကြသည်။
Ley အဆိုပါ bullshit အပေါ်ထပ်ပြောသည်:
RealYBOP သည် Ley's BS ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
ဇူလိုင်လ 10, 2020: RealYBOP သည်သူမ၏အသစ်တွေ့ရှိသောကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီး NoFap mods မှပယ်ဖျက်သောမှတ်ချက်များကိုသူမနေရာတွင်ရှာရန် "သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှု" ကိုသာအသုံးပြုသည်။ သူမအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသည်) ။ သေခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်သည်ဟု ၅ နှစ်ပြောဆိုပြီးနောက်၎င်းသည်သူမပထမဆုံးရေးသားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ RealYBOP ၏စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးရှိသည်ကတည်းက သက်သေအထောက်အထားလုပ်ကြံ, ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ လဲလျောင်း နှင့် သူ့ကိုယ်သူမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်မတရားကျွန်ုပ်တို့သည် porn ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များ၌သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတင်ရန် RealYBOP မှအတိတ်ကိုပြန်ပို့မည်မဟုတ်ပါ။
ဇူလိုင်လ 11, 2020: Nofap အပေါ်မှတ်ချက်တွေကို Trolling ကသူမအတွက်“ ခြိမ်းခြောက်မှု” သာတင်ခဲ့သည်။ သတိရပါ၊ Prause / RealYBOP သည်သူမနှင့်အခြားသေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကို KNU သိရှိသူများစွာကစေလွှတ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမကလိမ်နေတဲ့အတွက်သက်သေမပြခဲ့ဘူး။
အထူးအပိုင်း - ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လိမ်လည်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း။ စွပ်စွဲချက်များဝေဖန်မှု (၂၀၂၀).
Prause နှင့် RealYBOP အဖွဲ့ ၀ င် ၃ တို့သည်လေ့လာမှုတစ်ခုမှဘာမျှမပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း Ley နှင့် Prause မှတွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းသောလိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်နေသဘောထား၏ဆိုးကျိုးများကိုအမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ” ငါဖော်ထုတ်အဖြစ်ဘာမျှအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ပါ ဒီ5tweet ချည်။
သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ RealYBOP နှင့်လီတို့သည်ကျွန်ုပ်နောက်သို့ လိုက်၍ လိမ်ညာမှုများဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောမတူသူများကိုသတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘာမှ။ သူတို့ရဲ့ tweets အနည်းငယ်:
နောက်ထပ်မုသားပြောခြင်းမှာကျွန်ုပ်သည်လေ့လာမှုအပြည့်အ ၀ မရရှိဟုဆိုခြင်း (ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာမှုအပြည့်ရှိကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်):
RealYBOP မှကြော်ငြာတင်သည့် Hominem
Ad hominem အပြင် Ley & RealYBOP သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်လေ့လာမှုကို“ ငါကြိုက်တယ်” ဟုပြောဆိုခြင်းသည်လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်တူညီသည်။ ကျနော့် ၆ တွက်ချည်မျှင်ကသူတို့ကိုလိမ်ညာနေသည်ဟုဖော်ထုတ်သည်
YBOP ၏ဝေဖန်မှုသည်သူတို့၏လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လေ့လာမှုကဘာကို ပြော၍ မရနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း။ စွပ်စွဲချက်များဝေဖန်မှု (၂၀၂၀)။ ဒီမှာဗားရှင်းတို
Porn စက်မှုလုပ်ငန်း shill နှင့်ဤစာတမ်း၏ပူးတွဲရေးသားသူ Prause နှင့်သူမ၏ sidekick ဥပဒ မှားယွင်းစွာဖြင့်ဤစာတမ်းသစ်သည်၎င်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် တူညီတဲ့ Bancroft နှင့် Janssen (ဤစာတမ်းအသစ်၏တွဲဖက်ရေးသားသူ) မှစာအုပ်အခန်းတစ်ခုတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစမ်းသပ်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ “လိင်၏စိတ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ၊ အခန်း - ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ - လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားဆီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္။။ " ထုတ်ဝေသူ - Indiana တက္ကသိုလ်မှစာနယ်ဇင်းအယ်ဒီတာ၊ အဲရစ်ဂျန်ဆင်၊ pp.197-222 အခန်းကို Link ကို
ခြားနားချက် ၁။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရင်းများကိုညစ်ညမ်းခြင်းမှနှိုးဆွနိုင်ခြင်းမရှိသောအမျိုးသားများအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၂၀ လေ့လာမှုအသစ်နှင့်မတူဘဲ ၂၀၀၇ သုတေသီများမှလူအယောက် ၅၀% (ပျမ်းမျှအသက် ၂၉ နှစ်) ကိုစမ်းသပ်ခန်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစစ်ဆေးမှုမှနှိုးဆွခြင်းမရှိသောလူငယ်များ ၅၀% ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး၊ သိပ္ပံပညာရှင်များကထိုအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းသောနေရာများသို့ရောက်ရှိနေသောအရက်ဆိုင်များတွင်မကြာခဏသွားလေ့ရှိသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်။
ဒီဒီဇိုင်းကို (လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှစ်မျိုး၊ အာရုံနှင့်ဖျော်ဖြေမှုလိုအပ်ချက်နှစ်မျိုးဖြင့်) သုံးလိုက်တဲ့အခါ၊ ဒီနမူနာအသစ်အတွက်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမျှော်လင့်မထားသေးသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသား ၁၂ ဦး (သို့မဟုတ်ပထမဘာသာရပ် ၂၅ ခု၏ ၅၀% နီးပါး (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၂၉ နှစ်ဖြစ်သည်)) လိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ကြ (ဆိုလိုသည်မှာ penile ၏တင်းကျပ်မှုနှုန်းမှာ ၅% အောက်မပြည့်သောရုပ်ရှင်ကလစ်များနှင့်လူ ၈ ယောက် 5% တင်းကျပ်သည်) ။ ဒါ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ရပ်ရွာမှစုဆောင်းခဲ့ကြသူယောက်ျားပါဝင်ခဲ့အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒလေ့လာမှုတစ်ခု - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, ရေချိုးခန်းအိမ်များ, STD ဆေးခန်း, အရက်ဆိုင်များနှင့်စသည်တို့ကို။
ဤနေရာအချို့တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (ဗွီဒီယိုဖန်သားပြင်များအပါအ ၀ င်) သည်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများ၏ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အထူးပြု (“ နယ်ပယ်”) သို့မဟုတ်ပိုမိုအစွန်းရောက်သည့်သို့မဟုတ်“ kinky” လှုံ့ဆော်မှုများမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဤဗွီဒီယိုမျက်နှာပြင်များအပါအ ၀ င်၊ သတင်းထောက်မဟုတ်သူများ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသောနှုန်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါs.
ခြားနားချက် ၂ - ၂၀၀၇ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
အဆိုပါသုတေသီများလည်းမှတ်ချက်ချ "ဘာသာရပ်များနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများသည်အချို့သောတို့၌ erotica နှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်းသည် vanilla sex erotica အပေါ်တုန့်ပြန်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းများ၊။ "
ခြားနားချက် # ၃ -၂၀၀၇ လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုနှိုးဆွမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
သုတေသီများပင် အကောင့်သို့ porn- သွေးဆောင်အနိမ့်နှိုးဆော်ခြင်းသို့ယူတစ်စက္ကန့်စမ်းသပ်မှုကဆက်ပြောသည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင် ပိုမို၍ ရှည်လျားပြီးမတူညီသောကလစ်များပါ ၀ င်ပြီးဘာသာရပ်များကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့တိုင်များစွာသောတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ!
ကျနော်တို့လေ့လာမှုကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ၀ ယ်လိုအားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်အသစ်သော ပိုမို၍ ကွဲပြားသောကလစ်များနှင့်အချို့သောကြာကြာရုပ်ရှင်ကလစ်များပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဘာသာရပ်များကိုကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသည့် (“ သုတေသီရွေးချယ်ထားသည့်”) ဗီဒီယိုများဖြင့်သာတင်ပြမည့်အစား၊ ၁၀ ခုမှ ၁၀ ခုထဲမှဗီဒီယိုနှစ်ချပ်ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းအနက် ၁၀ စက္ကန့်အကြိုပြသခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကျယ်အပြန့်ပါဝင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အပြုအမူများ (ဥပမာ၊ အုပ်စုလိုက်လိင်၊ မျိုးနွယ်စုများလိင်၊ S&M စသည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်ဘာသာရပ် ၅၁ ခုထပ်မံစုဆောင်းခဲ့ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြင့်အမျိုးသား ၂၀ သို့မဟုတ် ၂၅% ခန့်သည်လိင်ဗီဒီယိုကလစ်များ (ကြာရှည်စွာရွေးချယ်ထားသောရုပ်ရှင်အားတုံ့ပြန်မှုတွင် ၁၀% အောက်ရဲတင်းကျပ်မှု) ကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၂ ဝဝ ၇ ခုနှစ်စမ်းသပ်မှုများက“ တုံ့ပြန်မှုနည်းသောသူများ” ကိုတစ် ဦး ချင်းစီအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး“ လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသောသရုပ်ဆောင်များအရေအတွက်တိုးလာသည်နှင့်အမျှပါ ၀ င်သူတစ် ဦး သည်တုံ့ပြန်မှုနည်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကဆိုသည်။ ”
ခြားနားချက် ၄ - ၂၀၀၇ လေ့လာမှုသည် hypersexuality ကိုအကဲဖြတ်မထားပါ
2007 ခုနှစ်စမ်းသပ်ချက် hypersexuality အကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၂၀ တွင်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး hypersexuality အုပ်စုကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ (သို့သော် ၂၀၀၇ တွင်ကဲ့သို့ ED အတွက်အထောက်အကူပြုသောအချက်များအားတစ် ဦး ချင်းစီအကဲဖြတ်မှုမရှိပါ။ ) သူကပြောပါတယ်, 2020 hypersexual အုပ်စုရှိခဲ့ပါတယ် porn မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်း ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုထက်
ထို့နောက်စာရေးသူသည်အုပ်စုနှစ်စု၏တုန့်ပြန်မှုများကိုတူညီစွာတန်းတူညီမျှဖြစ်စေရန်နှင့်အုပ်စုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားစွာတုန့်ပြန်မှုမရှိဟုကောက်ချက်ချရန်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချက်များအတွက်“ ထိန်းချုပ်” ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း, သူတို့ရဲ့လိုလားသူ porn စာနာပေးတော်မူ၏.
RealYBOP သည် Gabe Deem နှင့် Staci Sprout တို့၏လိမ်လည်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများဖြင့် ထပ်မံ၍ ရှုံးသည်။ RealYBOP ရဲ့ nutty tweets တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
ငါမလိမ်ခဲ့ဘူး - ငါ Ley က hyepersexuals တွေဟာထိန်းချုပ်မှုတွေထက်တုန့်ပြန်မှုနည်းတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့ဂရပ်ကို omiited လို့ပြောတယ်။ ဒါကအချက်ပါပဲ။ သေချာတာပေါ့ -“ controling” ဆိုတာက RealYBOP စာရေးသူတွေကိုခြားနားချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောစေခြင်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီစာတမ်းကသူတို့အလုပ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အချက်အလက်တွေမပေးခဲ့ဘူး။
တူညီသောလည်ပတ်မှုပိုမိုများပြားသည် (စာရင်းအင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သို့ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်):
သူတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးပြီးနောက် RealYBOP သည်တွစ်တာ (၇) စောင်အသရေဖျက်မှုမှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူမရဲ့တွစ်တာလေးခုကကျွန်တော်ဟာသိပ္ပံပညာရှင်ကိုသတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူမလိမ်နေလို့သက်သေမပြနိုင်ဘူး ၎င်းသည်အသရေဖျက်မှုဖြစ်သည် နှုန်း se ။ ငါသူမအတွက်အသရေဖျက်မှု ၂ ခုမလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်
အသရေဖျက်မှု # 1။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမျက်နှာသာမပေးခဲ့ဘူး (သူမတကယ်ဖတ်နေတဲ့သူကိုမယုံကြည်ဘူး):
ACLU စာသည် RealYBOP ၏တောင်းဆိုချက်မဟုတ်ပါ။ ကြည့်ပါ နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉).
အသရေဖျက်မှု # 2ဖြေ - ၂၀၀၇ ခုနှစ်လေ့လာမှုကိုအကြိမ် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်တင်ခဲ့ပြီးငါနဲ့သဘောမတူတဲ့သူကိုသတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏စိတ်ကိုဆုံးရှုံးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို။
ဤတွင်သက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်များအားလုံးနှင့်အတူ 2007 ခုနှစ်လေ့လာမှု: Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇).
စာရေးဆရာများပြောသည့်အတိုင်းညစ်ညမ်းမှုသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုနည်းပါးသည်ဟုသူမကပြောသည်။ ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လူငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူခြင်းများမလုပ်နိုင်ပါ နှင့် porn (ပျမ်းမျှအသက်က 29 နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်) ။ အမျိုးသားများက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့သုတေသီများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ထိတွေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြင့်မားဖို့နှင့်ဆက်စပ်သော။"အားနည်းသောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေကျနေရာများဖြစ်သောဘားများနှင့်ရေချိုးခန်းများတွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကရှင်းပြသည် "erotica နှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်းက vanilla sex erotica နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုနိမ့်ကျစေပြီးအသစ်အဆန်းနှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။"
အသရေဖျက်မှု # 3သူမအနေဖြင့်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းအပြင်၊
အသရေဖျက်မှု # 4ဖြေ - RealYBOP ကလုပ်နေတာပဲ။ ဤနေရာတွင်မုသာစကားအဖြစ်ဖော်ထုတ်ပါ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း။ စွပ်စွဲချက်များဝေဖန်မှု (၂၀၂၀)
RealYBOP ကဒီတွစ်တာကိုထပ်ထည့်လိုက်ပြီးသူမက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူးဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အထူးအပိုင်း - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်။ ။ RealYBOP (Prause) သည် Staci Sprout ကို RealYourBrainOnPorn မှသုတေသီများကကလေးများအားစော်ကားသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
TWEET # 1: သုတေသီတွေကကလေးတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာလို့ Sprout ကဆိုပါတယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ Staci ဆွေးနွေးနေခဲ့သည် စားပွဲတင် 34 ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုသည့် pedophiles များမှရရှိသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့် ၁၉၄၈ Kinsey အစီရင်ခံစာ၏။
context: Sprout သည် Alfred Kinsey သည် pedophiles များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးသူ၏အထင်ကရဖြစ်သော ၁၉၄၈ နှင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်လူ့လိင်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်များထုတ်လုပ်ရန်ဟူသောအချက်ကိုသာရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤအချက်အလက်များကို Kinsey Institute မှထုတ်ဝေသောဤစာအုပ်၏ဇယား ၃၄ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဇယား ၃၄ တွင် pedophiles များသည် stopgatch ကို အသုံးပြု၍ ကလေးငယ်များအတွက်အော်ဂဇင်ခေါ်ခြင်းကိုငယ်ရွယ်သောအရွယ် မှစ၍ ငယ်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်များထံမှအချိန်ကိုသတ်မှတ်သည်။
၎င်းကိုသူ၏ကျော်ကြားသောစာချုပ်မှဇယား ၃၄ အဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိချေ လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (1948) ရှင်းလင်းစွာစာရွက်စာတမ်းများ။ ၁၉၉၅ မှဝါရှင်တန်ပို့စ်ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ KINSEY အစီရင်ခံစာမြန်မြန်ဆန်ဆန်? နှင့်ဤ ဗီဒီယို.
ဇယား ၃၄ - စားပွဲအောက်ရှိဒဏ္legာရီက 'ဒုတိယအနေဖြင့်သို့မဟုတ်လက်ပတ်နာရီတစ်လုံးဖြင့်အချိန်ကုန်' သည်ဟုဆိုသည်
သတိပြုရန်မှာ Prause သည် Don Hilton ၏ဇယား ၃၄ နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုအားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း၊ ဒီမှာ ကလေးတစ် ဦး molester ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Don Hilton က Prause ၏မုသာစကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Donald Hilton, MD သည်မှားယွင်းကြောင်းစွပ်စွဲပြောဆိုသည်။ ထို့နောက်သူမသည်ဤလုပ်ကြံဖန်တီးမှုကိုသုံးကာသူ၏တက္ကသိုလ်နှင့်တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့သို့ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် အသရေဖျက်မှုအတွက် Hilton မှတရားစွဲဆိုခံရသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Prause (RealYBOP) ကို Staci Sprout နှင့်အတူတူပင်လှည့်စားရန်ကြိုးစားနေသည်။ မှကောက်နုတ်ချက် ဤဆောင်းပါးတွင်: ဇယား ၃၄ ကို encapsulates:
In လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်သည့်) အင်စတီကျုသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဇယား ၃၄ ကိုထုတ်ဝေသည်။ ၄ င်းတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများအလွဲသုံးစားပြုသူများကမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းကလေးငယ်များမှဆယ်ကျော်သက်များထံမှ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု” ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤ pedophiles များသည်ရာနှင့်ချီသောကလေးငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်သူများကို“ orgasm” (အော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ“ အဖော်”) ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ထိုတုန့်ပြန်မှုများကိုနာရီမှတ်ဖြင့်အချိန်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Kinsey Institute ၏ဒါရိုက်တာဟောင်းဖြစ်သူ MD Bancroft က“ Alfred Kinsey နှင့် Sex Research of Politics” ၏စာတမ်းတွင် Alfred Kinsey သည်“ ကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောလူကြီးများလေ့လာခြင်းကိုအထူးစိတ်ဝင်စားသည်” Kinsey သည်ကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုစွဲလန်းခြင်းကြောင့်ရာပေါင်းများစွာသောကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောလူ့အထီးရှိလိင်အပြုအမူအခန်း ၅ မှနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဇယား ၃၄ ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Kinsey ကဂုဏ်ယူစွာဖြင့်“ ၅ လအရွယ်မွေးကင်းစအရွယ်နဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးငယ် ၃၁၇ ယောက်ရဲ့စာရင်းထဲမှာလိင်အင်္ဂါစိုက်ထူခြင်း၊ တင်ပါးဆုံတွင်းထိုးနှက်ချက်နှင့်စစ်မှန်တဲ့အော်ဂဇင်စရိုက်လက္ခဏာများစတဲ့လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုလေ့လာခြင်းကိုယခုငါတို့အစီရင်ခံတင်ပြပြီးပါပြီ။ ” Kinsey ၏စာအုပ်မှဇယား ၃၄ တွင်ဤအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ ၁၁ လအရွယ်ကလေးငယ်သည်တစ်နာရီအတွင်းဆယ်ကြိမ်ကြိမ်တိုင်တိုင်“ အော်ဂဇင်” ခံစားခဲ့ရသည်၊ လေးနှစ်အရွယ်ကလေးနှင့် ၁၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးသည် ၂၄ နာရီအတွင်းထိုကဲ့သို့သော "orgasms" ၂၆ ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာ Prause သည် Alfred Kinsey ၏အလေ့အကျင့်များကိုခုခံကာကွယ်နေပုံရသည်
TWEET # 2: Staci Sprout သည် Kinsey အစီရင်ခံစာ၏ဇယား ၃၄ ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်လည်း RealYBOP သည် Staci ၏တွစ်တာကိုသူမရည်ညွှန်းနေခြင်းဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည် RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက".
TWEET # 3: Staci Sprout သည် Table 34 နှင့် Alfred Kinsey ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
RealYBOP / Prause အသရေဖျက်မှုရေခဲတောင်ထိပ် - RealYBOP ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Staci Sprout အသရေဖျက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ မမျှော်လင့်သောအရင်းအမြစ်များမှလိင်အပျော်အပါးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊
RealYBOP - တစ်ခါတစ်ရံမှာသူမကလိင်စွဲလမ်းမှုကို WHO ကငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၊ ရောဂါအသစ် 'စွဲလမ်းမှု' သို့မဟုတ် 'လိင်စွဲလမ်းမှု' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်အရာများကိုရှာဖွေရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder"(CSBD) ။
ကျူးလွန်သူမှလိမ်လည်မှုနှင့်ဝါဒဖြန့်မှုများNicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။):
RealYBOP သည် Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့ပေးရန်ချည်လည်ပတ်သည်။ RealYBOP သည် Exodus Cry အကြောင်းပါ ၀ င်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလေးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်အမှန်တကယ်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းများကိုလက်ခံသည့်ကမ္ဘာကိုပညာပေးရန်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းသည်။
ဤအရာသည် RealYBOP ကိုမနှစ်သက်ပါ။
RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်၊ ၎င်းတွင်ကလေးသူငယ်များနှင့်လိင်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါရှိသည် ကောင်းတယ်
RealYBOP ကသင်၏အဖွဲ့များသည်အမ်မလီ Rothman ၏ညစ်ညမ်းသောစာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်းများကိုရက်ရက်စက်စက်တိုက်ခိုက်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ RealYBOP သည်အထောက်အထားမရှိပါ။
အလားတူပင်၊ RealYBOP သည် FTND ကိုရှုတ်ချစဉ် pornhub ကိုကာကွယ်သည်။
RealYBOP သည်သူမအား op-ed အကြောင်းနှစ် ၁၀၀ အကြာတွစ်တာပေးခဲ့သည်။ စကားလုံး ၆၀၀ ပါ Op-Ed သည်အများပြည်သူအားအရူးလုပ်ရန်မထောက်ခံသည့်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စာရွက်စာတမ်း ၄ ခုသာကိုးကားထားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအခိုင်အမာကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အဘယ်သူအားမျှ porn စွဲလမ်းမှု၊ ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ၊ ဤနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူအတော်များများသည်ဤအချိုးအစားတိုတောင်းသောတုန့်ပြန်မှုတွင်၎င်း၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများနှင့်အချည်းနှီးသောအပြောအဆိုများကိုဆွေးနွေးကြသည်။ Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)။ အဆိုပါမတူဘဲ "ဟုအဆိုပါ Op-Ed က၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်" သူတို့ရာပေါင်းများစွာသောလေ့လာမှုများနှင့်စာပေမျိုးစုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထောက်ပြသည်။
RealYBOP သည် Nofap ကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားနေဆဲဖြစ်သည် @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်! မှတ်ချက် - RealYBOP နှင့် David Ley တို့တွင်သီးသန့်အစွန်းရောက်အုပ်စုတစ်စုရှိသည်။ Neves သည်ဤကိုယ်ပိုင် Facebook အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ပါသလား။ အဆိုပါတရားစွဲမှုအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဒီအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များကိုထုတ်ဖေါ်ကြမည်နည်း
ဇူလိုင်လ 12, 2020ဖြေ။ သူမကခြိမ်းခြောက်ခံရသည်ဟုပြောဆိုနေသည့် ၇ နှစ်အတွင်းခြိမ်းခြောက်မှုများပါ ၀ င်သည့်အမည်မသိမှတ်ချက်တစ်ခုအား Prause မှသာတင်ခဲ့သည် (မှတ်ချက် NoFap မှအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ) Prause ကကျွန်ုပ်အားစွပ်စွဲထားသည်၊ အဲလက်စ်ရိုဒက်စ်၊ ဒွန်ဟီလ်တန်နှင့်အခြားသူများသည်သူမကိုလှည့်စားနေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သော်လည်းသူမသည်မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမှမရှိခဲ့ပါ။ ရောဂါဗေဒမုသာကိုသုံးသော။
ဇူလိုင်လ 13, 2020Exodus Cry ကိုရှုတ်ချရန်နှင့် Pornhub ကိုထောက်ပံ့ရန် ၆ ပတ်ကြာချည်နှောင်ထားသည့် RealYBOP သည်။ RealYBOP သည်မှတ်ချက်ကို nofap mods များမှဖယ်ရှားလိုက်သောအမည်မသိ troll (နှင့် Nofap အသင်းဝင်မဟုတ်) ကမှတ်ချက်ကိုတွစ်တာပိုတင်ခဲ့သည်။ ဖျက်လိုက်သည့်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာအမည်မသိသော troll တစ်ခုမှ - ၎င်းမှာ RealYBOP တွင်ရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာသူမထပ်ခါတလဲလဲတွစ်တာတင်မည်ဖြစ်သည်။
RealYBOP သည် pornhub ကိုကာကွယ်ရန်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၀၊ RealYBOP twitter (Prause) သည် Lorna Mickelwait အားတိုက်ခိုက်သည့် Pornhub ၏အသက်မပြည့်သေးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အသက်စစ်ဆေးခြင်းမရှိခြင်းအားတိုက်ခိုက်သည်။။ Laila လည်းတစ်ခုတင်သွင်း Nicole Prause အား Donald Hilton ၏အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်လည်းရှိပါတယ် Rhodes v အတွက်ကျမ်းကျိန်လွှာတင်သွင်း။ Prause).
ဇူလိုင်လ 13, 2020ဖြေ: RealYBOP က Staci Sprout ကိုရှုတ်ချပြီး reddit troll (nofap အသင်းဝင်မဟုတ်သူ) မှဖျက်လိုက်သောမှတ်ချက်ကိုတင်သည်။ RealYBOP သည်နောက်လိုက်များအား Sprout တွင်မှားယွင်းသောအစီရင်ခံစာတင်ပြရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Sprout အားလုံးက Kinsey Institute သည် pedophiles မှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုသူ၏ကျော်ကြားသောစာချုပ်မှဇယား ၃၄ အဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည် လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (1948) ရှင်းလင်းစွာစာရွက်စာတမ်းများ။ ၁၉၉၅ မှ Washington Post ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ KINSEY အစီရင်ခံစာမြန်မြန်ဆန်ဆန်? နှင့်ဤ ဗီဒီယို။ ချီးမွမ်းမှုက Hilton ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုလည်းမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် ဒီမှာ ဇယား ၃၄ ကိုဖော်ပြရန်ကလေးသူငယ်တစ် ဦး ကိုအနှောက်အယှက်ပေးသူတစ် ဦး ။ 34 ခုနှစ်တွင် Don Hilton သည် Prause ၏မုသာစကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Donald Hilton, MD သည်မှားယွင်းကြောင်းစွပ်စွဲပြောဆိုသည်။ ထို့နောက်သူမသည်ဤလုပ်ကြံဖန်တီးမှုကို အသုံးပြု၍ သူ၏တက္ကသိုလ်နှင့်တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံစာများကိုတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ရလဒ် အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခံရသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Prause ကို Staci Sprout နှင့်အတူတူပင်လှည့်စားနေသည်။ နောက်ထပ်အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံဖြစ်နိုင်သည်
ဇူလိုင်လ 13, 2020။ …တွယ်ခြင်းအကြောင်းတွစ်တာ…အတူတူပင်ပယ်ဖျက်ခဲ့သော Nofap မှတ်ချက်ကို reddit troll (NoFap အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူ) မှမှတ်ချက်ချသည်။ သူမရှာတွေ့နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောခြိမ်းခြောက်မှု။
RealYBOP ၏ဝမ်းနည်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှန်တကယ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊
အစောပိုင်းတွစ်တာတွေလိုပဲ၊ RealYBOP ကညစ်ညမ်းတဲ့ဆိုးကျိုးရလဒ်တွေကို porn အသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့လေ့လာမှုအားလုံးအတွက် (mast of masturbation) ကိုအပြစ်တင်ချင်တယ်။
သူသည်ဤအပြစ်ကျူးလွန်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားနေသည်။ Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်ငြင်းဆိုသည်။
RealYBOP သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသောစာတမ်းကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မပေးခဲ့ပါဘူး.
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် DE ဆက်စပ်မှုပိုမိုများပြားသည်၊
အခြားစက္ကူကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည်။ သူမရဲ့မိုက်မဲတဲ့၊ လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိသော“ အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်” ကိုတွစ်တာ:
ငါဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ OK ကိုဖြစ်ကြသည်ခန့်မှန်း? The ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သောပထမလေ့လာမှု (၇) ခုသည်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုများစွာပါ ၀ င်သည် causationပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်.
porn-induced ED မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတစ် ဦး အားကျပန်းတိုက်ခိုက်ခြင်း:
အထူးအပိုင်း - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်။ ။ RealYBOP (Prause) သည်လူမှုရေးလုပ်သားများအမျိုးသားအသင်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ Staci Sprout အားအစီရင်ခံရန်နောက်လိုက်များအားတိုက်တွန်းခဲ့သည် (Staci ၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတရားမဝင်တင်ပို့ခြင်း)
Staci အညွှန့်ကို ထပ်မံ၍ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်း RealYBOP (ချီးမွမ်း) Prause က Staci Sprout3ကိုယခင်အကြိမ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အားလုံးအားအခြေအမြစ်မရှိဟုပယ်ချခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ - Prause သည် Staci Sprout အား Washington ရှိပြည်နယ်သို့အကြောင်းမဲ့တိုင်ကြားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတိရသင့်သည်မှာ RealYBOP တွစ်တာများသည်လိမ်ညာမှု မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ။ RealYBOP ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာသူမတင်လိုက်တဲ့ screenshots တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ဖို့ link တွေကိုငါထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။
TWEET # 1ဖြေ - သင်မြင်တဲ့အတိုင်း၊ RealYBOP ပြောဆိုချက်တစ်ခုဟာ screenshots တွေထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ (RealYBOP tweets တွေကအသရေဖျက်မှုဖြစ်တယ်။ နှုန်း se ။
အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း Sprout အားလုံးက Kinsey Institute သည် pedophiles မှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသူ၏ကျော်ကြားသောစာချုပ်မှဇယား ၃၄ အဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိချေ လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (1948) ရှင်းလင်းစွာစာရွက်စာတမ်းများ။ ၁၉၉၅ မှ Washington Post ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ KINSEY အစီရင်ခံစာမြန်မြန်ဆန်ဆန်? နှင့်ဤ ဗီဒီယို။ ချီးမွမ်းမှုက Hilton ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုလည်းမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် ဒီမှာ ဇယား ၃၄ ကိုဖော်ပြရန်ကလေးသူငယ်တစ် ဦး ကိုအနှောက်အယှက်ပေးသူတစ် ဦး ။ 34 ခုနှစ်တွင် Don Hilton သည် Prause ၏မုသာစကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Donald Hilton, MD သည်မှားယွင်းကြောင်းစွပ်စွဲပြောဆိုသည်။ ထို့နောက်သူမသည်ဤလုပ်ကြံဖန်တီးမှုကို အသုံးပြု၍ သူ၏တက္ကသိုလ်နှင့်တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံစာများကိုတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ရလဒ် အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခံရသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် RealYBOP / Prause ကို Staci Sprout နှင့်အတူတူပင်လှည့်စားနေသည်။
TWEET # 2: RealYBOP သည် Staci ၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတင်ပြီးနောက်လိုက်များအားမှားယွင်းသောအစီရင်ခံစာတင်ရန်တိုက်တွန်းသည်။
TWEET # 3: ထူးဆန်းတဲ့လိမ်လည်လှည့်ကွက်များ။ RealYBOP မှတင်သော2Staci တွစ်တာများသည်တိကျမှန်ကန်ပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ် RealYBOP အကြောင်းမဖော်ပြထားပါ။ အခြားတွစ်တာနှစ်ခုသည် Staci Sprout နှင့်ဘာမျှမပတ်သက်ပါ။
TWEET # 4ဖြေ - ပထမလိမ်လည်မှု - Seto အကြောင်း RealYBOP ရဲ့တွစ်တာတွေမှာဘာမှမရှိဘူး။ ဒုတိယလိမ် - Staci ကတက္ကသိုလ်ရုံးခန်းတွေကိုမမှတ်မိဘူး။ RealYBOP ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုများအတွက်တရား ၀ င်မည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကဲ့သို့ Staci ကိုအံ့သြနေသည်။ RealYBOP အားတရားစွဲဆိုမှု ၃ ခုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ RealYBOP တွစ်တာများကိုတင်သူတစ် ဦး ချင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
စာမျက်နှာနံပါတ် ၁ ကိုကြည့်ပါ။ @BrainOnPorn twitter သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
TWEET # 5: (အရာ RealYBOP စာမျက်နှာ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့ခဲ့သည်) ။ RealYBOP သည်သူမ၏အသရေဖျက်မှုမိတ်ဖက်နှင့်ပူးပေါင်းသည် ယောက်ျားလေး porn ကုမ္ပဏီကြီး xHamster ဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရDavid Ley
Ley အားဖြင့် DARVO ။
TWEET # 6- REALYBOP အသင်း ၀ င်များသည်စကားမပြောနိုင်သောမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။RealYBOP ၏အသရေဖျက်မှုအတွက်မည်သူကတာဝန်ရှိသနည်း။Cyberstalkker RealYBOP သည် Staci ၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတွစ်တာပို့သည်။
ငါပြောဆိုသမျှကိုအတည်ပြုရန်ကြီးမားသောလေ့လာမှုအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများသည် erectile disfunction ကိုပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပြီးတတိယမြောက်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အခါထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုနှိုးဆွလာသည်။ ဤအရာသည်လေ့လာမှုနှင့်ပါတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို tweet ပြုလုပ်သောထွက်ပေါက်တိုင်းအား RealYBOP ကိုထိန်းချုပ်သည်။ (သီးခြား tweets ၈ ခု!) RealYBOP တွစ်တာများတွင်သူမတင်ပြခဲ့သောလေ့လာမှုနှင့်လင့်ခ်ပါရှိသည်။ ကြည့်ပါ -
တွစ်တာတိုင်းတွင်တင်ထားသည့် RealYBOPa သည် BS-er ဖြစ်သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်သည့် (၁း၁ တွင်ဖြစ်ပွားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း) သည်ရှည်လျားသော longitudinal နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများတွင်မပါဝင်ပါ။ ”
အကယ်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ၁: ၁ ကို porn ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျှင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထိန်းချုပ်။ မရပါ။ ဟားဟား။
TWEET # 8 - ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစပြီးချည်နှောင်ထားတာ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်လေ့လာမှုသည်
အဖြစ်မှန် - ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
RealYBOP သည်သူမကိုစွဲမက်စွာအသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနှင့်အတူသူမ၏ Gabe Deem ကိုဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာ:
၎င်းသည်နောက်ထပ်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုသို့ ဦး တည်သွားမည်လား။
deem ပို cyberstalking ။ ဒီနေရာမှာထိတွေ့အဖြစ် 2007 ခုနှစ်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုလဲလျောင်း: “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း။ စွပ်စွဲချက်များဝေဖန်မှု (၂၀၂၀)
RealYBOP ဟာဘာမှမမှားပါဘူး တကယ်တော့အငြင်းပွားမှုသည် PIED အပေါ်တွင်သာဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု ၇ ခုအရယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြတ်၍ PIED မှပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်သွယ်မှုဆက်ရှိနေဆဲ: တွစ်တာချိတ်ဆက်မှုမှာအရှက်ရစေတဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘဲယာယီ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုသာဖြစ်တယ်။ ပုံမှန် misrepresentation:
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်သူမသည်သူမ၏မိုက်မဲသောအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတွစ်တာနှင့်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းမပြုခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အရွယ်လေ့လာမှုကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 18, 2020 RealYBOP tweet အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်၏တွစ်တာကိုသတင်းပို့သည့် Prause / PornHelps ၏ဖန်သားပြင်တစ်ခုပါရှိသည်။
context: 2016 အတွက် Nicole Prause သည်“ PornHelps” ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုဖန်တီးခဲ့သည် “ PornHelps” သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နာတာရှည် Prause သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုလည်းမကြာခဏတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည့်လူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုကြာရှည်စွာထိခိုက်စေသည်။ တကယ်တော့၊ Prause ဟာသူမရဲ့ထင်ရှားတဲ့ alias PornHelps နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတွစ်တာနှင့်အခြားနေရာများတွင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအခြားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူတကွတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။ 1, 2, 3, 4) ။ @pornhelps တွစ်တာအကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးသည် Prause တုန်းကရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည် အပြင်မှာ စိတ်ပညာယနေ့တွင် PornHelps အဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် တစ်ဦး tweet ၏ရေးသားသူအားဖြင့် အချိန် "ပုံပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းporn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု"Belinda Luscombe:
ဒီအလက်ဇန်းဒါးနှင့် Belinda နှစ်ဦးစလုံးသည်မိစ္ဆာဆရာတို့တောင်းဆို @pornhelps အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ @NicoleRPrause နောက်ဆုံးမှာခေါ်ခြင်းအတွက် chimed အချိန် သတင်းစာဆရာ Luscombe ဤသည်ဤအဖြစ်အရေးကြီးပါသည် ဇူလိုင်လ 18, 2020 RealYBOP tweet Alex Rhodes ၏တွစ်တာသတင်းပို့ချက်ကိုအစီရင်ခံသည့် Prause / PornHelps ၏မျက်နှာပြင်ပုံတစ်ခုပါရှိသည်။ အဲလက်စ်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်လိင်အင်္ဂါဒဏ်ရာများကိုအလုအယက်ပြုလုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲသည့် PornHelps ၏အသရေဖျက်မှု၊ Alex Rhodes သည် @pornhelps သို့ပြန်ပို့သည် -
PornHelps သည်အဲလက်စ်အားလိမ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲကာသူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းဆိုးဝါးသောလုပ်ရပ်များဖြင့်ခုန်ချခဲ့သည်။ အဲလက်စ်သည်အထက်ဖော်ပြပါရယ်စရာကောင်းသောပြန်လာခြင်းနှင့်အတူအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျန်တဲ့ပုံပြင်ကိုကြည့်ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Pornuse & sock ရုပ်သေးရုပ်“ PornHelps” သည် Alexander Rhodes အားသူသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
RealYBOP သည်လေ့လာမှုအသစ်ကိုရှုတ်ချရန်ကြိုးစားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများသည် erectile disfunction ကိုပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပြီးတတိယမြောက်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုနှိုးဆွနိုင်သည် (Daily Mail).
၂) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟုဆိုသော RealYBOP သည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်မ
3) RealYBOP မုသား - ED သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုမပြောခဲ့ပါ။
၄။ RealYBOP သည်မုသာနှစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တစ်ပတ်လျှင်နာရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနာရီကိုတွက်ချက်ပြီးနာရီနှင့်ကြည့်နေသည့်နာရီနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် IIEF နှင့် MSHQ-ED ဖန်တီးခဲ့သည်
RealYBOP သည် PornHub ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတင်ပို့ရန်အတွက်တွစ်တာအတွက် Try Crews (FTND ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေစဉ်) ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ RealYBOP သည် Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေသည်။
Mindgeek ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ RealYBOP ။
Tweets - RealYBOP အဖွဲ့ဝင် Samuel Perry ရဲ့ ၅ ကြိမ်မြောက်လေ့လာမှုတစ်ခု။ ၎င်းသည်ပယ်ရီ (သို့) RealYBOP ဆိုသောအရာမဟုတ်ပါ။
အဖြစ်မှန် - ရှုပ်ထွေးသောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ“ မော်ဒယ်လ်” ပြီးနောက်ပယ်ရီသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှာညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုခြင်းသည်ဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ပယ်ရီ၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအသစ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသော၊သငျသညျနောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့တယျတဲ့အခါမှာ? "ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အစိုင်အခဲဒေတာမရှိရင်, သူ့ပြောဆိုချက်ကိုတစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ Perry ရဲ့လေ့လာမှုမှ:
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့အကျင့်။ အဆိုပါ NFSS နှင့် RIA နှစ်ဦးစလုံးရေးသားသူနှစ်ဦးစလုံးစစ်တမ်းများအဘို့တစ်ခုတည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတိုင်းအတာသို့ပေါင်းစပ်ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. တူညီသောမေးခွန်းနှစ်ခုမေးကြည့်ပါ။ သူတို့သည်အစဉ် (ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ) masturbated လျှင်သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးမေးမွနျးခဲ့သညျ။ သူတို့သည်အစဉ် masturbated ခဲ့ကြောင်းဖြေကြားသူများသည်ပြီးတော့ "သင်နောက်ဆုံး masturbate ခဲ့ဘူးသည့်အခါ?" ဟုမေးခဲ့သည်တုံ့ပြန်ချက်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကိုကျော် = = ယနေ့ 1 ထံမှ9မရသေးသည်လည်းရှိသည်။
"နေစဉ်တွင်ဤမေးခွန်းကိုနည်းပညာပိုင်း ... ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. မေးလျှောက်ပါဘူး .. "
အဘယ်သူမျှမနောက်နေ။ ထိုအသေးပယ်ရီ, Prause, Ley, Grubbs နှင့်အခြားသူများယခုဤအမြင့်မားသံသယရှိ data တွေကိုမှီခို, ဒီတိုက်ပိတ်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးထူးခြားသောတောင်းဆိုမှုများလုပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါမဟာမိတ်ဝါဒဖြန့်စက် Perry ရဲ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူအပြည့်အဝအမြင်၌တည်ရှိ၏။ Perry ရဲ့အခိုင်အမာအားဖြင့်တုနေကြတယ် အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော် - လျော့နည်းဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုကိုပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းရာနှင့် Perry ရဲ့လက်ရှိလေ့လာမှု။ ဒါကညာဘက်င် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် နည်းသော ပယ်ရီနမူနာ (A & B) နှစ်မျိုးလုံးတွင်ရှိသောပျော်ရွှင်မှုသည်
သူကဥသုံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ porn အသုံးပြုမှုကိုဆိတ်ကွယ်ရာမာရ်နတ်နိုင်ကြောင်း Perry ရဲ့တောင်းဆိုမှုများအလေးအနက်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး - သူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေအဘို့တိကျမှန်ကန်ဒေတာရှိကြအထူးသဖြင့်ကတည်းက။
သော်လည်း nofap ပြီးနောက် Going သူမအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cyberstalker RealYBOP မှ tweets ၄ ခုကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
ဇူလိုင်လ 20, 2020: Kris တေလာ၏စာတမ်းကို ကိုးကား၍ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆောင်းပါး
ဇူလိုင်လ 20, 2020လူမှုရေးဗေဒဆောင်းပါးတစ်ခုမှဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ (ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) မှကောက်နုတ်ချက်။
အမှန်တကယ်စိတ္တဇ၊ RealYBOP မှရွေးချယ်ထားသောစကားစပ်ပြင်ပဝါကျအစား
ဤစာစီစာကုံး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများရှိသူများကိုရည်ရွယ်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် Nofap.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအင်တာနက်ဖိုရမ်များတွင်ပေါ်လာသောလိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဟောပြောချက်များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစွဲလမ်းမှုကြောင့်ခံစားရသောလူများအတွက်လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ်လိင်ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဤဖိုရမ်အားဖြင့်အခြားအကြောင်းအရာများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူပြproblemsနာများနှင့်စွဲလမ်းမှုများရှိသည့်အခြားသူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြproblemsနာများရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အားထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသင့်သည်။ ထိုဖိုရမ်သည်လူတစ် ဦး ချင်းအားသူတို့၏စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်သူတို့၏ဘဝကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသောကိရိယာများဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြသည်။ ငါ Ernesto Laclau ရဲ့နှင့် Chantal Mouffe ရဲ့ဟောပြောချက်သီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးတစ် discursive ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံးအက်ဆေး၌ငါဟောပြောချက်သီအိုရီအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်းအဖြစ်, ငါထို့နောက်ပုလ်နှင့်လိင်န်းကျင်ဟောပြောချက်ဘယ်လိုအဘယ်သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ဖိုရမ်အတွက်တည်ဆောက်ထားကြသည်။ ထို့အပြင်ငါ hegemonic အဆင့်ဆင့်အတွက်အဘယ်ပုလ်အသုံးအနှုနျးမြားပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အရာအသုံးအနှုန်းတွေနိမ့်အဆင့်ဆင့်အနေအထားကို ဦး တည်သွားစေလေ့လာငါ။ ဆွေးနွေးပြီးနောက်ဖိုရမ်တွင်မည်သည့်အဖွဲ့များပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီးမည်သည့်အရာအားဖယ်ထုတ်ထားသည်ကို၎င်းဟောပြောချက်ကမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဆက်လက်လေ့လာသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပိုင်းတွင်ဤဖိုရမ်သည်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအစဉ်အလာအမြင်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြင့်ဖော်ပြသည်၊ အမျိုးသားများသည်လိင်ကွဲပြားမှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်သူတို့နှင့်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းခံရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ယင်း၏မှီခိုမှုသည်ဖိုရမ်တွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လူမှုရေးပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၏လူတစ် ဦး အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်သူ၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာလိင်တူဆက်ဆံသူများမှလိင်အရနှိုးဆွသောပြproblemsနာများရှိသည့်ညစ်ညမ်းဒဏ်ရာရရှိသူများ။ ဖိုရမ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များကိုအဓိကလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှပြောင်းလဲရန်မရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်သည်လူတစ် ဦး ချင်းအား၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီခြင်းနှင့် ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များကိုမဝေဖန်ပါ။
သို့တိုင်၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းတင်ပြခဲ့သည့်သန်းနှင့်ချီသောမှတ်ချက်များကိုယခုလေ့လာရန်နည်းလမ်းများရှိနေသည်။ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသောမည်သူမဆို reddit / nofap တွင်တင်နိုင်သည်။
ဇူလိုင်လ 20, 2020ဖြေ - RealYBOP ကလိမ်တယ်၊ Imhoff လေ့လာမှုက NoFap မှဘာသာရပ်များကိုစုဆောင်းခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဘာသာရပ်တစ်ခုမှ NoFap မှမဟုတ်ပါ။ လိမ်လည်သူများလိမ်မည်
ဤတွင် Imhoff ၏တောင်းပန်စာဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ reboot ၏ယုံကြည်ချက်ကိုမထင်ဟပ်နိုင်ပါ - ထိုဘာသာရပ်များထဲကဘယ်သူမှ Nofap အဖွဲ့ဝင်များမဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်:
ဇူလိုင်လ 20, 2020: ဒါဘာလဲ? သက်တူရွယ်တူမဟုတ်သောပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာရွက်မှထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ သူမကမှားယွင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအင်တာနက်ရှာဖွေနေသည်။
The New မူးယစ်ဆေးဝါး op-ed Fight ။ ဟားဟား:
Prause ၏ (REALYBOP) ၆၀၀ စကားလုံးပါ Op-Ed သည်အများပြည်သူအားလှည့်စားရန်ရည်ရွယ်သည့်မထောက်ခံသည့်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စာရွက်စာတမ်း ၄ ခုသာကိုးကားထားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအခိုင်အမာကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အဘယ်သူအားမျှ porn စွဲလမ်းမှု၊ ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ၊
ဤမြေကွက်၌အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများကဒီအတော်လေးတိုတောင်းသောတုံ့ပြန်မှုအတွက်၎င်း၏အခိုင်အမာနဲ့အချည်းနှီးသောအပြောအဆို debunked - Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)။ အဆိုပါမတူဘဲ "ဟုအဆိုပါ Op-Ed က၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်" သူတို့ရာပေါင်းများစွာသောလေ့လာမှုများနှင့်စာပေမျိုးစုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထောက်ပြသည်။
အစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်တွင်သူတင်ခဲ့သောလိမ်လည်သည့်ဆောင်းပါးနှင့် RealYBOP ၏လင့်ခ်သည် သူမသည်သူမ၏တောင်းဆိုချက်များကိုမဆိုသက်သေအထောက်အထားပေးဘယ်တော့မှ။ သူမသည်ကျူးလွန်သူဖြစ်ပါသည် Nicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။
သမ္မာတရားကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာတူညီမျှ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ) အကဲဖြတ်နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးလစ်ဘရယ်များနှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်အလွန်ပြဿနာအဖြစ်မှတ်သောမိန်းမတို့ကိုအပျေါအသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ်ကြောင်း။ ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး လိင်မှုဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များကိုညစ်ညမ်းမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောသဘောထားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှု ၄၀ ကျော်၊ 2016 လေ့လာမှုသို့မဟုတ်ဤ 135 Meta-analysis သည်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
နောက်ထပ်မုသာစကားများနှင့်၎င်း၏ပျက်ပြားနေသောစာမျက်နှာသို့ချိတ်ဆက်ခြင်း Porn Science ငြင်းပယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA -“ RealYourBrainOnPorn.com” နှင့်“ PornographyResearch.com”
အရွယ်ရောက်သူအများစုအတွက် porn သည်အပြုသဘောမဟုတ်ပါ ဥပမာအနေနှင့်ယောက်ျားအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုတိုင်းတွင်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှု ၇၅ ခုသည် RealYBOP ၏ချယ်ရီရွေးချယ်စာရင်းမှချန်လှပ်ထားသည် လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊
Gabe Deem အားပိုမိုအသရေဖျက်မှုနှင့် cyberstalking
FYI - Gabe ဟာကောလိပ်တက်တာကြောင့် RealYBOP ကိုအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။
ထိုနေ့တွင်ပင် Gabe ၏ချည်နှောင်မှုတွင်တွစ်တာ (RealYBOP သည် Gabe ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်) ။ RealYBOP သည်သူမကိုဘာမျှမတွန့်ဆုတ်၊
သင်သိရမည့်အရာများ - စွပ်စွဲမှုချီးမွမ်း me ပြီးတော့သူမကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။ တရားရုံးကတဆင့် Prause ဟာကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တယ်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်လက်ရှိတွင်အားဖြင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရပါတယ် Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes။ နောက်လိုက်ဖို့နောက်ထပ်တရားစွဲမှု?
RealYBOP သည်သူမ၏အလတ်စားဆောင်းပါးကိုထပ်ခါထပ်ခါရေးသားခြင်းမှာလုပ်ကြံဖန်တီးမှုများသာဖြစ်သည်။ YBOP - stalker ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဖော်ပြထားသော RealYBOP အကောင့်များဘယ်လောက် trolls များသတိပြုပါ။
အဖြစ်မှန်: Nicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။
သူမ၏နတ်သမီးပုံပြင်ဆောင်းပါးများကို ဆက်၍ ရေးလေ့ရှိသည် (သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းကို RealyBOP အကောင့်မှ ၅ ကြိမ်အကြိမ်ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ) နီးလ်သည်သူမ၏ဖန်တီးထားသောသားကောင်ကိုမဝယ်ပါ။
သူမ၏အပြည့်အဝ - မုသာစကားကိုအလတ်စားဆောင်းပါးကိုလွန်စွာစွဲမက်နေဆဲဖြစ်သည်
အဆိုပါ7များအတွက်th တနေ့တနေ့၊ RealYBOP သည် Gabe Deem tweet တစ်ခုကို screenshots လုပ်သည်သူ့ကိုရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ခြင်း၊ ဤအချိန်သူမ Don Hilton, t ကိုလိုက်ကြ၏ဆရာဝန်ကသူမကိုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဒါကတရားသူကြီးမှကောင်းသောကြည့်ရှုမည်။
RealYBOP ကလိမ်တယ် - Gabe က Dr. Hilton ကိုအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်လို့မပြောခဲ့ဘူး။
RealYBOP သည် XBIZ မှ Gustavo Turner ကိုပြန်လည် retweets:
ဇူလိုင်လ 25, 2020: RealYBOP ဟာ Nofap ကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ် @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်!
RealYBOP မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုပါporn စွဲလမ်းမှုကဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေသည်"porn အသုံးပြုမှုသို့။ ထုံးစံအတိုင်းမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းများ၊ RealYBOP မှမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းများ။ အဖြစ်မှန် - ၂၀၂၀ တွင် လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကအမျိုးသမီးများ၌လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပိုကောင်းသော (သို့မဟုတ်ကြားနေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းအများစုမှာ (ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ) arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ) ။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားများနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်သော porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည် ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
ဇူလိုင်လ 25, 2020: RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမဟာမိတ်များကိုအထက်ပါ RealofBop တိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်။
RealYBOP နှင့် porn စက်မှုလုပ်ငန်း twitter အကောင့် @fyfriendlyfire မကြာခဏ RealYBOP ၏ပုံမှန်သားကောင်များကိုထိန်းကျောင်းရန်ပူးပေါင်းကြသည်။
RealYBOP မှ retweets RealYBOP အသင်းဝင်တေလာ Kohut ။ နှစ် ဦး စလုံး porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်:
serial harraser, cyberstalker၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်
RealYBOP retweets လိင်အလုပ်သမား "ထောက်ခံသူ" ယူပါ ကျွန်ုပ်၏ tweets တစ်ခုမှာ
RealYBOP = ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့သူ။
သော်လည်းအဲလက်စ် Rhodes & Nofap အပေါ်သူမ၏တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက် သူကသူမအပေါ်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Rhodes ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွစ်တာစာ၏စခရင်ရိုက်ကူးမှုကိုတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်တင်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ Breaking Bad” ၏၏အကြောင်း။ ဇာတ်ကောင် Jess Pinkman ပုံမှန်ဒီကပြောသည်။ https://www.pinterest.com/danicleary/jesse-pinkman-bitch/
“ newfriend” ပြန်ကြားချက်က RealYBOP ဂိမ်းကစားခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည်။ အထောက်အထားမဟုတ်သောလုပ်ကြံရန် Prause ၏ပုံမှန်။
RealYBOP ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကကျွန်ုပ်ကို cyberstalking ။ ငါ Fred Toates အောက်တွင် tweet ပြုလုပ်ပြီးခုနစ်နာရီအကြာတွင် RealYBOP သည်သူ့ကိုဆီလျှော်သော drivel ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။
အဖြစ်မှန် - ဤစာမျက်နှာတွင် - ၁ - လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ (မုဒိမ်းမှုနှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြောဆိုမှုများ).
RealYBOP သည် Toates ချည်နှောင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝရှုတ်ချသည်။ မည်သူမျှအစီရင်ခံစာများကိုတင်နေသည်မဟုတ်, ရဲအစီရင်ခံစာများ။ ဘာမုသားလဲ
Staci Sprout ကိုထပ်မံနှောင့်ယှက်နေသူ RealYBOP (Prause) ကြည့်ပါ
ဇန်နဝါရီလ 24, 2018: Prause ကုထုံး Stacy အညွှန့်ဆန့်ကျင်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နှင့်အတူအခြေအမြစ်တိုင်ကြားမှုများဖိုင်များကို
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ Prause သည်လိမ်လည်မှုများစွာကိုတွစ်တာတွင် (၁) YBOP တွင်သူမ၏လိပ်စာပေါ်လာသည်၊ (၂) CA ရှေ့နေချုပ်သည် Linode အား YBOP မှလိပ်စာဖယ်ရှားရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်၊ (၃) Staci Sprout & Gary Wilson မှသူမ၏နေအိမ်လိပ်စာကိုတင်နေသည်။ “ အွန်လိုင်း”
အခြားသူများ - ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လ။ Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကုထုံးပညာရှင် Staci Sprout အားတရားစွဲဆိုခြင်းမရှိသောအခြေအမြစ်မရှိသောတရားစွဲဆိုမှုအားတရားစွဲဆိုသည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၀ ဇူလိုင်။ ။ RealYBOP (Prause) သည် Staci Sprout ကို RealYourBrainOnPorn မှသုတေသီများကကလေးများအားစော်ကားသည်ဟုမှားယွင်းစွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
Prause အားတရားစွဲဆိုထားသည့်ဖက်ဒရယ်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင် PDF ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက်လက်မှတ်
ပြကွက် ၁၀ - Staci Sprout၊ LCSW ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၁၅ ပါ)
ထို့နောက် Cyberstalker RealYBOP သည်သူမ၏အလတ်စားဆောင်းပါးကိုတွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါ ၀ င်သည်။ ဘာမှမပါဘဲ၊
အမှန်တကယ်စာရွက်စာတမ်းများ - Nicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။
နီးလ် Malamuth တင်ခဲ့သည် ဖာဂူဆန်၏ဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဝေဖန်ချက်။ အဖြစ်မှန် - RealYBOP ဟာဘယ်တော့မှမရေးခဲ့ဖူးတဲ့လေ့လာမှု ၁၀၅ ခုပါ။ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ (မုဒိမ်းမှုနှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြောဆိုမှုများ).
RealYBOP သည်ဖာဂူဆန်၏ဆောင်းပါးမှသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောကောက်နုတ်ချက်ကိုတလွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖာဂူဆန်ကတော့ Todd Welier ကသူ၏ပါ ၀ င်မှုကို“ ယုံလွယ်သောသူ” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ RealYBOP သည်ဤ Weiler အားသူလှည့်စားခဲ့သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုတစ်ခုသည် Utiler ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း။ “ gullible” ဟူသောစကားလုံးကို အသုံးပြု၍ Weiler ကိုရှာမတွေ့ပါ။
RealYBOP သည် Todd Weiler ကို ၄ နှစ်ကြာပစ်မှတ်ထားခဲ့သည် Weiler နှင့် ပတ်သက်၍ AmazonAWS ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင် ၀ င်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ.
Flood ဟာ RealYBOP ကို ​​trolled လုပ်ပုံရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ကို "quote-tweet" မပေးလို့ပါ။
သူမ၏အကြိုက်ဆုံးပစ်မှတ်တစ်ခုမှာ Mormonism ။ အံ့သြစရာကောင်းတာကချာ့ချ်က porn ကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ RealYBOP သည်အခြားလိမ်လည်မှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မျက်နှာပြင် ၃ ခုမှမည်သည့်အရာကမျှစွဲလမ်းစေသော ဦး နှောက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမဖော်ပြထားပါ
ဒါရယ်စရာပါ ငါ Ley ကို porn က "ရန်ပုံငွေ" ဟုပြောသည်ဘယ်တော့မှမ။ ငါက ဒေးဗစ်လီသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဆန်သောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster မှလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။! အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦး xHamster က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (StripChat) ။ ကြည့်ပါ "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns။ ” မှတ်ချက်။ ။ ဒီ post ကိုပထမဆုံးတွေ့ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာ Ley ကသူမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် တိုက်ရိုက် "ညစ်ညမ်းသောကုမ္ပဏီ" မှလျော်ကြေးပေးသော်လည်းဤသည်မှာဆံပင်များဖြစ်သည်။ Stripchat သည် SHA ကိုလျော်ကြေးပေးပြီး SHA ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Ley ကိုလျော်ကြေးပေးသည်။ ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်သည့်စိတ်ပညာရှင်ဆရာဝန်နှင့်ဆင်တူသည်မှာသူသည် Phillip Morris မှတိုက်ရိုက်မပေးသော်လည်းအစားထိုးလျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ဆေးရွက်ကြီးဌာန။ ကောင်းသောအစမ်း, David ။
ဝိုး။ လူများအား ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာကိုခံစားခွင့်မရှိကြောင်းပြောပြခြင်း။ သူမသည်သူမအား“ စိတ်ဒဏ်ရာ” ၏လုပ်ကြံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပေးသည်။
တူညီသောကြိုးပမ်းမှုတွင် RealYBOP သည် The New The Drug ကိုပစ်မှတ်ထားသော op-ed ၏သူမ၏ဟာသကိုတွစ်တာတွင်:
RealYBOP ၏စကားလုံး ၆၀၀ ပါ Op-Ed သည်အများပြည်သူအားအရူးလုပ်ရန်မထောက်ခံသည့်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စာရွက်စာတမ်း ၄ ခုသာကိုးကားထားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအခိုင်အမာကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အဘယ်သူအားမျှ porn စွဲလမ်းမှု၊ ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ၊ ဤနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများသည်ဤအခက်အခဲတိုတောင်းသည့်တုန့်ပြန်ချက်များနှင့်၎င်း၏ပြောဆိုချက်များနှင့်အချည်းနှီးသောအပြောအဆိုများကိုဆွေးနွေးကြသည်။ Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)။ Op-Ed ၏အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်မတူဘဲသူတို့သည်ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများနှင့်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုကိုးကားခဲ့သည်။
Cyberstalk Staci Sprout (အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံ ၂ ခုတွင် Prause အားသက်သေပြနေသော) ကို ဆက်၍ ။ Prause အားတရားစွဲဆိုထားသည့်သီးခြားဖယ်ဒရယ်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင် PDF ၏ကျမ်းကျိန်လွှာများ
RealYBOP သည် Staci နှင့် Liz Walker တို့၏ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သည်။
သြဂုတ်လ 5, 2020သူမအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံထားရသော်လည်း Nofap နောက်သို့လိုက်သည်။ Flashback လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ nofap အကြောင်းဆွေးနွေးနေတဲ့ကျပန်းချည်ထည်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ကျောင်းသားဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုတင်ထားတယ်။ မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? သူမကစွဲလမ်းမှုမှားယွင်းစေရန်ဘာမှများအတွက်ပိုက်ကွန်ရှာဖွေနေသည်။
RealYBOP အဖွဲ့ဝင် Ley nofap အသင်း ၀ င်များ၏လူ ဦး ရေကိုအကဲဖြတ်သည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုများရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲကာ၎င်းအားလိမ်ညာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများမရှိပါ။
မဒါသိမ်မွေ့တိုက်ခိုက်မှု “ လူကုန်ကူးမှုဗဟိုဌာန”, Pornhub ကိုရပ်တန့်ရန်လှုပ်ရှားမှုသည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အမှန်တကယ်လိင်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗွီဒီယိုများကိုလက်ခံရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
RealYBOP သည်ရှီလင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ RealYBOP သည်လိမ်လည်မှုဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ Guy လင့်များ RealYBOP ကို ​​serial defamer harasser နှင့် porn-industry ကဲ့သို့သောဖော်ထုတ်ထားသောဤ site အသစ်
မှတ်ချက်။ ။ RealYBOP ကကျွန်တော့်ကို stalker လို့မမှန်မကန်စွပ်စွဲထားတဲ့တရားစွဲမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်
သြဂုတ်လ 8, 2020 - အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခံရသော်လည်း nofap ကိုတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
RealYBOP သည်ကျောင်းသူတစ် ဦး မှ drivel ကိုပြန်လည် retweets:
RealYBOP သေးဖီးလ် Zimbardo, disparages။ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် David Ley, Prause & RealYBOP သည် Zimbardo ကိုလူငယ်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အတွက်မကြာခဏကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းခံရသည်။ RealYBOP သည် TED ကိုဂိမ်းလိုလားသူနှင့်ညစ်ညမ်းသောအဖွဲ့များကအတင်းအကြပ်ခိုင်းစေသည့်“ သတိပေးချက်” ဖြစ်သည်။ RealYBOP ကပြောကြားသည်မှာ“သိပ္ပံပညာကထောက်ခံသည်မဟုတ်"တကယ်တော့" စိန်ခေါ်ခဲ့ကြ "ဟုပြောသည်။
ပညာရှင်မဟုတ်သူ Ley & Prause သည် Zimbardo ၏ကျော်ကြားမှု၊ အောင်မြင်မှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုမနာလိုဖြစ်နေပုံရသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းမှာကျွန်တော့်ကို Cyberstalking ငါ“ ပါးရိုက်ခြင်း” ခံရပုံကိုကြိုးစားရှာဖွေဆဲ
Convo ဆက်ပြောသည် .........
ငါကျောင်းနေခဲ့လား Neuroskeptic နဲ့ငါသဘောတူခဲ့တယ် RealYBOP အသင်း ၀ င်ဆမ်ပယ်ရီရဲ့စက္ကူအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကိုဒီမှာပြောပြပါမယ်။
ကြောင်း RealYBOP retweets နှောင့်အယှက် Prostasia ဖောင်ဒေးရှင်းကလေးများအားကာကွယ်ခြင်းထက် pedophile အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ ဒီပြသမှုကိုကြည့်ပါ '- အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် pedophiles ၏ထူးထူးဆန်းဆန်းကမ္ဘာကြီး.
RealYourBrainOnPorn (Pornhub's BFF) သည် Lala Mickelwait ကို Cry Cry နှင့်ကျော်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရူးသွပ်သည့် tweet တစ်ခုဖြင့်ထပ်မံပစ်မှတ်ထားနေသည်။ Melmagazine မွာ Exodus Cry အကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး။ RealYBOP သည်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောက်ယှက်ခြင်းအပါအ ၀ င် Pornhub ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ဘာမှမလုပ်ပါ။
Cindy Gallop ၏ porn site ကိုမြှင့်တင်ခြင်း -
ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ED မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသောလူငယ်များကိုလေ့လာပြီးလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည် ((၀.၁၇)) ။ ဒါပေမယ့် RealybOP ကဒီပြstudyနာဟာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုတင်ပြထားတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူး (+ ၀.၃၇)။ ထို့ကြောင့်သင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာဘ ၀ အတွက်ညစ်ညမ်းမှုသည်မကြီးနိုင်ပါ။
မှတ်ချက် - RealYBOP ရဲ့ operator ရှိတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်လူငယ်များအား PIED ကိုဖျက်စီးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
သြဂုတ်လ 11, 2020Ley ရော RealYBOP နှစ်ခုလုံးက Nofap ကိုလိုက်လုပ်နေတာ။ Ley သည် www.beatit.guru မှအီးမေးလ်အမြောက်အများကို၎င်းတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုရောင်းချရန်အတွက် NoFap ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတရားမဝင်အသုံးပြုနေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ရှေ့နေများသည် www.beatit.guru သို့ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
TraffickingHub ကိုထောက်ခံသူများအားတိုက်ခိုက်မှုများတွင် pornhub ကိုပိုမိုအထောက်အပံ့ရှိသည်။
RealYBOP သည် Pornhub ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသည်။
RealYBOP သည် Pornhub ကိုအခြားအလားတူချည်နှောင်မှုဖြင့် defneds:
ပို။ ပို Pornhub ၏ကာကွယ်ရေး - နှင့်သင်တန်း၏, အသနားခံစာစတင်ခဲ့သော Exodus Cry တိုက်ခိုက်ခြင်း။
ဒီမကြာသေးမီကစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးနောက် EAU 2020: ပိုဆိုးသော၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့် Erectile Function (၂၀၂၀)
အဲဒီမှာ 12 ကျောင်းသားများ။ ကြည့်ပါ - Erectile ပြီးတော့အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ပုဒ်မ
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - https://www.esanum.com/today/posts/interview-prof-dr-de-win-on-the-link-between-porn-consumption-and-erectile-dysfunction
အသစ်အပိုင်း (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်) တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရနီကိုးလ်ပရပ်ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ဖြင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Prause သည်ကျွန်ုပ်ကို ၇ နှစ်ကြာအပြစ်တင်ခဲ့ပြီးသူမသည်အမဲလိုက်သူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း။
တုန့်ပြန်မှုအနေနှင့် RealYBOP (Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) သည်လိမ်ညာမှုများကိုဝန်ခံ။ အခွံချွတ်သည်။
RealYBOP သည်ကျွန်ုပ်ချည်နှောင်ထားသော trolls ကိုထိန်းချုပ်သည် သူမ၏သားကို doxxing နှင့် cyberstalking အဖြစ်ဖော်ထုတ်ထို့နောက်သူမအားလိမ်လည်။ တားဆီးသည့်အမိန့်ဖြင့်အသရေဖျက်ခဲ့သည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ညစ်
RealYBOP & Prause သည်ထပ်ခါထပ်ခါ Prause ၏အမိန့်အရအနီးကပ်ညစ်ညမ်းသောသူငယ်ချင်းများ (များသောအားဖြင့် RealYBOP အသင်းဝင်များ) မှရေးသားထားသောလိမ်လည်သည့်စာများကိုပို့သည်။ သူမသည်သူမ၏လိမ်လည်။ တားမြစ်သည့်အမိန့်တွင်စာလုံး ၄ လုံးကိုထည့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်တရားသူကြီးက၎င်းတို့မှတဆင့်မှားယွင်းသောလုပ်ရပ်များအဖြစ်မြင်ခဲ့သည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွစ်တာရေးသားထားသောအထက်ပါစာလုံး ၄ လုံးသည် cyberstalker Prause ၏ပြောဆိုချက်ကိုမဖော်ပြထားပါ။ စာတွေရေးတဲ့သူကဘယ်သူကမှငါသူတို့ကိုမတားခဲ့ဘူး။ ပေးစာတွင်ဖော်ပြချက်များသည်သက်သေအထောက်အထားလုံးဝမရှိပါ။ Prause စာလုံးလေးလုံး၏အကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည်သူမ၏တွစ်တာများတွင်တင်ခဲ့သည်။
အိုင်ယာလန်၏ကိတ် Dawson အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ငါနဲ့ Nikky အကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး
ကနေဒါရေဗက္ကာ Sullivan က။ စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာပါအက္ခရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်သောပစ်မှတ်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ ၄၇ တွင်ရွေ့လျားမှုအတွက်အတိုချုပ်တင်ခဲ့သည်။
Madita Oeming အားဖြင့်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအနှောင့်အယှက်ပေးမည်၊ ခြိမ်းခြောက်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါ O post တင်သောကြောင့်, Oeming whinedtweets ၃ ခု သူမ၏မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများအကြောင်းကို။ Oeming ရဲ့စာက Prause ရဲ့လိမ်ညာမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တရားရုံးကငါ့မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးစာမှာ Daniel Burgees ၏မုသားစကားလုံးများဖြစ်သည်။ သူသည်အစစ်အမှန် RealYourBrainOnPorn.com တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်၊ ငါ့ကို cyberstalk လုပ်ရန် aliases များကို သုံး၍ အသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Burgess နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ interaction ကအကြောင်းကိုအမှန်တရားဖြစ်ကြသည် လုံးဝဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ RealYourBrainOnPorn.com ကိုရပ်တန့်ရန် Mr. Burgess နှင့်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်သည်။
သူမက RealYBOP alias ကိုသုံးပြီးသူရဲဘောကြောင်တဲ့ Prause ရဲ့အသရေဖျက်မှုတွေအများကြီး။ ပိုမို trolling:
ဤသည်မယုံနိုင်စရာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်။ RealYBOP သည်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပသည့် Matt Fradd ၏ဇနီးအောက်တွင်အသရေဖျက်မှုတွစ်တာပြုလုပ်ခဲ့သည်
RealYBOP ကသူမအပေါ်အသရေဖျက်မှုကိုဆက်ပြောသည်။ YBOP သည်“ ငါတို့” ကိုသတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟုဆိုသည်။ Prause ကဲ့သို့သောသက်သေအထောက်အထားများသည်သူမ၏လိမ်လည်။ တားမြစ်သည့်အမိန့်တွင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ တရားရုံးများက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချမှတ်ခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
RealYBOP ရဲ့“ သိပ္ပံ” ကိုကျွန်တော်အရမ်းကြောက်တယ်။ ဟားဟား။ ငါက "သုတေသနစာမျက်နှာ" ရဲ့ဟာသကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် - porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com").
ဆဌမအကြိမ်? သူမကဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ။ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ WIPO ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ် (ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်)၊ သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဥပဒေရေးရာအရေးယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ Prause နှင့်ပတ်သက်သည့်တစ်ခုတည်းသောအခြားဥပဒေရေးရာအရေးယူမှုမှာကျွန်ုပ်သည် SLAPP ဝတ်စုံကိုအောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ သူမကိုလိမ်လည်သူ၊ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.
ပိုများသောအသရေဖျက်မှုနှင့်မှားယွင်းသော။ တနည်းကား, ငါသူမ၏တစ် ဦး တည်းသာတရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်း, ယခုအချိန်အထိငါအနိုင်ရခဲ့သည်.
အပိုင်းအသစ် - Brian Watson ၏အမှားဖြည့်ထားသော hit-piece
Kinsey grad, စာကြည့်တိုက်နှင့်အနီးကပ် Prause မဟာမိတ်, Brian Watson အမှားအယွင်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ RealYBOP ကမှန်သလိုမျိုးကောက်နုတ်ခဲ့တယ်။ RealYBOP (Prause) သည် Watson ၏မုသာများကိုတည်းဖြတ်ရန် sockpuppets အနည်းငယ်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ Nofap.
Watson ကကျွန်တော့်ကိုရှုတ်ချတယ်၊ YBOP နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီမှာတင်ပြခဲ့တဲ့သုတေသနတွေက (RealYBOP လိုပဲ)
အဖြစ်မှန် - ငါနဲ့ဆောင်းပါးရဲ့သတင်းမှားကိုငါအဓိကထားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် www.yourbrainonporn.com (YBOP), ဒါပေမယ့်ငါကပိုမိုကျယ်ပြန် - ရောက်ရှိဆုံးမပဲ့ပြင်နိုင်ရန်အတွက်ယုံကြည် (အမှန်တကယ်ပြန်ရုပ်သိမ်း) ။
Watson ငါသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးနှစ်ခု, ဒါမှမဟုတ်ငါဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုများအတွက်ခန္ဓာဗေဒ & ဇီဝကမ္မဗေဒသင်ပေးကြောင်းအသီးသီးစာရေးဆရာနှင့်ပူးတွဲစာရေးဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ မပါ Watson ငါရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသနနှင့်အတူအနားသတ်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်၏စာရေးဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြပါ: Your Brain On Porn: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာစကားမစပ်, ငါ့စာအုပ်ရရှိသောအားလုံး undercutting, မှတ်ပုံတင်ထားသောပရဟိတလုပ်ငန်းကိုသွား Watsonအမြတ်အစွန်းရရန်အတွက်သူအမည်ပေးထားသူတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနေကြသည်ဟုဆိုကြသည်။
ငါ့ကိုအကြောင်းကိုအထက်ပါအချက်အလက်များ၏အစား Watson ကိုအောင်နိုင် ကြော်ငြာ hominem ရည်ညွှန်းချက် ၄ ခုဖြင့်တင်သည့်ဆောင်းပါးသုံးပုဒ်နှင့်မှတ်ချက်တိုတိုလေးခုဖြင့်သူတို့ကိုထောက်ခံသည်။ ဆောင်းပါး ၄- ခုထဲမှတစ်ခုမှကျွန်ုပ်အကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် YBOP၊ ကျယ်ပြန့်သုတေသနအဲဒီမှာကိုစုဝေးစေ။ ထုတ်ဖော် Watsonဆောင်းပါး (၄) ခုအနက် (၂) ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထောက်ခံသူဒေးဗစ်လိုင်ကအလွန်အမင်းဘက်လိုက်မှုရှိသည် လက်ရှိ porn ကုမ္ပဏီကြီး xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်း ၎င်း၏ "Stripchat" website နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်။
Watson အခိုင်အမာပြောဆိုသည့်အခါ Fight The New Drug (FTND) နှင့် YBOP နှစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းနေပုံရသည်။
သို့သော်ကောက်ယူသောစာမေးပွဲထက်ပိုသောမည်သည့်အရာကမျှထိုအုပ်စုများသည်အများပြည်သူသိထားသည့်သတင်းအချက်အလက်မရေရာမှုတွင်ပါဝင်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကိုးကားဖော်ပြချက်များနှင့်လေ့လာမှုများမှာမကြာခဏမဟုတ်ဘဲဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လှည့်ဖြားခြင်း၊Ley 2018; Oeming 2018; Bradley et al ။ ၂၀၁၆; Mialon et al ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Wéry et al ။ ၂၀၁၆; Wilt et al ။ ၂၀၁၆)။ အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သောပြနာများသည်အရင်းအမြစ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်စာကြည့်တိုက်မှူးများအားချက်ချင်းရှင်းသွားလိမ့်မည်။ ရည်ညွှန်းထားသောဂျာနယ်များသည်မသင်္ကာဖွယ်ခေါင်းစဉ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့သို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျးမ Watson FTND (သို့) YBOP တွင်တင်ထားသော“ သံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်“ လှည့်ဖြားသော” လေ့လာမှုများကိုဥပမာပေးဖော်ပြခြင်းတစ်ခုမျှမပါ။ အထက်တွင်အဘယ်သူမျှမ Watsonကိုးကားချက်ခြောက်ခုကငါနဲ့ YBOP အကြောင်းပြောတာ။ ပုံမှန်၏ Watsonညည်းညူသောပညာသင်ဆုသည်ကိုးကားချက်လေးခုအနက်လေးခုနှင့်ပင်အဝေးမှဆက်စပ်မှုမရှိပါ Watson's တောင်းဆိုမှုများ။ Watson ကကိုယ့် shit တက်စေသည်။
တကယ်တော့၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ရက်တွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သောလေ့လာမှု ၁၀၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်လေ့လာမှုများစွာကိုသက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားများသို့စည်းရုံးသည် - သက်ဆိုင်ရာသုတေသန။ ဥပမာ, ဤစာရင်းတွင် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုပေါင်း ၂၇၀ ပါ ၀ င်သည် (စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ၁၆ ခုနှင့်အတူ) - ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးရလဒ်များအားလုံး။ Watsonထောက်ခံမှုမရှိသောအခိုင်အမာပြောဆိုချက်သည်စာဖတ်သူကိုယုံကြည်မှုရှိစေလိမ့်မည် - ၂၇၀ စလုံးသည်“ လိမ်လည်မှုလေ့လာမှုများ” ဖြစ်သည်၊ အမှန်မှာထိုစာရင်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာလေးစားခံရသည့်စာရေးဆရာများကဤနယ်ပယ်ရှိသုတေသန၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
စဉ်းစားပါ YBOP ၏ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုတိုင်းသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများတွင်ထုတ်ဝေသောစာရင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု ၅၂ ခုစလုံးမှတွေ့ရှိချက်များကိုစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြသည်။ Watsonမမှန်မကန်ကောက်ယူရရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များသည်စာဖတ်သူကိုယုံကြည်မှုရှိစေလိမ့်မည်။ မသေချာသောပညာသင်ဆုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဝါဒဖြန့်မှုသို့ကူးပြောင်းသွားသနည်း။
YBOP ၏စာရင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ လိင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာချက် ၁၁၀ ကျော်။ လေ့လာမှုများအများအပြား longitudinal သို့မဟုတ်စမ်းသပ်ဖြစ်ကြသည်။ WatsonYBOP အနေဖြင့်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အသုံးပြုသူအချို့အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း YBOP က visitors ည့်သည်များကိုသတိပေးသည်မှာ pseudoscience ဟုဆိုလိုသည် သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသောကျွမ်းကျင်သူများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်ဥပမာများကိုပေးနိုင်သည်။
၏ချိန်ခွင်လျှာ Skimming Watsonအခြားဆောင်းပါးတွေကိုလှည့်ဖြားတယ်၊ ဥပမာ, Watson Fight The New Drug သည် Nofap LLC ကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမှားယွင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်သည်သင်၏စီးပွားရေးဂျာနယ်အားအဂတိလိုက်စားမှု (သို့) အခြားတရား ၀ င်အရေးယူမှုများအတွက်သင်၏ဂျာနယ်အားတရား ၀ င်အရေးယူမှုနှင့်ထိတွေ့မှုရှိနိုင်ပါသလား။ ဂျာနယ်ကလုံလောက်စွာမထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဆောင်းပါးနှင့်အုပ်စုများနှင့်လူများ၏ပါးလွှာစွာဖုံးအုပ်ထားပုံရသောအရာများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ Watson သဘောတရားအရသဘောမတူလား။
Alias ​​ကို အသုံးပြု၍ Prause သည် Brian ကိုတည်းဖြတ်သည် Watsonသို့ BS 's သို့ NoFap အတွက်ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ (ကျွန်ုပ်သည် NoFap နှင့်မပတ်သက်ပါ):
ကိုးကား #9ဘရိုင်ယန်ဖြစ်ပါတယ် Watson ရဲ့ ဆောင်းပါး နောက်ဆုံးပေါ် Prause sockpuppet's သည် Watson ၏အမှိုက်ကိုထည့်သည်။
Alias ​​အမည်ကိုချီးမွမ်းပါ RealYBOP / Prause သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၅ ကြိမ်ရေးသားခဲ့သည့်တူညီသောလိမ်လည်မှုများကို Nofap Wikipedia စာမျက်နှာသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည် (“ Tgeorgescu” ကိုလည်းတွေ့ရသည်၊ သူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်းဖြတ်သူဖြစ်သော Prause ၏ sockpuppets ၏တည်းဖြတ်မှုကိုကာကွယ်သည်):
RealYBOP သည် Brian Watson ကိုးကားပြီးဆလိုက်တစ်ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်တွစ်တာလုပ်သည်။
ယုတ္တိဗေဒနောက်ကျောရိုက်? သငျသညျတရားသူကြီးဖြစ်။ RealYBOP အသင်းသား Sam Perry ရဲ့လေ့လာမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏တွစ်တာမှတ်ချက်မှာဤတွင်ပါ။
Brian Watson ရဲ့အသရေဖျက်မှုပါတဲ့နောက်ထပ်တွစ်တာတစ်ခု။
Hilarious - NoFap နှင့် YBOP များသည်“ ကောင်းစွာငွေကြေးထောက်ပံ့ထားပါသည်” ။ ရုံညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းလိုပဲ, ဟုတ်သလော ဟားဟား။ သငျသညျ Nikky စကားပြော anti-? တရားရုံးကသဘောမတူဘူး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီ Superior တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုရယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ တရားရုံးကတွေ့ရှိချက်အရ Prause သည်ချုပ်နှောင်မှုအမိန့်ကိုကျွန်ုပ်အားတိတ်တဆိတ်ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုချိုးနှိမ်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
RealYBOP သည် Brian Watson ၏ဝါဒဖြန့်မှုနှင့်မှားယွင်းမှုများကိုပိုတင်သည်။
သြဂုတ်လ 7, 2020အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ် (သို့) FightTheNewDrug တို့ကတရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ Watson သည် Nofap.com ကို FightTheNewDrug မှပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည်။
Brian Watson အပိုင်း၏အဆုံး
RealYBOP သည် Nofap ကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားနေဆဲဖြစ်သည် @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်! RealYBOP အသင်း ၀ င် Alan Mckee သည်သူ၏ nofap ကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့် Prause မုသားကိုသူ၏စာအုပ်အသစ်ထဲသို့ထည့်ခြင်း Mckee မှ Nofap သည်“ အမျိုးသမီးပညာရှင်” (Prause မှလာသည်) အားပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်သည်၊ ကျူးလွန်သူကိုချီးမွမ်းပါတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်း nofap ၏အဲလက်စ် Rhodes.
RealYBOP (Prause) သည်သူမဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာသားကောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုကိုးကားနေသော McKee ကိုကိုးကားခဲ့သည်။ 2020 ၏သြဂုတ်လ၌ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်
၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၃ ရက် - RealYBOP ဖြစ်နေသော်လည်း Nofap မှ Alex Rhodes အားတရားစွဲသူမကသူ့ကိုနှောင့်ယှက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ xHamster ကတွစ်တာတင်ပို့ပုံ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဆန်ဆန်အသုံးပြုသူများကိုယုံကြည်စေရန် RealYBOP အသင်း ၀ င်ဒေးဗစ်ဂျေလီနှင့်ပူးပေါင်းသူဖြစ်သည်။!
RealYBOP အဖွဲ့ဝင် Sam Perry ကသရုပ်ဆောင်သည်။
ဒါက David Ley နဲ့ Gavin McInnes တို့အကြားအီးမေးလ်လဲလှယ်မှုမှလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် set-up တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ငါ Gavin McInnes နှင့်စကားပြောဖူးဘူး။ အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည် McInnes podcast တွင်ရှိစဉ်ကသူနှင့်စကားပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ McInnes သည် Proud Boys မစခင်နှင့် VICE တွင်သူတည်ထောင်ခဲ့သည်။ မက်ဒီနက်သည်မည်သူကိုမဆို“ ကျောထောက်နောက်ခံ” ပေးသည်ဟုအီးမေးလ်တွင်မဆို။ RealYBOP ဟာအရာရာကိုလုပ်နေတာပဲ။ သူမအမြဲတမ်းလုပ်သလိုပဲ။ McInnes သည် Ley အား YBOP တည်ထောင်သူနှင့်စကားပြောရန်ပြောခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကလူငယ်များ၏ဘ ၀ ကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းရှာဖွေရန် YBOP ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
သူမကသူမကိုလည်းတရားစွဲဆိုမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမလည်းရေးသားခဲ့သည် ... ဂုဏ်ယူပါတယ်
လိမ်တယ် WIPO သည်တရားစွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ဥပဒေအရအရေးယူမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်သည်) ငါသူမ၏တစ် ဦး တည်းသာတရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်း, ယခုအချိန်အထိငါအနိုင်ရခဲ့သည်။
အထူးအပိုင်း: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ပိတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် RealYBOP သည်၎င်းကိုအမည်ပြောင်းသည်။
ကျွန်တော်အခု ပိုင်ဆိုင် “ သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်”၊ “ YourBrainOnPorn.com” နှင့်“ YBOP” အတွက်အမေရိကန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၆၀၉၈၈၃၊ ၆၀၉၈၈၄ နှင့် ၆၀၃၈၅၉၉ ။ အမြဲတမ်းခေတ္တဆိုင်းငံ့ခံရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ ၄ င်း၏အမည်ကို“ Porn On Your Brain On” ဟုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ထိုအခါ RealYBOP သည်ဤရှင်းလင်းသောမျက်နှာလွဲမှုမျိုးကို၎င်း၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ရီးရဲလ်သိပ္ပံပညာရှင်များ။ ရီးရဲလ်ဒေတာ။ သင်၏ Brain On Porn သည်အမှန်တကယ်သိပ္ပံကိုအလွန်မုန်းသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဖန်ချက်များကိုပယ်ဖျက်ရန်တရားစွဲဆိုမှု ၇ ခုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
ယခု၎င်း၏7တရားစွဲမှု။ တကယ်တော့ငါတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုတည်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါနိုင်ခဲ့တယ် -Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.
Cherry သည်စုစည်းထားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသော RealYBOP အသင်းဝင် Sam Sam Perry ၏စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုကောက်ယူသည်။ အဖြစ်မှန်မှာဘာသာရေးလူ ဦး ရေတွင်ညစ်ညမ်းမှုနှုန်းနိမ့်ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်လေ့လာမှု ၃၀ - Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုရှိပါသနည်း
အထူးအပိုင်း - ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် RealYBOP ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် Gabe Deem ကိုသူနှင့် David Ley တို့၏နည်းဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်သောဗွီဒီယိုတစ်ခုအတွက်ရှုတ်ချသည်။
Gabe Deem သည်အလွန်ကြီးမားသောဗီဒီယိုကိုဆေးရွက်ကြီးကြီးများအသုံးပြုသည့်နည်းဗျူဟာများကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမဟာမိတ်များ (ဥပမာ - David Ley နှင့် Nicole Prause) နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Gabe ၏ဗွီဒီယိုသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရန် RealYBOP သည် Gabe အားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာကိုရယူပါ - RealYBOP သည် Gabe ကို ၂၄ နာရီအတွင်း tweets ၂၂ ခုတင်ခဲ့သည်။ tweets အချို့ကို 24-2 လအရွယ်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများတွင်တင်ခဲ့သည်။ အတော်များများကအသရေဖျက်မှုပါရှိသည် se နှုန်း, RealYBOP Gabe သေခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုခြိမ်းခြောက်မှုများကိုစေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းမှားယွင်းစွာဖော်ပြ RealYBOP ဟာတကယ့် sociopath လိုလုပ်နေတယ်။ Gabe မှာသူတရားစွဲမလားဆိုတာကိုတစ်နှစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
သိထားပါ၊ RealYBOP တွစ်တာအားလုံးသည်မုသားဖြစ်သည်။ ဒါဟာအရူးနဲ့စတင် ... နှင့်အရူးဖြစ်လာသည်။
Tabe #2Gabe ကိုပစ်မှတ်ထား
Tabe #3Gabe ကိုပစ်မှတ်ထား
Tabe #4Gabe ကိုပစ်မှတ်ထား
Tweet #5မှာ Gabe (၅ လသားချည်!)
Tweet #6Gabe နဲ့ကျွန်တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတယ် -
Tweet #7Gabe နဲ့ကျွန်တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတယ် -
Tweet # 8 မှာ Gabe (၅ လသားချည်!)
Tweet #9မှာ Gabe (၅ လသားချည်!)
ဂါဘကိုပစ်မှတ်ထား Tweet # 10:
ဂါဘကိုပစ်မှတ်ထား Tweet # 11:
ဂါဘကိုပစ်မှတ်ထား Tweet # 12:
ဂါဘကိုပစ်မှတ်ထား Tweet # 13:
Tweet # 14 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ သူမသည်အက္ခရာ ၄ ခုကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။ အက္ခရာလေးလုံးထဲကတစ်ခုမှာ Madita Oeming ပါပါတယ်။ သို့သော်တရားရုံးများက Prause သည်လိမ်ညာနေသည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.
Tweet # 15 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
Tabe # 16 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထား
ဂါဘကိုပစ်မှတ်ထား Tweet # 17:
The lowdown - RealYBOP အသင်း ၀ င် Alan Mckee ဟာလိမ်ပြောတာ nofap ကိုရှုတ်ချ Prause အားဖြင့် မိမိအစာအုပ်အသစ်သို့။ Mckee မှ Nofap သည်“ အမျိုးသမီးသိပ္ပံပညာရှင်” ကိုတိုက်ခိုက်သည် (၎င်းသည် Prause မှလာသည်) ဟုဆိုသော်လည်းသူသည် Prause ဖြစ်သည်။ nofap ၏အဲလက်စ် Rhodes တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်။ So. RealYBOP သည်သူမကိုလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကိုကိုးကားသော်လည်းတရားရုံးကသူမအားအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများပြောဆိုခြင်းသည်လုပ်ကြံခြင်းခံရသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.)
Tabe # 18 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း (RealYBOP ၏ sceenshots များမှသူမရေးခဲ့သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုထောက်ခံကြောင်း Jonathon Van Maren ကထောက်ပြသည်):
Tweet # 19 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ Van Maren က RealYBOP ကိုလိမ်သည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဖြစ်သည်။
Tweet # 20 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
Tabe # 21 သို့ Gabe, Van Maren နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပစ်မှတ်ထားသည်
Tweet # 22 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
Tweet # 23 Gabe ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ငါ့ထံသို့ reponse ၌တည်၏ တရားဝင်အောင်ပွဲများ Nicole Prause မှ LifeSite News မှအောက်ပါအင်တာဗျူးကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် - ညစ်ညမ်းသောလူသတ်သမားသည်တရားရုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော 'porn prof' ကိုတရားဝင်အောင်ပွဲခံခဲ့သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဂယ်ရီ Wilson သည်နီကိုလိုင်ပရက်စ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်၊ သူသည်အဆက်မပြတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားမည်သို့အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့်သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။ သူနိုင်ခဲ့တယ်.
အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဖြစ် Diana Davison's အနှစ်တစ်ထောင် Post ဖော်ထုတ် ', Prause နှင့်သူမ၏ alias ကိုအကောင့် (@BrainOnPornရေးသားသူကိုနှောင့်ယှက်သည်၊ ဆောင်းပါးပြောဆိုရာကိုလိမ်။ တရားစွဲဆိုမှုကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ဒီမှာ Prause ရဲ့ tweet စာရေးသူအောက်မှာ Jonathan van Maren ၏တွစ်တာ သူ၏ဆောင်းပါး
LifeSiteNews သည်သူမ၏လိမ်လည်မှုကို ဦး ညွှတ်မည်မဟုတ်ဟုစိတ်ဆိုးကာသူမနောက်သို့လိုက်ရန် RealYBOP ကိုအသုံးပြုသည်။
Prause ၏တွစ်တာတွင် SASH သို့လိမ်လည်လှည့်ဖြားနေသောလှုပ်ခတ်နေသောစာတစ်စောင် (အမှန်စင်စစ် Cease & Desist မဟုတ်ပါ) ၏ဖန်သားပြင်တစ်ခုပါရှိသည်။ ငါနှင့်အခြားသူများကသူမအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးကိုချီးမွမ်းသည်စာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ Sra သို့ Prause ၏စာနှင့်၎င်း၏လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများကိုထောက်ခံမှုမရှိသောနှောင့်ယှက်မှုအဖြစ်လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Prause သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တရားဝင်ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းကိုတင်နိုင်သည်။ ရုံပိုမို Self- ထုတ်လုပ်ပြီး Prausian "သက်သေအထောက်အထား။ " SASH ဘုတ်အဖွဲ့သည် Prause သည်သူမ၏နိုးထရက်များအားသူမ၏ရည်မှန်းချက်များစွာကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောအမှတ်စဉ်အသရေဖျက်သူဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသတိပြုမိသည်။
Van Maren ၏ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာကိုလည်း Prause ကလိမ်ပြောခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအရာခပ်သိမ်းကိုမှန်ကန်သကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမအသရေဖျက်မှုမရှိ။ ထိုတွင်သူမအကြောင်းရေးသားထားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုမျှပါရှိသည်။
As ခင်ဗျားဖတ်နိုင်တယ်, ဆောင်းပါး Prause လိင်စော်ကားသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်သားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမျှမကပြောသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် me, ဒွန် Hilton, Staci အညှောက်နှင့်အခြားသူများကသူ့ကို molester ခေါ်ဆို၏။ ၎င်းသည်သူမ၏အကြိုက်ဆုံးနည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည် ကျွန်တော့် anti-SLAPP ဝတ်စုံကို နှင့် ဟီလ်တန်၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကျွန်မတို့ကသူမကိုကလေးတစ်ယောက်ကို molester လို့ခေါ်တယ်။ ချီးကျူးထောပနာမရှိပါ မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နေသောဤလိမ်လည်မှုကိုထောက်ခံရန် (သူမသည်ကျွန်ုပ်အနိုင်ရသည့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါသောဤစာတမ်းအားထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုရန် Jim Pfaus နှင့် Taylor Kohut တို့ကိုပင်သူဆွဲဆောင်ခဲ့သည်) ငှက်မွှေးငှက်များအတူတကွအိပ်နေကြသည်။
သူမ (1) မှတရားမဝင်အပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော်လည်း Prause သည်“ ရာဇဝတ်သား” ဖြစ်သည်ဟုထိုဆောင်းပါးကမဖော်ပြထားပါ။ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်သူ့ကိုယ်သူမတရား, (2) လိမ်လည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်နှင့် (3) အစိုးရအေဂျင်စီများသို့လိမ်လည်လှည့်စားသောအစီရင်ခံစာများနှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုဖြည့်စွက်။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်လည်းအပြစ်ရှိသည် အသရေဖျက်ခြင်း၊
သူမကသူမဆိုသော်လည်း Prause သည်သူမ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်“ လူများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်” ဟုမဆောင်းပါးကဖော်ပြခဲ့သည် အကြောင်းအရာများကို EEG အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်စောင့်ကြည့်ပေးသည် (တစ်ခါတစ်ရံ orgasm မှ) ။ ၎င်းသည်လူများကို“ စောင့်ကြည့်” နေသလား။ တစ် ဦး ထုတ်လုပ်ရန်ချီးမွမ်းရန်ပုံးတစ်ပုံးထည့်ထားသည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုပုံအောက်မှာ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး). orgasm တှေးတောဆငျခွ ကြောင်းတစ်ခု MLM Pseudo- အစွန်းရောက်သည် ကြီးမားတဲ့နှစ်ကောင်ပညတ်တော်မူ၏ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ရဲ့အစေ့ကိုဘယ်လိုလေဖြတ်မလဲဆိုတာကိုယောက်ျားတွေကိုသင်ပေးဖို့ပါ။ Prause OM လေ့လာမှုအတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုပြတယ် ဗီဒီယိုတစ်ကားကို):
သင်ခေါ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ Prause သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်ဘာသာရပ်များကိုစောင့်ကြည့်နေသည် (သို့မဟုတ်သူမခေါ်သည့်အတိုင်း“ လက်တွဲဖော်လိင်”) ။
စိတ်မကောင်းစရာမဟုတ်ပါ, Prause မှသူမ၏ @BrainOnPorn အကောင့်ကိုသုံးခဲ့သည် Jonathon Van Maren ကိုရှုတ်ချ သူသည်အမျိုးသမီးများကိုခြိမ်းခြောက်ပြီးသေခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်သည်ဟုသူမစွပ်စွဲခဲ့သည်။ LifeSite သတင်းကိုတရားစွဲဆိုမှုနှင့်လည်းသူမခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
The Big Tobacco playbook မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသောနည်းပရိယာယ်များအတွက် Prause နှင့် Ley တို့အား Gabe Deem ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုမှ Van Maren ၏အောက်တွင်အထက်ပါဖော်ပြချက်သည် RealYBOP ၏ tweets ဆယ်ခု၏နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း Nofap မှ Alex Rhodes အားတရားစွဲသူသည်သူမ၏ RealYBOP အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ Nofap ကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကို Nofap LLC မှမဟုတ်ဘဲဖြည့်စွက်ရောင်းသူအားရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်ဖျက်သိမ်းရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
CSATs အပေါ်ပိုမိုတိုက်ခိုက်မှုများ -
Nikky သည်ရှည်လျားသော CSATs ကိုအသရေဖျက်ခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားမကျေမနပ်ဖြစ်နေရန်နှင့်အရှက်ရစေရန်အတွက် "infographics" ကိုဖန်တီးသည်
အခြားသူများက - မေလ, 2017: Prause ခါးပန်း (လိင်ကျန်းမာရေးတိုးဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း) တိုက်ခိုက်
အခြားသူများ - မေ ၂၄-၂၇၊ ၂၀၁၈ - Prause သည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် "စွဲလမ်းမှု" Wikipedia စာမျက်နှာများကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက် sock-puppets များစွာကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
အခြားသူများက - ဇန်နဝါရီလ, 2019: Prause မဟုတ်မမှန်ပြောင်းလဲခြင်း (ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း) ကျင့်သုံး၏လိင်တူချစ်သူ IITAP ကုထုံးစွပ်စွဲကုထုံး
အခြားသူများ - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်။ ။ RealYBOP (Prause) သည် Staci Sprout အားလူမှုရေးလုပ်သားများအမျိုးသားအသင်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့သတင်းပို့ရန် (Staci ၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတရားမ ၀ င်တင်ပို့ရန်) နောက်လိုက်များအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
စစ်မှန်တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကသာလိင်ဆန့်ကျင်ရေးလူကုန်ကူးမှုအဖွဲ့ (ပုံဖော်ထားသောကြယ်ပွင့်ဟောင်းတစ် ဦး ကိုပုံဖော်ထားသည်) ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က“ ED ကိုဖြစ်စေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမရှိသေးပါ” ဟူသောစာတမ်းကိုတွစ်တာ စက္ကူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းအဖြစ်မမေးခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့်ရရှိသွားတဲ့အဖြစ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော။ အတိတ်ကာလက Prause သည်ကုထုံးဆရာ DJ Burr အားအနှောင့်အယှက် ပေး၍ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် twitter ပေါ်မှာသူမမှတက်မတ်တပ်ရပ်ရဲသည်။ သို့သော် Prause ၏နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည်။ RealYBOP ၏ပြောကြားချက်အရ DJ Burr ၏ ၁၄ နှစ်အရွယ်အစ်ကိုအားထောင်မှလွတ်မြောက်စေရန်မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲပြောဆိုမှုသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ သူမသည်ဤသို့သောလိမ်လည်သူ - မည်သူ့ကိုမျှခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိချေ။ DJOS သည် NCOSE နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ NCOSE ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်လုံးဝထူးဆန်းသည်မဟုတ်ပါ။
DJ ကနေနောက်ကျောဇာတ်လမ်း။ တစ် တွစ်တာအမြောက်အမြား
DJ သမားတစ် ဦး ကို set up သူ့အစ်ကိုတွေတရားဝင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရှာ:
သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုတွေမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်သူဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲကာ DJ ကိုအသရေဖျက်ခြင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက် DJ သမားခြိမ်းခြောက်။
RealYBOP သည် Nofap ကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားနေဆဲဖြစ်သည် @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်။ RealYBOP အနေဖြင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်း၏အခြားဥပမာတစ်ခု၊ သူမှားယွင်းစွာဖော်ပြနိုင်သမျှကိုရှာဖွေခြင်း။
စက်တင်ဘာလ 1, 2020: Nofap အကြောင်းနောက်ထပ်သုံးပိုဒ်ကတော့အထက်ကနေ့မှာပဲ။ သူမထောက်ခံသည့်သရော်စာဖြစ်သောဗီဒီယိုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမအသရေဖျက်မှုနဲ့နှောင့်ယှက်မှုမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒါဝိဒ်သည် Ley, အတွက်ပူးပေါင်းမည်။ တနည်းကား, ငါတို့ဆောင်းပါးများအတွက် pornhub ထောက်ခံသူကို - လိုလားသူစာရေးဆရာကိုကိုးလ်အားဖြင့်တစ် ဦး unsourced ပြောဆိုချက်ကိုရှိသည်။
RealYBOP သည် porn ကိုပိတ်ဆို့သောအရာအားလုံးကိုမကြိုက်ပါ၊
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုများကိုကျော်လွှားရန်“ သင်၏ ဦး နှောက်သည်အမှန်တကယ်ရှိနေသေးသည်” ဟု၎င်း၏အမည်ကို“ သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ်ဆန့်ကျင်ခြင်း” ဟုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်နှင့် stalker အကောင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည် (ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကိုခံရသော်လည်း YBOP နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမပြော) ။
သူမကမှတ်ချက်ပေးအကောင့်တစ်ခုကိုအမှတ်အသားလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့် YBOP ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတစ်ခါမှမှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး။ သူမသည်သာအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်မုသာစကားကို။ အဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမရှိပါ။ အဖြစ်မှန်နှင့်အညီ, တွစ်တာဇီဝ "စစ်မှန်သောသိပ္ပံပညာရှင်များ" နှင့် "အစစ်အမှန်ဒေတာ။ " ဖျက်ပစ်
RealYBOP သည်၎င်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်မှားယွင်းစွာတည်ရှိနေသည် ငါ Daniel Burgess7ကြိမ်တရားစွဲဆိုဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Burgess2တရားဝင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုသာပေးပို့ခဲ့ပြီး၊ စာများကိုရပ်တန့်လိုက်ရုံသာမက၎င်းသည်တွစ်တာအကောင့်အတွက်မဟုတ်ဘဲ realyourbrainonporn.com (Burgess မှတ်ပုံတင်ထားသော) အတွက်ဖြစ်သည်။ USPTO ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (YBOP, yourbrainonporn, yourbrainonporn.com) ကိုကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေများသည် Burgess ကို ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ C&D စာ၏ PDF ဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် www.realyourbrainonporn.com ပျောက်ကွယ် ဝဘ်ဆိုက်မှနှင့် YBOP ဆန့်ကျင်ရေးတွစ်တာတို့ကစွန့်ပစ်ထားသော site သို့ link ကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်။
အောက်ခြေလိုင်း - @BrainOnPorn တွစ်တာသည်အများပြည်သူအားလှည့်ဖြားရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိပြorနာများ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောမည်သူမဆိုကို Cyberstalk လုပ်ရန်ဖန်တီးထားသောညစ်ညမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကောင့် မှလွဲ၍ @BrainOnPorn Twitter ဟူသောအယူအဆနောက်ကွယ်တွင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိတော့ပါ။
ဘယ်လိုပဲခေါ်ပါစေ၊ Prause ရဲ့ troll အကောင့်ဟာလိင်လုပ်ငန်းနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်ဆက်ရှိနေ ဦး မှာပါ။
NoFap ကိုရှုတ်ချလိုက်တာက Samantha Cole ။ ထိုအခါ R သည် Brian Watson ထံမှလိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်အားတိုက်ခိုက်သည်။၂၀၂၀၊ သြဂုတ်။ @BrainOnPorn (Prause) ရေးသားချက်များသည် Brian Watson ၏အမှားအယွင်းနှင့်ပြည့်နေသောထိခိုက်နစ်နာမှုမှဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Prause က Watson ၏မှားယွင်းမှုကို Nofap Wikipedia စာမျက်နှာသို့တည်းဖြတ်သည်.)
retweets porn ကြယ်ပွင့်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ, Jiz Lee က:
လိင်ကိစ္စနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည့်“ လိင်လုပ်သား” ကိုပြန်လည်စုစည်းထားသော
စက်တင်ဘာလ 6, 2020Nofap ကိုပိုပြီးအထောက်အကူမပြုတဲ့တိုက်ခိုက်မှု။ ဒါကြောင့် porn = misogyny စွန့်လွှတ်? RealYBOP ၏ထင်မြင်�